ခိုးစားတဲ့အသီးက ပိုခြိုတယျ – My Blog
ကြှနျနေျာ့ မနျနဂြော ( ဂြာကွီး ) ကိုတျောတျော တငျးနပေီဗြာ ။ ကြှနျနေျာ့ ပရောဂကျြ တဈခု ကို တငျပွတယျ ။ သူသဘောကတြယျ ဒါ ကို သဘောမကသြလို ကလဲ ပွောသေးတယျ ဘာလိုတယျ ညာလိုတယျ နဲ့ ။ ထားပါ ဒီလိုပွောတာကတော့ လူကွီးတျောတျော မြား မြား ရဲ့ စိတျဓါတျဆိုတာ ကြှနျနျော သဘောပေါကျတယျတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဗြာ အမျဒီ တငျပွတဲ့ အခါ ဒီပရောဂကျြ ကို သူပဲ ဆှဲထား သလိုလို သူကိုယျတိုငျပဲ အပငျပနျးခံထားရသလို တငျပွတယျ ။ အမျဒီက ကြှနျတော့ ပရောဂကျြကို လကျခံလိုကျတယျ ။ ပရောဂကျြ တဈခု အောငျမွငျသှားတော့ ကြှနျနျော တို့ ရုံးအဖှဲ့ တှေ ပြျောကွတာပေါ့ ။
ဂြာကွီးကတော့ ရုံးအဖှဲ့သားတှေ ရှမှေ့ာ ကြှနျနေျာ့ ကို ကြေးဇူးတငျကွောငျး တောငျမပွောဘူး ။ ကြှနျတော့မှာ မအိပျမနေ အပငျပနျး ခံပီး ကွိုးစားခဲ့လိုကျရတာ ။ ကြှနျနျော တျောတျော ဒေါသ ဖွဈမိတယျ ။ ဒေါသ ဖွဈတိုငျးလညျး ဒေါသထှကျမိရငျ ကြှနျနေျာ့ အလှနျ ဖွဈဦးမယျ ။ ဒီအလုပျက လညျး ကြှနျနျော မထှကျခငျြ ။ ဂြာကွီး နာမညျ က ဦးဇျောဝငျးနိုငျ ၊ အသကျက လေးဆယျငါးလောကျရှိပီ ။ တျောကီကတော့ တျောတျော ကောငျးတယျ ကြှနျနျောတို့ လူငယျတှေ လိုကျမမှီ ။ တခြို့ ကပွောတယျ ဂြာကွီး စကားပွောလိုကျရငျ စိတျဆိုးနတေဲ့သူတောငျပွုံးရယျသှားတယျ ။
ယောကြားအခငျြးခငျြး တောငျ ဖငျခံခငျြသှား အောငျ ပွောတတျတယျ ဆိုပီး ပွောကွတယျသေးတယျ ။ တကယျလညျး တျောကီ တျောတျော ကောငျးပါတယျ ။ ကြှနျနျော သူ့ကို ဒေါသဖွဈပီး သှားရှဲလိုကျလို့ သူ့တျောကီအောကျမြောပီး ကြှနျနျောပါ ဖငျပိတျပီး ပွနျလာရမှာ ကွောကျလို့ ( ဟီးးးးး) ဒေါသတှေ မြိုခပြီး ပါးစပျပိတျပီး ပဲ နလေိုကျတော့တယျ ။ ဘယျလို တျောကီတှေ ပဈပီး ဖနျ ထားလဲတော့ မသိဘူး သူ့ မိနျးမ က သူရုပျရညျနဲ့ မလိုကျအောငျ ခြောတယျ ။ ကခငျြမ လုံးကွီးပေါကျကွီး ၊ အသကျက ၃၀ ဝနျးကငျြ လောကျပဲ ရှိဦးမယျ ။ သူ့မိနျးမ ဘကျက လညျးခမျြးသာတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျး ။ သူ့ မိနျးမ လညျး သူ့တျောကီ ကွားဝငျသှားပီး ဖငျခံပီး ယူ လိုကျရတာ ဖွဈမယျ ။ သူ့မိနျးမ နဲ့ ကြှနျနျော ခနခန ဆုံဖူးပါတယျ ။
တကယျလုံးကွီးပေါကျ မငျးကွီးကွိုကျကွီး အသကျက သာ သုံးဆယျလောကျ ဆိုပမေယျ့ နထေိုငျတာကတော့ တကယျ လူကွီးစတို ငျလျ ။ မွနျမာဝတျစုံ ခါးတို မြား ဝတျထားလိုကျရငျ တျောတျောကွညျ့ကောငျးဗြ ။ တခကျြတခကျြ ဘိုကျသားဖှေးဖှေးလေး မြား ပျေါ သှားတာမြိုး ကြှနျနျော မကွညျ့ပဲ မနနေိုငျ ။ မွငျအောငျပွောရရငျ မငျးသမီးနန်ဒာလှိုငျရဲ့ Grand Royal အရကျကွျောငွာပိုစတာထဲမှာ မွနျမာဝတျစုံ အနကျလေး နဲ့ ရိုကျထားတာ မွငျဖူးကွမှာပေါ့ ။ ရုပျခငျြမတူပမေယျ့ အဲ့လို ဆိုဒျမြိုးဗြ ဖငျအိုးကွီးကွီး နို့ တငျးတငျး နဲ့ အသားဖွူဖွူ ကခငျြမ ။
စကားက သ နဲ့တ နဲ့ မကှဲဘူး ။ နုတျခမျးလေးက လညျး မထူမပါး ။ မကျြခုံးကော့ကော့ ဖွငျ့ တျောတျော ခဈြစရာကောငျးတယျ ။ ခဈြစရာကောငျးတယျ ဆိုတာ ထကျ ကွိုကျစရာကောငျးတယျဆိုရမလား။ အပွငျထှကျရငျ မွနျမာ ဆနျဆနျ ပဲ ဝတျတတျတာမြား တယျ ။ အိမျနရေငျး ဆိုရငျ ဂါဝနျပှပှကွီး နဲ့ ။ကြှနျနျောက အလုပျကိစ်စ နဲ့ သူတို့ အိမျခနခန ရောကျဖွဈတော့ ကြှနျနျော နဲ့လညျး ရငျးနှီး နတေယျ ။ ဂြာကွီးနဲ့ ကြှနျနျော နဲ့ က သိပျသာ မကျြနှာကွောမတညျ့တာ အလုပျကိစ်စ ဆို ကြှနျနေျာ့ ကို ပဲ သူယုံကွညျတော့ တျောတျော မြားမြား ကိစ်စတှေ ကြှနျတော့ကို ပဲ ခိုငျးတတျတယျ။ မကျြနှာသာတော့မပေး ။ သူတို့မှာ လေးနှဈအရှယျ သားလေး တဈ ယောကျရှိတယျ ။ တျောတျောမြောကျရှုံးအောငျ ဆော့တဲ့ကောငျ ။ အလုပျကိစ်စ ရှိလို့ သူ့အိမျကို ရောကျရငျ ကြှနျနျော ကောငျးကောငျး မထိုငျရ ။ခေါငျးပျေါထိ တကျဆော့တယျကောငျ ။ သူ့ အိမျသှားရငျ ဘောငျးဘီဝတျသှားရတယျ ပုဆိုးဝတျထားရငျလညျး ခိုငျခိုငျသာ စညျးထား ။
သူတို့နတေဲ့ အိမျနဲ့ ကြှနျနျော တို့ ရုံးနဲ့ နဲနဲ တော့ အလှမျးဝေးတယျဗြ ။ ပိုကျဆံရှိတော့ ရုံးက ပေးထားတဲ့ အိမျမှာ မနပေဲ သူတို့ အိမျမှာ သူတို့နကွေတယျ ။ ရုံးကနေ ဆိုငျကယျနဲ့သှားရငျ နာရီဝကျ ကြျောလောကျ မောငျးရတယျ ။ ခွံနဲ့ဝနျး နဲ့ တထပျတိုကျပုလေး ဆောကျ ထားတယျ ။ အိမျးလေး က နခေငျြစရာလေး။ တဈနေ့ ( တနင်ျဂနှနေညေ့နေ လေးနာရီ ) ကြှနျနေျာ့ ပရောဂကျြ ကိစ်စ နဲ့ ပတျသကျပီး ရှငျးလငျးစရာတှေ ရှိတာနဲ့ ဂြာကွီး အိမျကို စီးတျောယာဉျ ဆိုငျကယျလေး ဖွငျ့သှားခဲ့တယျ ။ ခွံရှေ့ ရောကျတော့ လူချေါဘဲလျ တီးလို ကျပီး စောငျ့နတော ခနနတေော့ ဂြာကွီးမိနျးမ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ဂါဝနျပှပှ ကွီး နဲ့ တခါးလာဖှငျ့ပေးတယျ ။ “ဟော မောငျလငျးနိုငျ ဘာ ကိစ်စတုနျး လာအိမျထဲဝငျ” “ဟုတျကဲ့အမ ကြှနျနျော ပရောဂကျြကိစ်စ တှေ ရှငျးမလို့ပါ မနကျဖွနျ ပရောဂကျြ ကိစ်စ အစညျးအဝေး ရှိ လို့ပါ ” “အျော ..အေးးအေးး လာထိုငျဦး အမ ကျောဖီ သှားဖြျောလိုကျဦးမယျ မငျး ဆရာ က ဂေါကျဖျ သှားရိုကျတယျ သူမနေ့တော လားမသိဘူး အမ ဖုနျးဆကျပေးမယျ ”
ဟုတျကဲ့အမ ” ကြှနျနေျာ့ ရှကေ့နေ ကော့ပတျ ကော့ပတျ နဲ့ နောကျခနျးထဲကို ဝငျသှားတယျ ။ ဂါဝနျ အပှကွီး ဝတျထားတာတောငျ နောကျအိုးဆုံကွီးက ကော့ထှကျနတောပဲ ၊ အိမျမှာ တိတျဆိတျနတေယျ ဟိုမြောကျလောငျးလေး မရှိဘူးလားမသိ ။ ဧညျ့ခနျးထဲမှာ ဖှငျ့ထားတဲ့ စကိုငျးနကျက ကိုးရီးယားဇတျလမျးတှဲ ကွညျ့ရငျး ကြှနျနျော ထိုငျစောငျ့နလေိုကျတယျ ။ ဆယျမိနဈလောကျ နတေော့ ကျောဖီခှကျတခှကျ ကိုငျရငျး ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ပွနျထှကျလာတယျ။ ” မငျး ဆရာက စောငျ့ပါဦးတဲ့ သူ ဂေါကျဖျ ရိုကျရငျးတနျးလနျး နဲ့ မို့ တဲ့ လူကွီးတှလေညျး ပါလို့ နောကျ ၂ နာရီလောကျကွာဦးမယျတဲ့ ” “အျော ..ဟုတျကဲ့ ရပါတယျ စောငျ့ရမှာပေါ့ အခုရှငျးခဲ့မှ ဖွဈမှာ မနကျဖွနျ အမျဒီကို ပွနျရှငျးရမှာမို့လို့ပါ ။ ဒါနဲ့ သားလေးမတှပေ့ါလား ” ” မငျးတူက ကြောငျးပိတျရကျ သူ့ အဘိုးတှဆေီ ပို့ထားတယျ တပတျကြျောပီ သူမရှိတော့လညျး ပငျြးစရာ အမလညျး ပငျြးနတော တနတေ့နေ့ ကိုးရီးယားကားပဲ ကွညျ့နရေတယျ
ကျောဖီ တောကျဦး ငါ့မောငျ ” (သူ့စကားအတိုငျးသနဲ့တမပီတမူရငျးအတိုငျး ပွောငျးရေးလိုကျတယျဗြာ) ကြှနျနျော နဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျဆကျ တီမှာ တငျပလငျခြိတျထိုငျရငျး ကြှနျနျော နဲ့ စကားတှေ ပွောဖွဈတယျ ။ တငျပါလငျခြိတျထိုငျထားတော့ ဂါဝနျ စ ကို ခွထေောကျ နှဈ ခြောငျးကွား ညှပျထားတယျ ။ အောကျက ခွသေလုံးသား တှကေ ဒူးနားမရောကျတရောကျ ။ ခွသေလုံးသား က ဖှေးဥနတောပဲ ။ သခြောကွညျ့ရငျ မှေးညှငျး နူနုလေးတှတေောငျမွငျနရေတယျ ။ သသေခြောခြာကွီးတော့ မကွညျ့ရဲ ကြှနျနေျာ့ ဂြာကွီး ရဲ့ မိနျးမ ကိုး..။ သူကလဲ ဘယျလို အနအေထားမှနျးမသိ ။ ဂါဝနျက လကျပွတျဂါဝနျ ဆိုတော့ တခကျြတခကျြ ဂြိုငျးအောကျက ပျေါပျေါသှား ပီး ဘျောလီစ အပွာနု ရောငျလေး လှမျးတှရေ့သေးတယျ ။ ဆံပငျတှကေို နောကျလှနျစညျးထားပီး မကျြနှာမှာ ဘာမှ မလိမျးထား ။ အပွငျထှကျတိုငျး တမြိုးပီးတမြိုး ပွောငျး ဝတျတတျတဲ့ ဆှဲကွိုးတှေ နားတောငျးတှေ ဘာတဈခုမှ မဝတျထားဘူး ။
မကျြနှာအသား ဖွူဖွူလေး က ရှငျးပီး ခဈြစရာကောငျးတယျဗြာ ။ သူနဲ့သာ စကားတှေ ပွောနတော ကြှနျနျော စိတျထဲကတော့ စားနကြေ အကငျြ့ အတိုငျး ဒျေါမာမာခိုငျ ကို စိတျနဲ့ ပွဈမှား နမေိပီ။ အလုပျတှေ ရှုပျနတောနဲ့ အဲ့ဒီကိစ်စ မလုပျဖွဈတာလဲ ကွာတော့ အောကျက သ ကောငျ့သား က ထကွှခငျြနတေယျ။ ကြှနျနျော ရှိုးနတော ကို သတိထားမိလို့လား မသိ တခကျြတခကျြ ကြှနျနေျာ့ မကျြလုံးတှေ ကို စိုကျစိုကျကွညျ့တယျ ။ တအိမျလုံးမှာလဲ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး နဲ့ ကြှနျနျော နှဈယောကျတညျး ။စိတျတှေ က သောငျးကနျြးနတေယျ ။ ထပွနျ ပီး အပွငျမှာ ၂ နာရီလောကျ အခြိနျဖွုနျးပီး မှ ပွနျလာ ရမလား ကြှနျနျော တှေးလိုကျသေးတယျ ။ ဒါပမေယျ့ မပွနျဖွဈ ကြှနျနေျာ့ အတှေ့ အကွုံ အရ သူ့ အကွညျ့တှကေလညျး တမြိုးပဲ ။
” ငါ့မောငျ ပငျြးနပေီလား အမ က စကားပွောဖျောမရှိလို့ စကားတှေ လြောကျပွောနတော မငျးဆရာကလဲ အလုပျကမြား အလုပျအားရငျ ဂေါကျဖျ သှားရိုကျ နဲ့ သားလေး မရှိတော့ အရမျးပငျြးတာပဲ ” ” ရပါတယျ မပငျြးပါဘူး အမ ကြှနျနျော အမ နဲ့ စကားပွောရတာ ပြျောပါတယျ ဂြာကွီး နဲ့သာ သိပျ အပေါကျအလနျးမတညျ့တာ ဟီးးး ဟီးးး ” ” ဟုတျပ မငျးဂြာကွီးနဲ့လညျး အမ နဲ့ သိပျ အပေါကျလနျးတညျ့တာ မဟုတျဘူး ကလေးတဈယောကျသာ ရသှားတာ ” ဒျေါ ခိုငျခိုငျဦး ပွောပီးမှာ စကားက အနှောကျအသှားမလှတျဖွဈသှားတာ သတိထားမိသှားတယျထငျတယျ။ စကား အပေါကျအလနျးမ တညျ့တာပွောတာနျော ငါ့မောငျ ” ကြှနျနျောလညျး စမျးသပျကွညျ့တဲ့ အနနေဲ့ စကားနဲနဲ စကွညျ့လိုကျတယျ။
“ကြှနျနျော လညျးစကားပွောတာ အပေါကျအလနျးမတညျ့တာ ပွောတာပါ ကနျြတာတော့ အပေါကျအလနျးတညျ့လို့ ကလေးတဈ ယောကျရလာတာပေါ့နေျာ့ ဟီးးး ” “ဟငျးးးဟငျးးး ငါ့မောငျနျော လူပြိုသာ ဆိုတယျ စကားကလဲ ” ” ဟီးးး အမ နဲ့ ကြှနျနျောလညျး အပေါကျအလနျးတညျ့ပါတယျနျော ..စကားပွောရတာပါ” ” ဟိတျဟိတျ .. .တျောပီ စကားပဲ အပေါကျအလနျးတညျ့ ကနျြတာလာမ တညျ့နဲ့ ဟငျးးး ” ” ကနျြတာလညျး အပေါကျအတနျး တညျ့ရရငျ ကောငျးမယျထငျတယျနျော ” ကြှနျနျော ပွောခလြိုကျတော့ ဒျေါခိုငျ ခိုငျဦး မကျြလုံးပွူးသှားတယျ ။ အရငျက သူနဲ့ ကြှနျနျော ၂ ယောကျတညျး စကားသခြော မပွောဖူး ။ သူမ အနနေဲ့ လညျး ကြှနျနေျာ့ ကို ဒီလောကျ ရဲ လိမျ့မယျ မထငျခဲ့ဘူးထငျတယျ ။
” ဟိတျ ငါ့မောငျ စကားတှေ မကြှံ နဲ့နျော မငျးဂြာကွီး သိရငျ မငျး အလုပျပွုတျ မယျနျော ” ” အမ မတိုငျရငျ မသိပါဘူး ” ” မတိုငျဘူးလို့ ဘယျသူက ပွောလဲ ” ” အမ မကျြလုံးတှကေ ပွောနတေယျလေ ” ဒျေါခိုငျခိုငျဦး မကျြလှာခသြှားတယျ ။ အတှေ့ အကွုံအရ ကြှနျနေျာ့ ဘကျက ကိုးဆယျဆလောကျ သာနပေီ ။ ကြှနျနျော ဘာဆကျ လုပျရမလဲ သိပီလေ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး နား ကို ဖွေးဖွေးခငျြးတိုးကပျသှားခဲ့တယျ ။နောကျတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦးရဲ့ ပုခုံး နှဈဘကျပျေါ ကို ကြှနျနေျာ့လကျနှဈဘကျ ကရြောကျသှားပီ။ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ခေါငျးကို ငုံထားတယျ ဘာမှမပွော ၊ ပုံခုံးသားလေး တှေ ကို အသာပှတျ ကာ လကျမောငျးရငျးမှ ကိုငျ၍ မတျတပျရပျစလေိုကျတော့ အလိုကျသငျ့ပါလာတယျ။
” မကောငျးပါဘူး ..ငါ့မောငျရယျ ..မငျးဆရာ ပွနျလာတော့မှာ ” ခါးမှ ဆှဲဖကျလိုကျကာ နီထှေးထှေး နုတျခမျးတဈစုံအား ငုံခဲလိုကျ တယျ ။ ” ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” အငျ့..အူးးး ဖလူးးးး” ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ရုနျးဖယျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့လကျက ခါးကို တငျးကွပျစှာဖကျ ထားပီး ကြှနျတျောနဲ့ ကိုယျလုံးခငျြး ဆှဲကပျထားလိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ဘယျဘကျလကျက သူ့မ နဲ့ ခေါငျးကို နောကျကနေ ပွနျကိုငျ ထားပီး ညာဘကျလကျက ဂါဝနျပါးပါး ပျေါမှ တငျပါးတှကေို ပှတျပေးနရေငျး နုတျခမျးခငျြး မလှတျတမျး နမျးပဈလိုကျတယျ။ ပါးစပျ ကို အတငျး စထေ့ားပမေယျ့ တခကျြတခကျြ နုတျခမျးဟ သှားတဲ့အခြိနျ ကြှနျနေျာ့ လြှာ နဲ့ သူမ လြှာ ကို လုံးထှေးရဈပတျလိုကျတယျ ။ ” ပွှတျ ပွှတျ ” ” အငှးးးဖလူးးးးအူးးးး ” ကြှနျနေျာ့ညာဘကျလကျက တငျပါးအနှံ လြောကျပှတျနရေငျး သတိထားမိလိုကျတယျ ၊ အတှငျးခံ မဝတျထားပါလား ။ ဒါကွောငျ့ ခြောမှတျနတောကို။
အနမျးတှေ ကို မရပျသလို ကြှနျနေျာ့လကျကလဲ တငျပါး တလြောကျ ပှတျဆှဲရငျး တငျပါး နှဈခွမျးကွားကို နှိုကျနှိုကျပေးမိတယျ ။ ထှားလှနျးတဲ့ တငျပါးတှကွေောငျ့ ကြှနျနေျာ့ လကျခြောငျးမြားက တငျပါး နှဈခွမျးကွား ညှပျညှပျသှားသလို ခံစားမိတယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ရငျဘတျ တှကေ ကြှနျနေျာ့ ရငျဘတျ နှငျ့ ဖိကပျနမေိတာကွောငျ့ သူနို့ နှဈစုံရဲ့ အထိအတှေ့ ကို အောကျခံ ဘျောလီမှ တဆငျ့ သိရှိမိတယျ ။ ” ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” အားးး တျောတော့ ကှာ ငါ့မောငျ မငျး ဆရာသိသှားရငျ မိုးမီးလောငျမယျ ” ” မသိပါဘူး မမ ရယျ ဂြာကွီးက ၂ နာရီလောကျကွာဦးမှာပဲ ” “အာာာာ မသိတော့ဘူးကှာ ပွဿနာ တတျမှာ ကွောကျတယျကှာ ” ” ကြှနျနျော ခွံတခါး သှားပိတျထားလိုကျမယျ ဂြာကွီး ကား ဝငျလာရငျ သိတာပေါ့ ”
ကြှနျနျော ဧညျ့ခနျးမှ အလောတကွီး ထှကျကာ ခွံဝနျးတံခါး ကို သော့သှားခတျလိုကျတယျ ။ ပီးတာ နဲ့ အိမျပျေါ တကျလာတော့ ဧညျ့ခနျးတှငျ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ရှိမနတေော့ ၊ အတှငျးခနျးဘကျ ဝငျလာလိုကျတော့ အိပျခနျးတံခါး စထေ့ားတာ တှလေို့ကျလို့ တံခါး ကို အသာတှနျးလိုကျတော့ ဂကျြမခထြား ၊ အတှငျးခနျးထဲ ကြှနျနျော လှမျးဝငျလိုကျတယျ ။ မှနျတငျခုံရှေ့ မှာ မတျတပျရပျနတေဲ့ ဒျေါခိုငျ ခိုငျဦး ။ တံခါးကို အသာ ပွနျပိတျလိုကျပီး ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ထံ ဖွေးဖွေးခငျြးလြောကျလာလိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ကို လှညျ့မကွညျ့ ။ ကြှနျနျော နောကျဘကျကနေ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ကို ဖကျလိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့လကျနှဈဘကျလုံးက သူမ ရငျဘတျ ပျေါ ကို ကှကျတိ တငျထားရငျး ဂုတျသားလေးတှေ ကိုနမျးစုပျလိုကျတယျ ။ ” အာ.ယားတယျကှာ အဲ့နရော မနမျးနဲ့ ဘယျလိုကွီးမှနျးလဲမသိဘူး တ မြိူးကွီး ” ညူတူတူ အသံဖွငျ့ပွောတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လကျတဘကျက နို့အုံတှကေို ကိုငျနရောမှ အောကျကို လြောခလြိုကျပီး ပေါငျ ခှဆုံကွားကို ဝငျလိုကျတယျ ။ လကျခြောငျးမြားက နရောမှနျကို ကှကျတိ ။
” အားးးး မောငျလေးးးး ဖွေးဖွေး ” ဂါဝနျစ ပျေါမှာ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး အဖုတျကွီး ကိုနှိုကျပေးနလေိုကျတယျ ။ အဖုတျ ထဲမှ အရညျစိုတိုတိုက ဂါဝနျစမှာ စေးကပျကပျ ဖွဈလာပီး ကြှနျနေျာ့ လကျကို ပါ စိုလာတယျ ။ ” အားးးးအငျးးးမောငျလေးး ကောငျးတယျ အားးးဖွေးဖွေး ” ကြှနျနေျာ့ ဘောငျးဘီအောကျမှ သကောငျ့ သား ကလဲ ထနျနပေီ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တငျပါးကွီးတှေ နဲ့ ဖိကပျထားရငျး စောကျဖုတျကို မနားတမျး ပှတျဆှဲပေးနမေိတယျ ။သူမ တငျပါးကွီးတှကေ လညျး နောကျဘကျကို ကော့ကော့လာတယျ ။ တဖွညျးဖွညျး နဲ့ ကြှနျနျော သူမ ဂါဝနျစ ကို အောကျမှ ဖွေးဖွေး ခငျြး အပျေါ ကို ဆှဲတငျလိုကျတယျ ။ အဖုတျကို နှိုကျကွညျ့လိုကျတော့ စောကျရညျက တျောတျော ရှဲနပေီ ။ ဂါဝနျကို အပျေါထိ ဆှဲမ လိုကျပီး ခေါငျးမှ ခြှတျပဈလိုကျတယျ ။ တလကျစတညျး ကြှနျနေျာ့ ဘောငျးဘီ ကိုလညျး ခါးပတျခြှတျ ဇဈဖွုတျကာ အောကျကို ဆှဲ ခြှတျလိုကျတယျ ။
အရမျးညောငျးနပေီ ဖွဈတဲ့ ကြှနျနေျာ့ လီးက ခကျြခငျြး ငေါကျကနဲ အပျေါ ကို ထောငျတကျလာတယျ ။ ဒျေါခိုငျ ခိုငျဦးက ကုတငျစောငျးမှာ တငျပလငျ ခြိတျကာ ထိုငျရငျး ကြှနျနေျာ့ ကို ကွညျ့နတေယျ ။ တငျပလငျခြိတျ ထိုငျထားတော့ အိုးကား ကားကွီးမြားဘေးကို ထှကျနတေယျ။ အဖုတျကိုတော့မမွငျရ ။ စောကျဖုတျမှေး တှကေတော့ ဆီးခုံ အစပျမှာ ပျေါနတေယျ ။ သူမ ရှမှေ့ာ ပဲ ကြှနျနေျာ့ လီးကို ကိုငျပီး ဂှေ တခကျြနှဈခကျြ လှိမျ့ပွလိုကျတယျ။ ” အာာာ နဲတာကွီး မဟုတျဘူး ” ကြှနျနျော လီးဒဈ ကို ဖွဲပွလိုကျတော့ သူ့ လကျကလေး နဲ့ မရဲ တရဲ လာကိုကျကွညျ့ပီး လကျညိုးလကျမ လေး နဲ့ ကြှနျနေျာ့ လီးဒဈလေး ကို အသာဖိကွညျ့ တယျ ။ ပဈြ ကနဲ အရညျကွညျလေး ထိပျဝ ကို ထှကျသှားတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး သဘောကသြှားတယျ ။ ကြှနျနျော သူမ ပုခုံးမှ ကိုငျ ကာ ကုတငျပျေါကို တှနျးလှဲလိုကျတယျ ။ တငျပလငျခြိတျထားတာ ပွသှေားပီး ခွနှေဈခြောငျး က ကုတငျ အောကျ တှဲလောငျးကကြာ ပကျလကျလနျသှားတယျ ။ ကြှနျနျော ကုတငျအောကျမှာ ဒူးထောကျထိုကျလိုကျပီး ပေါငျနှဈခြောငျး ကို ကားလိုကျတော့ သူမရဲ့ အဖုတျကွီး ပွူးထှကျလာတယျ ။ တျောတျော အမှေးထူသော အဖုတျ ။
ဆီးခုံ အစပျမှ အဖုတျနုတျခမျးသားတှနေား အထိ အမှေးမြား က ထူထဲစှာ ပေါကျနတေယျ ။ ခနခန ရိတျလို့ လားမသိ ။ အရမျးသနျ သောစောကျမှေးမြား ။စောကျမှေး တှေ ကို လကျဖွငျ့ အသာ ဆှဲဖယျလိုကျတော့ အောကျမှ စောကျစိ ပွူးပွူးလေး ထှကျလာတယျ ။ စောကျမှေးတှေ သခြော ဖယျကွညျ့လိုကျတော့ အဖုတျ က မဲ မနဘေူး ။ ကခငျြမ ဆိုတဲ့ အတိုငျး ဒျေါခိုငျခိုငျဦး က အသားဖွူတယျ စောကျဖုတျက ဖွူမနပေမေယျ့ အညိုရောကျဘကျသနျး သလို ရှိသလိုပဲ ။ စောကျခေါငျး အတှငျးသားတှကေတော့ နီရဲရဲ အနအေထား ။ ပေါငျနှဈဘကျကို အပျေါဘကျကို ထောငျလိုကျပီး ကားပေးလိုကျတော့ အောကျဘကျက စအိုဝ ညိုတိုတို လေး ပါတှလေို့ကျရတယျ ။ စအို အဝမှာပငျ အမှေးတှေ တဈပငျစနှဈပငျစ ပေါကျနသေေးတယျ ။ ဆီးခုံအပျေါ အစပျလောကျမှတော့ ကလေး မှေးတုနျးက ခှဲမှေးထားဟနျရှိတယျ ကနျ့လနျ ပွတျ အမာရှတျ ခွောကျလကျမခနျ့ရှိတယျ ။ ကြှနျနျော ဒူးထောကျလြှကျ အနအေထားကပငျ စောကျဖုတျ နုတျခမျးသား အဖတျလေးတှကေို ဖွဲ လိုကျကာ လြှာအပွားလိုကျ အဖုတျပျေါ တငျလိုကျတယျ။
” အားးးးမောငျလေ ” ” ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” ပလကျပလကျ ..ပလကျ ” ” အားးး အငျးးးးး ကောငျးတယျ မောငျလေး အားးးးရှီးးးးး ” ကြှနျနျော လြှာက စောကျဖုတျတငျမဟုတျ စောကျဖုတျနှငျ့ လကျတလုံး ခွားသာ ရှိတဲ့ စအို ညိုတိုတို ခရပှေငျ့ အထိ ပါ အလြှားလိုကျ ဆှဲဆှဲ ပီး ယကျပဈလိုကျတယျ ။ကြှနျနျော လကျနှဈဘကျက ပေါငျ နှဈ ဘကျကို ရှေ့ သို့ တှနျးကနျပေးထားသလို ဒျေါခိုငျခိုငျဦးကလဲ သူမ ခွထေောကျ နှဈခြောငျးကို လကျနှဈဘကျမှ လှမျး၍ ဒူးကောကျ ဝတျနားကို လှမျးကိုငျကာ ဆှဲ ထားတော့ တငျပါးကွီးက အပျေါကို ခပျမွောကျမွောကျ အနအေထားဖွဈနတေယျ။ “.ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” အားးးး မောငျလေးရယျ ကောငျးနပေီ အားးးးးး ” ” ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” အားးးး ဟုတျတယျ အတှငျး ထဲကို လြှာ နဲ့ ထိုးပေး အားးးးအရမျးကောငျးတယျ ” ကြှနျနျော လကျနှဈဘကျ ကို စောကျဖုတျ ဘေးသား နုတျခမျးတှေ ကို ဆှဲဖွဲလိုကျကာ အဖုတျထဲသို့ လြှာကို ထိုးထိုးပီး ထညျ့ကာ ယကျပေးလိုကျတယျ ။ တငျပါးကွီးကွီး ပေါငျတံကွီးကွီး ကွားထဲမှာ ကြှနျနျော မကျြနှာတဈခုလုံး နဈမွုပျနသေလိုပဲ ။
စောကျပတျ အနံအသကျ သိပျမရှိ သခြောသနျ့စငျထားပုံလဲရတယျ ။ ညှီစို့စို့ အဖုတျနံက တော့ ရှိတယျ ။ ” ပွှတျ ပွှတျ ” တခကျြတခကျြ စောကျစိ ကို နုတျခမျးသားဖွငျ့ ဖိဖိ ကိုကျသလိုမြိုးလုပျလုပျပေးလိုကျတယျ။ ” အားးးး ကောငျးတယျမောငျ ရယျ…. မမ ပီးတော့မယျထငျတယျ ” ” ပလကျ ပလကျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” အားးးးး ကောငျးတယျ မောငျ အားးးးထှကျကုနျပီ အားးးထှကျ ထှကျကုနျပီ ” ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တဈယောကျ ငွီးတှားသံတှကေယျြလာကာ သူမ စောကျစိကို သူမ လှမျးပှတျရငျး အဖုတျ အခေါငျး အတှငျး မှ အရညျတှေ ညှဈညှဈခတြယျ ။ ကြှနျနျော ယကျပေးနတော ကို အသာ ဖယျလိုကျပီး အဖုတျကို သခြောကွညျ့နမေိတယျ ။ အဖုတျ အတှငျးသားမြားမှ လှုပျစလှုပျစိ ဖွငျ့ အရညျကွညျလေး တှေ စိမျ့စိမျ့ ကလြာတာ တှလေို့ကျတယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တဈ ယောကျ မလိုးရသေးခငျမှာ ပငျ တဈခြီ ပီးသှားခွငျး ဖွဈသညျ ။ စဉျးစားမိသလောကျ အဖုတျ အယကျ မခံရတာ ကွာနပေီ ဖွဈပီး အဖုတျ အယကျ ခံလိုကျရတာ ကွောငျ့ ခကျြခငျြး ဆိုသလို စိတျတှေ မွောကျတကျကာ ပီးသှားခွငျး ဖွဈနိုငျသညျ ။
” အားးး မောငျ လေး အရမျးကောငျးတာပဲ .. တကယျကောငျးတယျ ပီးသှားတယျ ” ရှကျကိုးရှကျကနျး အမူအရာဖွငျ့ ကြှနျနေျာ့ ကို ခေါငျးထောငျ ကွညျ့ကာ ပွောတယျ ။ ကုတငျဘေးမှ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ဂါဝနျ ကို ယူကာ ကြှနျနျော နုတျခမျးမှ စောကျရညျတှေ သုတျလိုကျပီး မတျတပျ ထရပျလိုကျတယျ။ ” မမ တဈယောကျတညျး ပီးနကေောငျးနလေို့ မဖွဈဘူးနျော ” ကြှနျနေျာ့ လီး ကို လကျဖွငျ့ ဂှလေိမျ့ပွလိုကျ တယျ ။ ” အငျးပါ မမ သဘောပေါကျပါတယျနျော ” ပကျလကျ လှနျနရောမှ သူမ လကျကို ကြှနျနေျာ့ဆီ ကမျးပေးတာ နဲ့ ကြှနျနျော ဆှဲ ထူလိုကျတယျ ။ ကြှနျနျော က ကုတငျဘေးမှာ မတျတပျရပျ အနအေထား သူမက ကုတငျပျေါမှာ ထိုငျလြှကျအနအေထား ကြှနျနေျာ့ လီးက သူမ မကျြနှာနှငျ့ တတနျးတညျး ။ ထို့နောကျ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး က ကြှနျနေျာ့ လီးတံဆီကို လကျလှမျးလိုကျတယျ။ ” ပှမျပှမျ ” ကြှနျ နျောရော ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ကော လနျ့ဖနျြ့ သှားတယျ ။
အိမျရှမှေ့ ကားဟှနျးသံ ။ ကြှနျနျော ဘေးနားမှာ ခြှတျထားသော ဘောငျးဘီ ကို အမွနျကောကျဝတျ သူမကလညျး ဘေးမှ ဂါဝနျကို ခေါငျးမှ လြှို ဝတျကာ အခနျးအတှငျး မှ အိပျယာခငျးတှေ သခြောပွနျဖွနျ့ ကာ ဧညျ့ခနျး ကို ခပျသုတျသုတျထှကျလာလိုကျတယျ ။ပီးတော့ ကြှနျနျောလညျး ရုပျတညျတညျ ဖွငျ့ ဧညျ့ခနျးမှာ ထိုငျနလေိုကျပီး သူမက တော့ အိမျရှေ့ တံခါးကို သှားဖှငျ့ပေးတယျ ။ ဂြာကွီး ရောကျလာတာ လညျး မွနျလိုကျတာ လို့ စိတျထဲမှာ တှေးပီး နာရီကွညျ့လိုကျ တော့ ကြှနျနျော တို့ အလုပျဖွဈနတော လေးဆယျ့ ငါးမိနဈ ကြျောသှားတာ သိလိုကျရတယျ ။ ဂြာကွီး ရောကျလာပီး ဒျေါခိုငျခိုငျဦး လညျး အခနျးထဲ ဝငျသှားတယျ။ ကြှနျနျော နဲ့ ဂြာကွီး အလုပျကိစ်စ တှေ ပွောဆိုပီး ပွနျလာဖွဈလိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ညီတျောမောငျ ကတော့ အဆငျမပွဘေူး ။ အခနျးကို ပွနျရောကျမှ ပဲ ကြှနျနျော ဂှလေိမျ့လိုကျရငျး အဆုံးသတျပေးလိုကျရတယျ ။ ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ကို ကြှနျနျော ပိုငျနပေီလေ ။ တဈရကျရကျတော့ အဆငျပွမှောပါ ။ အခှငျ့အရေးသာမယျ့နေ့ ကို စောငျ့နလေိုကျတယျ ။
ဒီကွားထဲ ဂြာကွီး ကို ကြှနျနျော မကျြနှာခြို သှေးကာ အလုပျကိစ်စ တှေ အဆငျပွအေောငျ လုပျပေးနခေဲ့တယျ ။ ခကျတာ တခုက ဂြာကွီး နဲ့ ရုံးမှာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျလိုကျတိုငျး သူ့မိနျးမ စောကျဖုတျ ကွီး ပွေးပွေးမွငျနမေိတယျ ။ ဂြာကွီးမိနျးမကို ကြှနျနျော ဂြာ ပေး ထားတာကိုတော့ ဂြာကွီးကတော့ မသိရှာ။တဈရကျ တနင်ျဂနှေ နေ့ နလေ့ညျခငျး ကြှနျနေျာ့အခနျးမှာ အခနျးအောငျးပီး အိပျနတေုနျး ဂြာကွီး ဆီက ဖုနျးလာတယျ ။ ဂြာကွီး အိမျကို သှားဘို့ ကို အလုပျကိစ်စက လညျး မရှိဖွဈနတော။ ဂြာကွီးက ညနေ ဂေါကျရိုကျခြိနျး ထားတာ သူ့မိနျးမ ကလညျး သူ့ သူငယျခငျြး အိမျ ကိစ်စ ရှိလို့ သှားစရာရှိနလေို့ ကြှနျနေျာ့ ကိုလိုကျပို့ခိုငျးတယျ ။ သူ့မိနျးမကိုကား ခန လိုကျမောငျးပေးပါဆိုပီး အကူအညီတောငျးလာတယျ ။ ” ညီလေး ညနေ လေးနာရီလောကျ လာခဲ့ပေးပါကှာ ကူညီပါဦး အကိုလညျး ခြိနျးထားပီးသားကွီး ဖွဈနလေို့ မငျးအမ ကို ကားလိုကျမောငျးပို့လိုကျပါဦး အားတယျ မလားညီလေး ” “.ဟုတျကဲ့ ရပါတယျ ဂြာကွီး ကြှနျနျော လာခဲ့လိုကျပါ့မယျ ”
“.အေးအေး ကြေးဇူးညီလေးရာ ဒါပမေယျ့ တဈခုတော့ ရှိတယျနျော မငျးအမ က တဈ နရော သှားရငျ အရမျးကွာတတျ လို့ ညီလေး စိတျတော့ ရှညျပေးပါ ” “.ဟုတျကဲ့ ရပါတယျ ဂြာကွီး ကြှနျနျော အဆငျပွပေါတယျ ” ဂြာကွီး ဖုနျးခသြှားပီး ကြှနျနျောလညျး ခကျြခငျြး မွို့ အစှနျက ကြှနျနေျာ့ အသိ တညျးခိုခနျး ကို ဖုနျးဆကျပီး ဘှတျကငျလုပျထားလိုကျ တယျ ။ ဒီကိစ်စ က ဒျေါခိုငျခိုငျဦး အကှကျမှနျး ကြှနျနျော သိတယျ ။ ဂြာကွီး ဂေါကျရိုကျနတေဲ့ အခြိနျ အပွငျထှကျဘို့လုပျတယျ ဆိုကတညျးက ကြှနျနျော ဘာဆိုတာ သဘောကျပေါကျလိုကျတယျ ။ ညနေ သုံးနာရီ ခှဲ ကတညျးက ကြှနျနျော ဂြာကွီး အိမျကို ရောကျသှားတယျ ။ အိမျထဲ ဝငျလိုကျတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ကို မတှေ့ ဂြာကွီးက ဂေါကျရိုကျသှားဘို့ ပွငျဆငျနပေီး ဂေါကျဖျ အိတျတှေ ကားပျေါ တငျနတေယျ ။ ” ကဲ ညီလေး ရေ မငျးအမ ကို ခန စောငျ့လိုကျဦး မပီးသေးဘူး ကိုယျတော့ သှားနှငျ့တော့မယျ နောကျကနြပေီ” ဆိုပီး ကားမောငျး ထှကျသှားတယျ ။ ကြှနျနျော ဧညျ့ခနျးမှာ ပဲ ထိုငျစောငျ့လိုကျတယျ ငါးမိနဈလောကျနတေော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ထှကျလာတယျ ။
ကြှနျနေျာ့ မကျြလုံးတှေ သူမ အလှပျေါ ကရြောကျသှားတယျ ။ မွနျမာ ဝတျစုံ အပွာဝမျးဆကျ ကို ကွပျညပျနအေောငျ ဝတျထားတဲ့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ” အားးး မမ အရမျးလှတာပဲဗြာ ” ကြှနျနေျာ့ နုတျက အမှနျတကယျ ပငျရရှေတျမိသှားတယျ ။ တကယျပဲလဲလှပါတယျ ။ ဆံပငျတှကေို နောကျဘကျမှာ ဆံထုံးထုံးထားပီး ခါးတိုမွနျမာဝတျစုံဖွငျ့ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ။ အောကျက ထမိနျစကပျ ခပျကွပျကွပျကွောငျ့ တငျပါးတှကေ တငျးထှကျနအေောငျ ကားနတေယျ ။ ကြှနျနျောသူမဆီ ထသှားပီး ခါးလေး ကို အသာဖကျလိုကျတယျ ။ ” သှားးးခွံတံခါး သှားပိတျဦး ” ” ဟငျ မမ အပွငျသှားမယျဆို ” “.မသှားဘူး မငျးဂြာကွီး ကို ညာလိုကျတာ ငါ့မောငျကို တှခေ့ငျြလို့ ခွံတံခါးကော အိမျတံခါးကော ပိတျခဲ့ ” တျောတျော အကွံပိုငျတဲ့ မိနျးမ ပဲ ။ ကြှနျနျော ခြီးကြူးလိုကျမိတယျ ။ အမှနျတော့ ဘယျမှ သှားစရာမရှိ ။ ကြှနျနေျာ့ ကို အိမျရောကျလာအောငျ ကွံစညျခွငျးပငျ ။
ဒီနကေ့ ဂြာကွီးက ဂေါကျဖျပှဲ ပီးရငျ ညစာစားပှဲ ပါ ဆကျဦးမညျတဲ့ ။ ဒါဆို ကြှနျနျော တို့ အတှကျ အခြိနျ လေးငါးနာရီလောကျ ရမညျ။ ကြှနျနျော တံခါးတှေ ပိတျပီး အိမျထဲ ပွနျဝငျလာလိုကျတယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ဧညျ့ခနျးမှာ မရှိတော့ ။ အခနျးထဲကို ကြှနျနျော တခါတညျး လိုကျသှားလိုကျတယျ အခနျးတံခါးက မပိတျထား ။ အခနျးထဲ ဝငျဝငျလိုကျခွငျးမှာပဲ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး က ကြှနျနျော ကို လာဖကျတယျ။ “.လှမျးနတေယျ မောငျလေး ” ကြှနျနျော အလိုကျသငျ့ပွနျဖကျလိုကျရငျး နုတျခမျးခငျြး အနမျးတှေ ဖလှယျလိုကျတယျ ။တဈခါ ဖောကျပွနျဖူးသော မိနျးမ တဈယောကျ အနနေဲ့ နောကျတခါအတှကျ မဝံ့မရဲ မဖွဈတာ ဆနျးကွယျသော ကိစ်စမဟုတျ။ ယောကြားတဈယောကျ အပျေါ မှာ ဝငျငှအေရ အမှီအခိုကငျးတဲ့ မိနျးမ တျောတျော မြားမြား ဖောကျပွနျကွတာဟာ သူမ တို့ရဲ့ လိုအငျဆန်ဒ မြားကွောငျ့ ဆိုတဲ့ စဈတမျးတဈခု ရှိတာ ကြှနျနျော ဖတျဖူးတယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး လညျး သူမရဲ့ လိုအငျ မပွညျ့ဝမှုတှကွေောငျ့ ဆိုတာ မလှဲမသှဖွေဈနနေိုငျတယျ ။နမျးနရေငျးမှပဲ ကြှနျနေျာ့ ပုဆိုးကို ကှငျးလုံးပုံ ခြှတျခလြိုကျတယျ ။
ဒီနေ့ ကြှနျနျော တမငျ ဘောငျးဘီ ဝတျမလာတာ ။ ပုဆိုးဖွငျ့သာလာခဲ့တယျ။ အောကျခံဘောငျးဘီတော့ ဝတျခဲ့ရတယျ တျောကွာ အပွငျသှားရငျး ထိနျးမနိုငျသိမျးမနိုငျ အရှကျကှဲမှာ ဆိုးလို့ နှုတျခမျးတှေ နမျးနရေငျး နဲ့ပဲ ကြှနျနေျာ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီပျေါမှနေ၍ ကြှနျနေျာ့ လီး ကို လာပှတျပေးနတေယျ ။ သူမ ပုံခုံးတှေ ကို ကိုငျလိုကျပီး အောကျကို ဖိခလြိုကျတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တဈယောကျ ကြှနျနေျာ့ ရှမှေ့ာ ဒူးထောကျလြှကျသား အနအေထား ဖွဈသှားတယျ ။ ဒူးထောကျ ထိုငျလိုကျလို့ သာတျောသေးတာ ။ ငုတျတုတျထိုငျခလြိုကျလို့ကတော့ ထမိနျစကပျတောငျ ကှဲ ပွဲသှားနိုငျတယျ ။ လုံးဝနျးတဲ့ တငျပါးကွီးတှကေ ဖုထဈနတေယျ ။ သူမ ဘာလုပျပေးရမယျ ဆိုတာ သိရှိနတေယျ။ ကြှနျနေျာ့ အတှငျးခံ ဘောငျးဘီမြော့ကွိုး ထဲ ကို လကျအသာ နှိုကျပီး အောကျကို ခြှတျခလြိုကျတယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး က ကြှနျနေျာ့ လီး ကို လကျတဘကျက ကိုငျရငျး သူအကငျြ့အတိုငျး နောကျလကျတဘကျမှ လကျမ လကျညိုးလေး ဖွငျ့ လီးဒဈ ကို လာဖိတယျ ။
ပွီးတော့ ကြှနျနေျာ့ ကိုမော့ကွညျ့ပီး နီထှေးထှေး နုတျခမျနီ ဆိုးထားတဲ့ နုတျခမျးကို လြှာဖွငျ့ သပျလိုကျရငျး မကျြစိတဘကျ မှိတျပွလိုကျသေးတယျ ။ ထို့နောကျ ကြှနျနေျာ့ လီးဒဈကို ဖွဲကာ နုတျခမျး အစုံဖွငျ့ ငုံစုပျတော့တယျ ။ လီးတံ တဈလြောကျ နှေးကနဲ အရသာ ခံစားလိုကျရတယျ။ ” အားးးး မရယျ ..ကောငျးလိုကျတာ ” ” ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ကြှနျနျော ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ရဲ့ ခေါငျးကို ကိုငျကာ ပါးစပျပေါကျထဲကို လီးထိုးထညျ့ကာ လိုးပွဈလိုကျတယျ။ ဘေးက မှနျတငျခုံစာပှဲ မှ ကိုယျလုံးပျေါ မှနျထဲတှငျ မွနျမာဝတျစုံ အပွာဝမျးဆကျလေးဖွငျ့ ဒူးထောကျကာ ကြှနျနျောက မတျတပျရပျ အနအေထားဖွငျ့ ပါးစပျကို အားရပါးရ လိုးနတော ပျေါနတေယျ ။ကြှနျနေျာ့ ဂှေးဥတှကေို ကိုငျပှတျလိုကျ လီးတံ ကို ကိုငျလိုကျဖွငျ့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တဈယောကျ အလုပျရှုပျနတေယျ ။ ” ဗွှတျ ဘှတျ ဘှတျ ” ” အု အု အု ..အ..ဘှတျ ဘှတျ ” လီးတံ တလြောကျ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တံတှေး တှေ ရှဲနဈလာပီး သူမ ပါးစပျမှ တဆငျ့ လညျပငျး မြားထိပါ စီးကနြတေယျ ။ သူမ နုတျခမျး နီတှလေညျ ပကျြစ ပွုလာပီ ။
ကြှနျနျော အားပွု ပီး ထိုးသှငျးနခြေိနျ သူကလညျး နုတျခမျး ကို ဖိဖိ ပီး လီးတံ ကို ငုံခဲ စုပျနတေယျ ။ဆယျမိနဈလောကျ လုပျပီးသှားတော့ သူလညျး မောလာတယျ ထငျတယျ လီးတံကို ပါစပျက နခြှေတျလိုကျပီး ကြှနျနျော ကို မော့ကွညျ့တယျ ။ လကျကတော့ ကြှနျနေျာ့ လီး ကို ဂှငျးထုပေးနတေယျ .။ နှုတျခမျး တလြောကျ နဲ့ လညျပငျးတှေ မှာ တံတှေး တှရှေဲနဈလို့ ။ ကြှနျနေျာ့ လီးတံမှာ လဲ ရှဲနဈနပေီ ။ ကြှနျနျော စိတျကူး ရတာ နဲ့ သူမ ပါးနှဈဘကျကို လကျနဲ့ ဖိဖဈြလိုကျတော့ ပါးစပျက ဟလာတယျ ။ ကြှနျနျော ပဈြက နဲ့ သူ့ပါးစပျထဲ တံတှေး ထှေးခလြိုကျတယျ ..ပီးတော့ ပါးစပျထဲကို လကျလေးခြောငျး ထိုးသှငျးပီး မှပေဈလိုကျတယျ။ ” အားးးအားးးအားးး အု အု အု ” ကြှနျနေျာ့ စိတျထဲ သူမ ကို ခပျကွမျးကွမျး ဆကျဆံခငျြစိတျ တှေ ဖွဈလာတယျ ။ ဟုတျတယျ ဒီလို တငျကွီးကွီး ရငျကားကား မွနျမာဆနျဆနျ အိမျထောငျသညျ မငျကွီး ကွိုကျ ပုံစံ မြိုးကို ကြှနျနျော အကွိုကျဆုံးပဲလေ ၊။ မငျးကွီးတငျ မကဘူး ကြှနျနျော လညျး ကွိုကျတယျဗြာ ။
သူမ နောကျမှာ စညျးထားတဲ့ ဆံထုံး ကို ကြှနျနေျာ့ လကျတဘကျနဲ့ ကိုငျက ဆှဲမလိုကျတော့ အလိုကျသငျ့ပါလာတယျ ။ ပုံစံ ကွညျ့ရတာ အဲ့လို ခပျကွမျးကွမျး ကွိုကျမယျပုံ ။ ကြှနျနေျာ့ အပျေါ အကြီ ကို ဒျေါခိုငျခိုငျဦး က ခြှတျပေးတယျ ။ ကြှနျနျော က သာ ကိုယျလုံးတီး ဖွဈနတော သူမ ကတော့ ဘာမှ မခြှတျရသေး ။ ဘာမှ မခြှတျရသေးတာကို က ကြှနျနေျာ့ စိတျကို ပိုမို ထကွှလာစတေယျ ။ ကြှနျနျောက မိနျးကလေး ဆို ခတျေပျေါ ဆကျဆီကကြ ဝတစြားထားတဲ့ မိနျးကလေး မြိုးကို လိုးရတာထကျ မွနျမာဆနျဆနျ အလှ နဲ့ မိနျးကလေး မြိုးကို ပိုစိတျကွှတယျ ။ကြှနျနျော ကုတငျပျေါ မှာ ထိုငျလိုကျပီး ” အဝတျတှေ တဈခုခငျြးစီ ခြှတျပွကှာ ကွညျ့ခငျြတယျ ” နုတျခမျးလေး ကှေးရုံ ပွုံးပွပီး “အပျေါ အရငျ ခြှတျပွရမလား အောကျ အရငျ ခြှတျပွရမလား ” ” အောကျခြှတျ ” ကြှနျနျော နားကပျလာပီး ကြှနျနျောက ကို ကြောပေးကာ ခါးနားမှာ ရှိတဲ့ ထမိနျစကပျ ဇဈလေး ကို ဆှဲခလြိုကျတယျ ။ ပီးတာနဲ့ စကပျဘေးသား နှဈဘကျကို ကိုငျကာ အောကျကို ဖွေးဖွေးခငျြးလြောခတြယျ ။ တငျးရငျးကွီးမားလှတဲ့ တငျပါးကွီးတှကွေောငျ့ ထမိနျစကပျက ဇဈဆှဲခထြားပမေယျ့ ကွပျထှကျနတေယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လကျတကမျးမှာ တငျ ထမိနျခြှတျပွနတော။
ဘယျလောကျစိတျကွှလိုကျမယျလဲ ဆိုတာသာတှေးကွညျ့ ။ တငျပါးကွီးတှကေို လှုပျခါလှုပျကာ ဖွငျ့ အောကျသို့ ခြှတျခလြိုကျတယျ ။ အားပါးးပါးးး အပွာရောငျ ထမိနျစကပျ အောကျ မှ အပွာရောငျ ပငျတီလေး က တငျပါးကွီး နှဈခွမျးကို မနိုငျတနိုငျ ထမျးပိုးထားတယျ ။ ကြှနျနျော မနနေိုငျတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တငျပါးကွီး ကို တခကျြလှမျးရိုကျလိုကျတယျ။ ” ဖွနျးးးး ” ” အ ” ပီးတော့ လကျနှဈဘကျနဲ့ တငျပါးကွီးတှကေို စုပျနယျပဈလိုကျတယျ ။ ” ဟိတျ နဦေးလေ ဖွေးဖွေးပေါ့ တဈခုခငျြး ခြှတျပွမယျ အံသွစရာ လညျး ပွဦးမယျ ” ဆိုပီး ကြှနျနျော နားမှ နဲနဲ ခှာကာ ကြောပေးလြှကျ အနအေထားမှပဲ သူမ အပျေါ အကြီကွယျသီးတှေ ဖွုတျပီး ခြှတျခလြိုကျတယျ ။ ထို့နောကျ ဘျောလီခြိတျ အား နောကျပွနျ ဖွုတျလိုကျပီး ဘေးသို့ ဇာဘျောလီ အပွာရောငျလေး ကို ပဈခလြိုကျတယျ ။ ပွီးတော့ ကြှနျနေျာ့ ဘကျကို ဖွေးဖွေးခငျြးလှညျ့လာပီး နို့အုံကွီးတှကေို လကျနှဈဘကျနဲ့ယှကျပီး ကိုငျကာ အုပျထားတယျ ။
လကျခြောငျးလေးတှေ ကို ဖွေးဖွေးခငျြး ခြဲလိုကျတော့ အောကျ မှ ခပျမဲမဲ နို့သီးခေါငျး လေး ပျေါလာတယျ ။ အားးး ဟိုနကေ့ သူမ နို့ တှေ ကို မမွငျလိုကျရ အခုတော့ မွငျလိုကျရပီ ။ စောကျရမျးမိုကျတယျ ။ နို့အုံကွီးတှကေလဲ ကားထှကျနတောပဲ။ ” စောကျရမျး မိုကျတယျ မမ ရာ ” ” ဟိဟိ ” အသံလေး ထှကျအောငျ ရီလိုကျရငျး နို့ အုံကွီးတှကေို လကျနဲ့ လှုပျပွတယျ ။ ” အံသွ စရာ မယျနျော သခြောကွညျ့ ” ဆိုပီ အောကျခံပငျတီလေး ကို အသာလိပျပီး ခြှတျလိုကျတော့ အားးပါးးးပါးးးးဟိုနကေ့စောကျရမျးထူပိနျးနတေဲ့စောကျမှေးတှေ တပငျမှ မရှိ အကုနျပွောငျစငျနအေောငျ ရိတျထားတယျ။မောငျ့ အတှကျ ရိတျထားတာ တဲ့ဗြာ .. ကြှနျနျော မနနေိုငျတော့ တငျပါးကွီး ကို လှမျးဖကျကာ ဆှဲ ယူလိုကျတယျ။ ပီးတော့ နို့အုံတှကေို တဖကျစီ အငမျးမရ စုပျပဈလိုကျတယျ။ နို့အုံတှကေို လကျဖွငျ့ညှဈလိုကျ နို့သီးခေါငျးတှေ ကို စုပျလိုကျ လုပျပေးလိုကျတယျ ။ ” အားးးးး ကောငျးလိုကျတာ မောငျရယျ ” ” ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” အားးးး ဒီလို ခံစားခငျြနတော ကွာပီကှာ .. မငျးဆရာက မလုပျပေးတာကွာပီ ” နို့တှကေို စုပျနရော မှ ကြှနျနျောလကျတဘကျက ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တငျပါးကွီးတှကေို ဖဈြညှဈကာ တငျပါး အကှဲ ကွောငျးထဲကို လကျခလယျ ထိုးထညျ့လိုကျတယျ။
” အားးးး ကောငျးလိုကျတာ မောငျ အားးးးး” ကြှနျနေျာ့ လကျဖဝါးထဲ ကို တံတှေး ပဈြကနဲ ထှေးထညျ့လိုကျပီး တငျပါး အကှဲ ကွောငျးထဲကို နှိုကျလိုကျတယျ ။လကျခလယျ က ဖငျစအို ၀ ကို အသာထညျ့ကွညျ့လိုကျတယျ ။လကျတဆဈလောကျ ဝငျအသှားမှာ သူမ စအိုအား ကြုံ့လိုကျပှလိုကျ လှုပျနတော သိလိုကျတယျ။ ” အားးး ကောငျးလိုကျတာ မောငျလေး ရယျ အားးးး ” ပေါငျကွီးတှေ တဖွညျးဖွညျး ကားလာပီးလကျတှကေလညျး ကြှနျနေျာ့ ကြောကုနျးကို ပှတျသပျနတေယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လကျခလယျက လညျး စအို ၀ ထဲ ကို သှငျးတာ တဖွညျးဖွညျး နှငျ့ အဆုံးထိ ဝငျထှကျ လုပျနပေီ ။ ကုတငျပျေါ မှာထိုငျနတေဲ့ ကြှနျနေျာ့ အပျေါမှာ ခှထိုငျထားတော့ ကြှနျနေျာ့လီးတံ ကွီးကလညျး ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ပေါငျခှကွားထဲ ပိမိနတေယျ ။ ဖငျအိုးကွီးကွီး ကို ကြှနျနေျာ့ လကျနှဈဘကျ နှငျ့ မနဲ ဖကျတှယျ ထားရတယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦးက လဲ သူ့ အဖုတျ နဲ့ ကြှနျနေျာ့ လီးတံ ကို အပျေါက ခှကာ ပှတျပှတျ ဆှဲပေးနတော ရိတျထားကာစ အမှေးတှကေ ကွမျးရှရှကွောငျ့ ကွကျသီးပါထလာတယျ။
” မောငျလေး ..မနနေိုငျတော့ဘူးကှာ တကျလုပျပေးတော့ ” ” မောငျလညျး မနနေိုငျတော့ဘူးကှာ မ ရဲ့ ဖငျတုနျးကွီးကို တကျခှပီး လိုးခငျြပီ ဖငျကုနျးပေးတော့နျော ” ” စိတျကွိုကျ ပါ မောငျ မမ လညျး အထဲ က တအား ယားနပေီကှယျ ” ကြှနျနေျာ့ ပျေါမှ ဆငျးကာ ကုတငျပျေါ တှငျ ဖငျကုနျးလိုကျတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ဖငျတုနျးကွီးက တကယျ စကိုငျးအိုး ဂဈတာရှိတျ ကွီး အယျနတောပဲဗြာ ။ ဘယျလကျက တငျပါး အစပျ နားကို ကိုငျကာ ညာလကျဖွငျ့ တငျပါးကွီးကို ခပျစပျစပျလေး ပုတျလိုကျတော့ တငျပါးကွီးက အိခနဲအိခနဲဗြာ ။စမနျ ထ နပေီ ဖွဈတဲ့ ကြှနျနေျာ့ လီးတံကို အဖုတျ ၀ မှာ သခြော တလေို့ကျပီး ထိုးထညျ့ပဈလိုကျတယျ။ ” ဘှတျ ” ” အားးးးးး မောငျ…. ဝငျ သှား ပွီ အားးးးးး ” “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ” “ဖုတျ ဖုတျ ဖုတျ ” ” အားးးး ရှီးးးး ကောငျးတယျမောငျ ” ” ဖတျ ဖတျ ဖတျ ” ” ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ” ” ဖွောငျး ဖွောငျး ဖွောငျး ”
” အ အအားး” ခါးနှဈဘကျကို ကိုငျကာ အားရပါးရလိုးနမေိတယျ ၊ တငျပါးကွီးတှေ နဲ့ ကြှနျနေျာ့ ပေါငျရငျးတှေ ဆုံလိုကျတိုငျး တဖွောငျးဖွောငျး ဖွငျ့ အသံတှေ မွညျထှကျနတေယျ။စောကျဖုတျကို လိုးနရေငျး ကြှနျနေျာ့ လကျမ ကို ဖငျဝ အတှငျးထဲ ပါ ထိုးသှငျးပေးထားလိုကျတယျ။ ” အားးး ကောငျးလိုကျတာ အားးး လိုး လိုး မောငျလေး လိုးပါ ” ” အငျးးး ရော့ ရော့ ဘှတျ ဘှတျဘှတျ လိုးတယျကှာ ..ကောငျးရဲ့လား ” ” အငျးးးး အ..အ.. အရမျးကောငျးတယျ မောငျ အားးးလိုးပါ မမ ကို လိုးပါ ” ကြှနျနေျာ့ လီး ဒျေါခိုငျခိုငျဦး အဖုတျထဲ ကို ဝငျလိုကျထှကျလိုကျ ဖွဈနတော ကို ငုံကွညျ့ကာလိုးနရေငျး တငျပါးကွီးတှကေ တအိအိ ဖွငျ့ စိတျမထိနျးနိုငျ တော့သဖွငျ့ လကျဝါးဖွငျ့ တခကျြ ပငျ့ကာ ရိုကျခလြိုကျတယျ။ ” ဖွောငျးးးးး ” ” အားးးး ကောငျးတယျ မောငျ .အားးး နာနာ လေး ရိုကျပေး ” ” ဖွောငျးဖွောငျးဖွောငျး ” ဆကျတိုကျ ရိုကျပီး လိုးပဈလိုကျတယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး လညျး စိတျတှေ အရမျး ထနျနပေုံရတယျ ။သူမ ဖငျအိုးကွီး ကို ငေးပီး မှနျးခဲ့သမြှ အခု လကျတှေ့ လိုးနရေပီလေ ။
အသားဖွူဖွူ ဖငျအိုးတောငျ့တောငျ့ ကခငျြမ အယျစတုံကွီး ကို လိုးတဲ့ အရသာ တျောတျော ကောငျးတယျဗြာ ။အခကျြ လေးဆယျ လောကျစောငျ့လိုးပီး ကြှနျနေျာ့လီး ကို အဖုတျထဲမှ ခြှတျလိုကျတယျ ။ လီးတံတလြောကျ စောကျဖုတျရညျတှေ စိုရှဲပီး ပွောငျလကျနတေယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ဖငျတုနျးကွီး က အယျထှကျနသေဖွငျ့ လေးဘကျကုနျးထားသျောလညျး အောကျမှ စောကျဖုတျကို သခြောမမွငျရ ။ စအိုဝ ညိုတိုတို လေး ကို သာ မွငျနရေတယျ ။ သူမ ဖငျ နှဈခွမျးကွားကို တံတှေး ထှေးခလြိုကျတော့ တံတှေးတှကေ ဖငျဝ မှ တဆငျ့ စောကျဖုတျဆီသို စီးကြ ကုနျတယျ ။ ဖငျဝကိုလကျမ ဖွငျ့ တံတှမြေား စှတျ ကာ ပှတျလိုကျပီး လီးဒဈ ကို စအို ၀ ကို တလေို့ကျတယျ ။ လီးဒဈဖွငျ့ စအိုဝ ကို ပှတျရငျး ” ဖငျလိုးမယျနျော ” ” ဖွဈပါ့မလား မောငျလေး တခါမှ မခံဖူးသေးဘူး ” ” ဟုတျလား ဒါဆို အသဈကလေးပေါ့ အဲ့လို မှ ပိုခခြငျြတာ ” “.ဖွေးဖွေးနျော မောငျ ” ” မဖွေးဘူး အကွမျးလိုးမယျ ခံပေး ” ” ဖွောငျး ” တငျပါးကို တခကျြ ခပျပွငျးပွငျ ရိုကျခလြိုကျတယျ ။ ” အားးး မောငျလေးး ” ” ဖွောငျး ဖွောငျး ဖွောငျး ” တငျပါးကို လေးငါးခကျြ ဆကျတိုကျဆငျ့ရိုကျပေးလိုကျတယျ ။ ” အငျ့..ဘှတျ ” လီးဒဈက ဖငျဝ အတှငျး ဘှတျကနဲ့ ဝငျသှားတယျ။
တျောတျောကွပျသား။ ဒဈဝငျသှားတဲ့ လီးတံပျေါကို တံတှေး ထှေးခလြိုကျပီး လီးတံ အဆုံးထိ ထိုးသှငျးလိုကျတယျ ။ ဖငျသားလေးက လီးတံ နှငျ့ အတူ အတှငျး သို့ အိဝငျသှားတယျ ။ ” အားးးးး နာတယျ အားးးးးမောငျလေး အားးးးကြှတျ ကြှတျ ” အျောသံကွောငျ့ ကြှနျနေျာ့ မှာ ပိုစိတျထနျလာပီး လီးကို ထုတျသှငျး မွနျမွနျလေး လုပျပေးလိုကျတော့ ဖငျဝ အတှငျးမှ လအေံသံတှပေါ ထှကျလာတယျ။ ” ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ” ” ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ” ” အားးး အားးးး ကြှတျ ကြှတျ ဖွေးဖွေးလုပျပါ နျော အားးး ” ကြှနျနေျာ့ ခါးအား ကို စိုကျသုံးပီး တငျပါး နှဈခွမျးကို ကိုငျကာ ခပျမွနျမွနျ ထုတျသှငျးလုပျပေးလိုကျတယျ ။ တဖွညျးဖွညျး လီးတံတလြောကျ အရညျတှဖွေငျ့ ခြောမှလေ့ာတယျ ။တငျပါးတှေ ကို ရိုကျလိုကျ စောငျ့စောငျ့ သှငျးလိုကျ ဖွငျ့ စညျးခကျြ ညီညီ စောငျ့ထိုးပေးနမေိတယျ။ “.အားးး မောငျ ဟုတျတယျ ကောငျးလာပီ ” သူမ လကျတဘကျက အဖုတျကို လှမျးပှတျရငျး ငွီးငွူသံ တှေ ထှကျလာတယျ။အခု ဆိုရငျ ကြှနျနေျာ့ အပျေါ ကွောထားတဲ့ ဂြာကွီး ကို မွငျယောငျမိရငျး သူမိနျးမ ကို ဖငျပါ လိုးပေးလိုကျရပီ ။
နောကျ ဆို ဂြာကွီး ဘယျလို ကွောကွော လကျခံနိုငျပီဗြာ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ဆံပငျတှေ ကို လှမျးဆှဲ လိုကျရငျ ဖငျဝ ကိုအားပါပါဖွငျ့စောငျ့စောငျ့လိုးပေးနတေယျ။ ” အားးးး အားးးးး ” ” ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ” ” ဗဈြ ဗဈြ ဗဈြ ” “အားးးးကောငျးတယျ မောငျ အားးးစောငျ့လိုးပေး” “အငျးးးး ရော့ရော့ အားးး မခိုငျ ဖငျခံလို့ ကောငျးလား ” “အားးး ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ” ” ကောငျးနပေီမောငျလေး အားးး လိုးပေး” “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ” “ဖွောငျး ဖွောငျးဖွောငျး ” “ဖတျ ဖတျ ဖတျ” ဆကျတိုကျ လိုးရငျး လိုးရငျး ကြှနျနေျာ့ လီးတံ က ပူလာတယျ အထဲက လဲ ကဉျြတကျလာတယျ ။ “အားးး မမ ကြှနျတျော ပီး ခငျြနပေီ ” ကြှနျနေျာ့ လီးတံ ကို ဖငျထဲမှ ခြှတျလိုကျပီး ဒျေါခိုငျခိုငျဦးကို ဆံပငျမှ ဆှဲကာထိုငျခိုငျးလိုကျတယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး မကျြနှာပျေါ မှာ လီးတံတရေ့ငျး ဂှငျးကို ခပျပွငျးပွငျးလေး ထုပဈလိုကျတယျ ။
” အားးး မမ လြှာထုတျထားးးး ပါးစပျထဲ ပနျးထညျ့မယျ ” ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ပါးစပျလေးဟ လာပီး လြှာလေး ထုတျလာတယျလြှာပျေါ ကို လီးထိပျတငျပီး ခပျပွငျးပွငျးလေး ထုလိုကျတာ ၂ မိနဈလောကျပဲ ထုလိုကျရတယျ ကြှနျနေျာ့လီးတံ ထိပျ မှာ ဖွူပဈြပဈြ လရေ တှေ အခဲလိုကျ ထှကျကလြာတယျ။ လရတှေကေ ပါးစပျထဲတဝကျ ပါးပျေါ မေးစပေ့ျေါ နုတျခမျးပျေါ အနှံ ပြံ့ကြဲ ကုနျတယျ ။ ” အားးးး ကောငျးလိုကျတာ မ ရယျ ” ” လူဆိုး ဒီမှာ အကုနျပပှေကုနျပီ ” ကြှနျနျော ဘေးမှ ကနြတေဲ့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ပငျတီ အပွာရောငျလေး ကို ကောကျကာ မစေ့ေ့ နဲ့ ပါးတှပေျေါ ပနေတေဲ့ ကြှနျနျောလရတှေကေို သုတျပေးလိုကျတယျ ။ “.မကွိုကျဘူးလားးး ” “သှားပါ ကွိုကျပါဘူး ဖနျတံတံ နဲ့ ” “ရော့ ပွောငျအောငျ ယကျပေးဦး ” ကြှနျနေျာ့ ရဲ့ နဲနဲ ပြော့ သှားတဲ့ လီးတံ ကွီး ကို သူမကျြနှာရှေ့ ထိုးပေးလိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လီးတံကို ကိုငျရငျး လီးတံ တလြောကျ လြှာဖြားလေး ဖွငျ့ ယကျကာ အရညျတှကေို ပွောငျအောငျ လုပျပေးတော့တယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လကျမှ နာရီ ကို ကွညျ့လိုကျတော့ နာရီက ငါးနာရီ မတျတငျး ပဲရှိသေးတယျ ။
နောကျထပျ အခြိနျ သုံးနာရီလောကျ ရသေးတာပဲ။ ကြှနျနျော ဂြာကွီး အိပျယာ ပျေါ မှာ အေးဆေးစှာ အနားယူ ပကျလကျလှနျလိုကျတယျ။ ” ရသှေားဆေးဦးမယျ ခန ” ဆိုပီး ကုတငျပျေါမှာ ဆငျးက ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ဖငျကွီး နိမျ့တုံမွငျ့တုံဖွငျ့ လြောကျသှားတယျ ။ အသားဖွူဖွူ တငျပါးတှမှော ကြှနျနျော ရိုကျထားလို့ နီစပျစပျ ဖွဈနတော တှလေို့ကျရတယျ ။ ငါးမိနဈလောကျနတေော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ရခြေိုးခနျးမှ ပွနျထှကျလာတယျ။ကိုယျလုံးတီး နဲ့ပဲ ကြှနျတေျာ့ ထံ လြောကျလာပီးး ” အမောဖွထေားဦး အအေး သောကျမလား ” ” အငျးးး ” အိမျရှခေ့နျးကို ဒျေါခိုငျခိုငျဦး အဝတျဗလာဖွငျ့ ထှကျသှားပီး ရှပျဘူး တဈဘူး ကိုငျကာ ပွနျဝငျလာတယျ ။ ရှပျဘူးအေးအေး လေး သောကျလိုကျရငျ ကုတငျပျေါ လှဲလိုကျတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ကလညျး ဘေးမှာ လာဝငျလှဲတယျ ။
ကြှနျနေျာ့ လကျမောငျးပျေါ မှာ ခေါငျးအုံးရငျး သူမ ခွထေောကျက ကြှနျနေျာ့ ကို လာခှထားတယျ ။ “ဖငျဝ နဲနဲပွဲသှားလားမသိဘူး ရဆေေးတာ စပျဖဉျြးဖဉျြး နဲ့ ” ” ဘယျလိုလဲ ဖငျခံလို့ ကောငျးလား ” “.သိဘူး နာနာ ကွီး ” ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တငျပါးတှေ ကို လှမျးပှတျလိုကျရငျး ” နောကျတခါ ဖွေးဖွေးလေး လိုးပေးမယျ မကွမျးတော့ဘူးနျော ” ” အငျးးး ရပါတယျ ကွမျးကွမျးလေး လဲ ကွိုကျတယျ ” ” အငျးးး မောငျတို့ နောကျတခါလညျး တှခေ့ငျြသေးတယျကှာ ” “အငျး..စီစဉျမှာပေါ့လို့….မောငျနဲ့လိုးရတာအရမျးကောငျးတယျ” ” အခုလညျး ခနနေ ထပျလိုးမယျနျော ” “မောငျ့သဘောပါ ” ဒျေါခိုငျခိုငျဦးလညျး ရမ်မကျတျောတျောထနျတယျ။နောကျတခြီထပျလိုးကွတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦးမှ အပျေါကတကျခှစောငျ့လိုကျပကျလကျလိုးလိုကျ ဖငျကုနျးလိုကျနဲ့အားပါပါ ဆကျလိုးကွတယျ။ည၇ခှဲကြျောကြျောလောကျမှာ ကြှနျနျောလညျး အိမျကနပွေနျထှကျလာခဲ့လိုကျတယျ ။ နောကျပိုငျး ၂ ပတျ တခါ လောကျ အပွငျ မှာ အကွောငျး တဈခုခု ပွ ပီး လိုးဖွဈကွတယျ ။
သုံးလေးလ လောကျ အတှငျး ဒျေါခိုငျခိုငျဦးနဲ့ ဆယျ့ငါးကွိမျထကျမနညျး လိုးဖွဈကွတယျ ။ ဂြာကွီး ကတော့ သခြော မသိရှာ ။ နောကျ လေးလ လောကျမှာ ကြှနျနျော ရာထူးတိုး နဲ့ နပွေညျတျော ရုံးခြုပျ ကို ပွောငျးရှခှေ့ငျ့ကတြယျ ။ နပွေညျတျော ရောကျပီး နောကျပိုငျး တခါပဲ တှေ့ ဖွဈလိုကျတယျ ဂြာကွီး အစညျးအဝေး လာတကျတာ ကို လိုကျလာတာ ။ လိုးတော့မလိုးဖွဈတော့ဘူး ။ သူနဲ့ မခှဲ ခငျ ပွောသှားသေးတယျ တဈရကျလောကျ ဆုံဖွဈအောငျ ဆုံခငျြသေးတယျ လှမျးနတေယျတဲ့ ကြှနျနေျာ့ နားကို ခပျတိုးတိုးလာပွောသှားတယျ ။ ကြှနျနျော လိုးဖူးခဲ့သမြှ ထဲ အမှတျအရဆုံးတဈယောကျက ဒျေါခိုငျခိုငျဦးပါ ။ ဒီနေ့ အခြိနျ ထိ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ကို မှနျးပီး တခါတခါ ဂှငျးထုဖွဈတုနျးပဲ ။
အခု ဒျေါခိုငျခိုငျဦးက ကလေးသုံးယောကျတောငျရသှားပီ ။ သားနှဈယောကျ သမီးတဈယောကျ ။ ဖဘှေ့တျပျေါမှာ သူတို့မိသားစု ပုံတှေ ခနခန တှေ့ ဖွဈတယျ ။ ဂြာကွီးကလညျး သိပျတော့ ခသေူ မဟုတျပဲ ။ ကလေး သုံးယောကျလုံးက ဂြာကွီး မကျြနှာပေါကျနဲ့ဗြ ။ ကြှနျနျော လညျး တခြိနျခြိနျ တနရောရာမှာ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး နဲ့ လိုးခငျြသေးတယျဗြာ ။ ပွနျပီး တှဖွေ့ဈလိုးဖွဈအောငျဝိုငျးဆုတောငျးပေးကပြါဦးလို့. ပွီးပါပွီ မူရငျရေးသားသူအားcreditပေးပါသညျခိုးစားတဲ့အသီးက ပိုခြိုတယျ
ကြှနျနေျာ့ မနျနဂြော ( ဂြာကွီး ) ကိုတျောတျော တငျးနပေီဗြာ ။ ကြှနျနေျာ့ ပရောဂကျြ တဈခု ကို တငျပွတယျ ။ သူသဘောကတြယျ ဒါ ကို သဘောမကသြလို ကလဲ ပွောသေးတယျ ဘာလိုတယျ ညာလိုတယျ နဲ့ ။ ထားပါ ဒီလိုပွောတာကတော့ လူကွီးတျောတျော မြား မြား ရဲ့ စိတျဓါတျဆိုတာ ကြှနျနျော သဘောပေါကျတယျတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဗြာ အမျဒီ တငျပွတဲ့ အခါ ဒီပရောဂကျြ ကို သူပဲ ဆှဲထားသလိုလို သူကိုယျတိုငျပဲ အပငျပနျးခံထားရသလို တငျပွတယျ ။ အမျဒီက ကြှနျတော့ ပရောဂကျြကို လကျခံလိုကျတယျ ။ ပရောဂကျြ တဈခု အောငျမွငျသှားတော့ ကြှနျနျော တို့ ရုံးအဖှဲ့ တှေ ပြျောကွတာပေါ့ ။ ဂြာကွီးကတော့ ရုံးအဖှဲ့သားတှေ ရှမှေ့ာ ကြှနျနေျာ့ ကို ကြေးဇူးတငျကွောငျး တောငျမပွောဘူး ။ ကြှနျတော့မှာ မအိပျမနေ အပငျပနျးခံပီး ကွိုးစားခဲ့လိုကျရတာ ။ ကြှနျနျော တျောတျော ဒေါသ ဖွဈမိတယျ ။ ဒေါသ ဖွဈတိုငျးလညျး ဒေါသထှကျမိရငျ ကြှနျနေျာ့ အလှနျ ဖွဈဦးမယျ ။
ဒီအလုပျက လညျး ကြှနျနျော မထှကျခငျြ ။ ဂြာကွီး နာမညျ က ဦးဇျောဝငျးနိုငျ ၊ အသကျက လေးဆယျငါးလောကျရှိပီ ။ တျောကီကတော့ တျောတျော ကောငျးတယျ ကြှနျနျောတို့ လူငယျတှေ လိုကျမမှီ ။ တခြို့ ကပွောတယျ ဂြာကွီး စကားပွောလိုကျရငျ စိတျဆိုးနတေဲ့သူတောငျပွုံးရယျသှားတယျ ။ ယောကြားအခငျြးခငျြး တောငျ ဖငျခံခငျြသှား အောငျ ပွောတတျတယျ ဆိုပီး ပွောကွတယျသေးတယျ ။ တကယျလညျး တျောကီ တျောတျော ကောငျးပါတယျ ။ ကြှနျနျော သူ့ကို ဒေါသဖွဈပီး သှားရှဲလိုကျလို့ သူ့တျောကီအောကျမြောပီး ကြှနျနျောပါ ဖငျပိတျပီး ပွနျလာရမှာ ကွောကျလို့ ( ဟီးးးးး) ဒေါသတှေ မြိုခပြီး ပါးစပျပိတျပီး ပဲ နလေိုကျတော့တယျ ။ ဘယျလို တျောကီတှေ ပဈပီး ဖနျထားလဲတော့ မသိဘူး သူ့ မိနျးမ က သူရုပျရညျနဲ့ မလိုကျအောငျ ခြောတယျ ။ ကခငျြမ လုံးကွီးပေါကျကွီး ၊ အသကျက ၃၀ ဝနျးကငျြလောကျပဲ ရှိဦးမယျ ။ သူ့မိနျးမ ဘကျက လညျးခမျြးသာတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျး ။ သူ့ မိနျးမ လညျး သူ့တျောကီ ကွားဝငျသှားပီး ဖငျခံပီး ယူလိုကျရတာ ဖွဈမယျ ။
သူ့မိနျးမ နဲ့ ကြှနျနျော ခနခန ဆုံဖူးပါတယျ ။ တကယျလုံးကွီးပေါကျ မငျးကွီးကွိုကျကွီး အသကျက သာ သုံးဆယျလောကျ ဆိုပမေယျ့ နထေိုငျတာကတော့ တကယျ လူကွီးစတိုငျလျ ။ မွနျမာဝတျစုံ ခါးတို မြား ဝတျထားလိုကျရငျ တျောတျောကွညျ့ကောငျးဗြ ။ တခကျြတခကျြ ဘိုကျသားဖှေးဖှေးလေး မြား ပျေါ သှားတာမြိုး ကြှနျနျော မကွညျ့ပဲ မနနေိုငျ ။ မွငျအောငျပွောရရငျ မငျးသမီးနန်ဒာလှိုငျရဲ့ Grand Royal အရကျကွျောငွာပိုစတာထဲမှာ မွနျမာဝတျစုံ အနကျလေး နဲ့ ရိုကျထားတာ မွငျဖူးကွမှာပေါ့ ။ ရုပျခငျြမတူပမေယျ့ အဲ့လို ဆိုဒျမြိုးဗြ ဖငျအိုးကွီးကွီး နို့တငျးတငျး နဲ့ အသားဖွူဖွူ ကခငျြမ ။ စကားကသ နဲ့ တ နဲ့ မကှဲဘူး ။ နုတျခမျးလေးက လညျး မထူမပါး ။ မကျြခုံးကော့ကော့ ဖွငျ့ တျောတျော ခဈြစရာကောငျးတယျ ။ ခဈြစရာကောငျးတယျ ဆိုတာ ထကျ ကွိုကျစရာကောငျးတယျဆိုရမလား။ အပွငျထှကျရငျ မွနျမာ ဆနျဆနျ ပဲ ဝတျတတျတာမြားတယျ ။ အိမျနရေငျး ဆိုရငျ ဂါဝနျပှပှကွီး နဲ့ ။ကြှနျနျောက အလုပျကိစ်စ နဲ့ သူတို့ အိမျခနခန ရောကျဖွဈတော့ ကြှနျနျော နဲ့လညျး ရငျးနှီးနတေယျ ။ ဂြာကွီးနဲ့ ကြှနျနျော နဲ့ က သိပျသာ မကျြနှာကွောမတညျ့တာ အလုပျကိစ်စ ဆို ကြှနျနေျာ့ ကို ပဲ သူယုံကွညျတော့ တျောတျော မြားမြား ကိစ်စတှေ ကြှနျတော့ကို ပဲ ခိုငျးတတျတယျ။ မကျြနှာသာတော့မပေး ။ သူတို့မှာ လေးနှဈအရှယျ သားလေး တဈယောကျရှိတယျ ။
တျောတျောမြောကျရှုံးအောငျ ဆော့တဲ့ကောငျ ။ အလုပျကိစ်စ ရှိလို့ သူ့အိမျကို ရောကျရငျ ကြှနျနျော ကောငျးကောငျးမထိုငျရ ။ခေါငျးပျေါထိ တကျဆော့တယျကောငျ ။ သူ့ အိမျသှားရငျ ဘောငျးဘီဝတျသှားရတယျ ပုဆိုးဝတျထားရငျလညျး ခိုငျခိုငျသာ စညျးထား ။ သူတို့နတေဲ့ အိမျနဲ့ ကြှနျနျော တို့ ရုံးနဲ့ နဲနဲ တော့ အလှမျးဝေးတယျဗြ ။ ပိုကျဆံရှိတော့ ရုံးက ပေးထားတဲ့ အိမျမှာ မနပေဲ သူတို့ အိမျမှာ သူတို့နကွေတယျ ။ ရုံးကနေ ဆိုငျကယျနဲ့သှားရငျ နာရီဝကျ ကြျောလောကျ မောငျးရတယျ ။ ခွံနဲ့ဝနျး နဲ့ တထပျတိုကျပုလေး ဆောကျထားတယျ ။ အိမျးလေး က နခေငျြစရာလေး။ တဈနေ့ ( တနင်ျဂနှနေညေ့နေ လေးနာရီ ) ကြှနျနေျာ့ ပရောဂကျြ ကိစ်စ နဲ့ ပတျသကျပီး ရှငျးလငျးစရာတှေ ရှိတာနဲ့ ဂြာကွီး အိမျကို စီးတျောယာဉျ ဆိုငျကယျလေး ဖွငျ့သှားခဲ့တယျ ။
ခွံရှေ့ ရောကျတော့ လူချေါဘဲလျ တီးလိုကျပီး စောငျ့နတော ခနနတေော့ ဂြာကွီးမိနျးမ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ဂါဝနျပှပှ ကွီး နဲ့ တခါးလာဖှငျ့ပေးတယျ ။ “ဟော မောငျလငျးနိုငျ ဘာကိစ်စတုနျး လာအိမျထဲဝငျ” “ဟုတျကဲ့အမ ကြှနျနျော ပရောဂကျြကိစ်စ တှေ ရှငျးမလို့ပါ မနကျဖွနျ ပရောဂကျြ ကိစ်စ အစညျးအဝေး ရှိလို့ပါ ” “အျော ..အေးးအေးး လာထိုငျဦး အမ ကျောဖီ သှားဖြျောလိုကျဦးမယျ မငျး ဆရာ က ဂေါကျဖျ သှားရိုကျတယျ သူမနေ့တောလားမသိဘူး အမ ဖုနျးဆကျပေးမယျ ” ဟုတျကဲ့အမ ”
ကြှနျနေျာ့ ရှကေ့နေ ကော့ပတျ ကော့ပတျ နဲ့ နောကျခနျးထဲကို ဝငျသှားတယျ ။ ဂါဝနျ အပှကွီး ဝတျထားတာတောငျ နောကျအိုးဆုံကွီး က ကော့ထှကျနတောပဲ ၊ အိမျမှာ တိတျဆိတျနတေယျ ဟိုမြောကျလောငျးလေး မရှိဘူးလားမသိ ။ ဧညျ့ခနျးထဲမှာ ဖှငျ့ထားတဲ့ စကိုငျး နကျက ကိုးရီးယားဇတျလမျးတှဲ ကွညျ့ရငျး ကြှနျနျော ထိုငျစောငျ့နလေိုကျတယျ ။ ဆယျမိနဈလောကျ နတေော့ ကျောဖီခှကျတခှကျ ကိုငျရငျး ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ပွနျထှကျလာတယျ။ ” မငျး ဆရာက စောငျ့ပါဦးတဲ့ သူ ဂေါကျဖျ ရိုကျရငျးတနျးလနျး နဲ့ မို့တဲ့ လူကွီးတှေ လညျး ပါလို့ နောကျ ၂ နာရီလောကျကွာဦးမယျတဲ့ ” “အျော ..ဟုတျကဲ့ ရပါတယျ စောငျ့ရမှာပေါ့ အခုရှငျးခဲ့မှ ဖွဈမှာ မနကျဖွနျ အမျ ဒီကို ပွနျရှငျးရမှာမို့လို့ပါ ။
ဒါနဲ့ သားလေးမတှပေ့ါလား ” ” မငျးတူက ကြောငျးပိတျရကျ သူ့ အဘိုးတှဆေီ ပို့ထားတယျ တပတျ ကြျောပီ သူမရှိတော့လညျး ပငျြးစရာ အမလညျး ပငျြးနတော တနတေ့နေ့ ကိုးရီးယားကားပဲ ကွညျ့နရေတယျ ကျောဖီတောကျဦး ငါ့ မောငျ ” (သူ့စကားအတိုငျး သနဲ့တမပီတမူရငျးအတိုငျး ပွောငျးရေးလိုကျတယျဗြာ) ကြှနျနျော နဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျဆကျတီမှာ တငျ ပလငျခြိတျထိုငျရငျး ကြှနျနျော နဲ့ စကားတှေ ပွောဖွဈတယျ ။ တငျပါလငျခြိတျထိုငျထားတော့ ဂါဝနျ စ ကို ခွထေောကျ နှဈခြောငျး ကွား ညှပျထားတယျ ။ အောကျက ခွသေလုံးသား တှကေ ဒူးနားမရောကျတရောကျ ။ ခွသေလုံးသား က ဖှေးဥနတောပဲ ။ သခြော ကွညျ့ရငျ မှေးညှငျး နူနုလေးတှတေောငျမွငျနရေတယျ ။ သသေခြောခြာကွီးတော့ မကွညျ့ရဲ ကြှနျနေျာ့ ဂြာကွီး ရဲ့ မိနျးမ ကိုး..။
သူ ကလဲ ဘယျလို အနအေထားမှနျးမသိ ။ ဂါဝနျက လကျပွတျဂါဝနျ ဆိုတော့ တခကျြတခကျြ ဂြိုငျးအောကျက ပျေါပျေါသှားပီး ဘျောလီစ အပွာနု ရောငျလေး လှမျးတှရေ့သေးတယျ ။ ဆံပငျတှကေို နောကျလှနျစညျးထားပီး မကျြနှာမှာ ဘာမှ မလိမျးထား ။ အပွငျထှကျတိုငျး တမြိုးပီးတမြိုး ပွောငျး ဝတျတတျတဲ့ ဆှဲကွိုးတှေ နားတောငျးတှေ ဘာတဈခုမှ မဝတျထားဘူး ။ မကျြနှာ အသားဖွူဖွူလေး က ရှငျးပီး ခဈြစရာကောငျးတယျဗြာ ။ သူနဲ့သာ စကားတှေ ပွောနတော ကြှနျနျော စိတျထဲကတော့ စားနကြေ အကငျြ့ အတိုငျး ဒျေါမာမာခိုငျ ကို စိတျနဲ့ ပွဈမှား နမေိပီ။ အလုပျတှေ ရှုပျနတောနဲ့ အဲ့ဒီကိစ်စ မလုပျဖွဈတာလဲ ကွာတော့ အောကျက သကောငျ့သား က ထကွှခငျြနတေယျ။ ကြှနျနျော ရှိုးနတော ကို သတိထားမိလို့လား မသိ တခကျြတခကျြ ကြှနျနေျာ့ မကျြလုံးတှေ ကို စိုကျစိုကျကွညျ့တယျ ။ တအိမျလုံးမှာလဲ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး နဲ့ ကြှနျနျော နှဈယောကျတညျး ။
စိတျတှေ က သောငျးကနျြးနတေယျ ။ ထပွနျပီး အပွငျမှာ ၂ နာရီလောကျ အခြိနျဖွုနျးပီး မှ ပွနျလာ ရမလား ကြှနျနျော တှေးလိုကျသေးတယျ ။ ဒါပမေယျ့ မပွနျဖွဈ ကြှနျ နေျာ့ အတှေ့ အကွုံ အရ သူ့ အကွညျ့တှကေလညျး တမြိုးပဲ ။ ” ငါ့မောငျ ပငျြးနပေီလား အမ က စကားပွောဖျောမရှိလို့ စကားတှေ လြောကျပွောနတော မငျးဆရာကလဲ အလုပျကမြား အလုပျအားရငျ ဂေါကျဖျ သှားရိုကျ နဲ့ သားလေး မရှိတော့ အရမျးပငျြးတာပဲ ” ” ရပါတယျ မပငျြးပါဘူး အမ ကြှနျနျော အမ နဲ့ စကားပွောရတာ ပြျောပါတယျ ဂြာကွီး နဲ့သာ သိပျ အပေါကျအလနျးမတညျ့တာ ဟီးးးဟီးးး ” ” ဟုတျပ မငျးဂြာကွီးနဲ့လညျး အမ နဲ့ သိပျ အပေါကျလနျးတညျ့တာ မဟုတျဘူး ကလေးတဈယောကျသာ ရသှားတာ ” ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ပွောပီးမှာ စကားက အနှောကျအသှားမလှတျဖွဈသှားတာ သတိထားမိသှားတယျထငျတယျ။ စကား အပေါကျအ လနျးမတညျ့တာပွောတာနျော ငါ့မောငျ ” ကြှနျနျောလညျး စမျးသပျကွညျ့တဲ့ အနနေဲ့ စကားနဲနဲ စကွညျ့လိုကျတယျ။
“ကြှနျနျော လညျးစကားပွောတာ အပေါကျအလနျးမတညျ့တာ ပွောတာပါ ကနျြတာတော့ အပေါကျအလနျးတညျ့လို့ ကလေးတဈယောကျရ လာတာပေါ့နေျာ့ ဟီးးး ” “ဟငျးးးဟငျးးး ငါ့မောငျနျော လူပြိုသာ ဆိုတယျ စကားကလဲ ” ” ဟီးးး အမ နဲ့ ကြှနျနျောလညျး အပေါကျအ လနျးတညျ့ပါတယျနျော ..စကားပွောရတာပါ” ” ဟိတျဟိတျ .. .တျောပီ စကားပဲ အပေါကျအလနျးတညျ့ ကနျြတာလာမတညျ့နဲ့ ဟ ငျးးး ” ” ကနျြတာလညျး အပေါကျအတနျး တညျ့ရရငျ ကောငျးမယျထငျတယျနျော ” ကြှနျနျော ပွောခလြိုကျတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး မကျြလုံးပွူးသှားတယျ ။ အရငျက သူနဲ့ ကြှနျနျော ၂ ယောကျတညျး စကားသခြော မပွောဖူး ။ သူမ အနနေဲ့ လညျး ကြှနျနေျာ့ ကို ဒီ လောကျ ရဲ လိမျ့မယျ မထငျခဲ့ဘူးထငျတယျ ။ ” ဟိတျ ငါ့မောငျ စကားတှေ မကြှံ နဲ့နျော မငျးဂြာကွီး သိရငျ မငျး အလုပျပွုတျမယျနျော ” ” အမ မတိုငျရငျ မသိပါဘူး ” ” မတိုငျဘူးလို့ ဘယျသူက ပွောလဲ ” ” အမ မကျြလုံးတှကေ ပွောနတေယျလေ ” ဒျေါခိုငျခိုငျ ဦး မကျြလှာခသြှားတယျ ။ အတှေ့ အကွုံအရ ကြှနျနေျာ့ ဘကျက ကိုးဆယျဆလောကျ သာနပေီ ။
ကြှနျနျော ဘာဆကျလုပျရမလဲ သိ ပီလေ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး နား ကို ဖွေးဖွေးခငျြးတိုးကပျသှားခဲ့တယျ ။နောကျတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦးရဲ့ ပုခုံး နှဈဘကျပျေါ ကို ကြှနျနေျာ့ လကျနှဈဘကျ ကရြောကျသှားပီ။ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ခေါငျးကို ငုံထားတယျ ဘာမှမပွော ၊ ပုံခုံးသားလေး တှေ ကို အသာပှတျ ကာ လကျမောငျးရငျးမှ ကိုငျ၍ မတျတပျရပျစလေိုကျတော့ အလိုကျသငျ့ပါလာတယျ။ ” မကောငျးပါဘူး ..ငါ့မောငျရယျ ..မငျးဆရာ ပွနျလာတော့မှာ ” ခါးမှ ဆှဲဖကျလိုကျကာ နီထှေးထှေး နုတျခမျးတဈစုံအား ငုံခဲလိုကျတယျ ။ ” ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” အငျ့..အူးးး ဖ လူးးးး” ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ရုနျးဖယျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့လကျက ခါးကို တငျးကွပျစှာဖကျထားပီး ကြှနျတျောနဲ့ ကိုယျလုံးခငျြး ဆှဲကပျထား လိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ဘယျဘကျလကျက သူ့မ နဲ့ ခေါငျးကို နောကျကနေ ပွနျကိုငျထားပီး ညာဘကျလကျက ဂါဝနျပါးပါး ပျေါမှ တငျပါးတှကေို ပှတျပေးနရေငျး နုတျခမျးခငျြး မလှတျတမျး နမျးပဈလိုကျတယျ။
ပါးစပျ ကို အတငျး စထေ့ားပမေယျ့ တခကျြတခကျြ နုတျခမျးဟ သှားတဲ့အခြိနျ ကြှနျနေျာ့ လြှာ နဲ့ သူမ လြှာ ကို လုံးထှေးရဈပတျလိုကျတယျ ။ ” ပွှတျ ပွှတျ ” ” အငှးးးဖလူးးးးအူးးးး ” ကြှနျနေျာ့ညာဘကျလကျက တငျပါးအနှံ လြောကျပှတျနရေငျး သတိထားမိလိုကျတယျ ၊ အတှငျးခံ မဝတျထားပါလား ။ ဒါကွောငျ့ ခြောမှတျနတောကို။ အနမျးတှေ ကို မရပျသလို ကြှနျနေျာ့လကျကလဲ တငျပါး တလြောကျ ပှတျဆှဲရငျး တငျပါး နှဈခွမျးကွားကို နှိုကျ နှိုကျပေးမိတယျ ။ ထှားလှနျးတဲ့ တငျပါးတှကွေောငျ့ ကြှနျနေျာ့ လကျခြောငျးမြားက တငျပါးနှဈခွမျးကွား ညှပျညှပျသှားသလို ခံစားမိ တယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ရငျဘတျ တှကေ ကြှနျနေျာ့ ရငျဘတျ နှငျ့ ဖိကပျနမေိတာကွောငျ့ သူနို့နှဈစုံရဲ့ အထိအတှေ့ ကို အောကျခံ ဘျောလီမှ တဆငျ့ သိရှိမိတယျ ။ ” ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” အားးး တျောတော့ ကှာ ငါ့မောငျ မငျးဆရာသိသှားရငျ မိုးမီးလောငျမယျ ” ” မသိပါဘူး မမ ရယျ ဂြာကွီးက ၂ နာရီလောကျကွာဦးမှာပဲ ” “အာာာာ မသိတော့ဘူးကှာ ပွဿနာ တတျမှာ ကွောကျတယျကှာ ” ” ကြှနျနျော ခွံတခါး သှားပိတျထားလိုကျမယျ ဂြာကွီး ကား ဝငျလာရငျ သိတာပေါ့ ” ကြှနျနျော ဧညျ့ခနျးမှ အလောတကွီး ထှကျကာ ခွံ ဝနျးတံခါး ကို သော့သှားခတျလိုကျတယျ ။
ပီးတာ နဲ့ အိမျပျေါ တကျလာတော့ ဧညျ့ခနျးတှငျ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ရှိမနတေော့ ၊ အတှငျးခနျး ဘကျ ဝငျလာလိုကျတော့ အိပျခနျးတံခါး စထေ့ားတာ တှလေို့ကျလို့ တံခါး ကို အသာတှနျးလိုကျတော့ ဂကျြမခထြား ၊ အတှငျးခနျးထဲ ကြှနျနျော လှမျးဝငျလိုကျတယျ ။ မှနျတငျခုံရှေ့ မှာ မတျတပျရပျနတေဲ့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ။ တံခါးကို အသာ ပွနျပိတျလိုကျပီး ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ထံ ဖွေးဖွေးခငျြးလြောကျလာလိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ကို လှညျ့မကွညျ့ ။ ကြှနျနျော နောကျဘကျကနေ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ကို ဖကျ လိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့လကျနှဈဘကျလုံးက သူမ ရငျဘတျ ပျေါ ကို ကှကျတိ တငျထားရငျး ဂုတျသားလေးတှေ ကိုနမျးစုပျလိုကျ တယျ ။ ” အာ.ယားတယျကှာ အဲ့နရော မနမျးနဲ့ ဘယျလိုကွီးမှနျးလဲမသိဘူး တမြိူးကွီး ” ညူတူတူ အသံဖွငျ့ပွောတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ လကျတဘကျက နို့အုံတှကေို ကိုငျနရောမှ အောကျကို လြောခလြိုကျပီး ပေါငျခှဆုံကွားကို ဝငျလိုကျတယျ ။ လကျခြောငျးမြားက နရောမှနျကို ကှကျတိ ။ ” အားးးး မောငျလေးးးး ဖွေးဖွေး ” ဂါဝနျစ ပျေါမှာ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး အဖုတျကွီး ကိုနှိုကျပေးနလေိုကျတယျ ။
အဖုတျ ထဲမှ အရညျစိုတိုတိုက ဂါဝနျစမှာ စေးကပျကပျ ဖွဈလာပီး ကြှနျနေျာ့ လကျကို ပါ စိုလာတယျ ။ ” အားးးးအငျးးးမောငျလေးး ကောငျးတယျ အားးးဖွေးဖွေး ” ကြှနျနေျာ့ ဘောငျးဘီအောကျမှ သကောငျ့သား ကလဲ ထနျနပေီ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တငျပါးကွီးတှေ နဲ့ ဖိကပျထားရငျး စောကျဖုတျကို မနားတမျး ပှတျဆှဲပေးနမေိတယျ ။သူမ တငျပါးကွီးတှကေ လညျး နောကျဘကျကို ကော့ကော့လာ တယျ ။ တဖွညျးဖွညျး နဲ့ ကြှနျနျော သူမ ဂါဝနျစ ကို အောကျမှ ဖွေးဖွေး ခငျြး အပျေါ ကို ဆှဲတငျလိုကျတယျ ။ အဖုတျကို နှိုကျကွညျ့ လိုကျတော့ စောကျရညျက တျောတျော ရှဲနပေီ ။ ဂါဝနျကို အပျေါထိ ဆှဲမ လိုကျပီး ခေါငျးမှ ခြှတျပဈလိုကျတယျ ။ တလကျစတညျး ကြှနျနေျာ့ ဘောငျးဘီ ကိုလညျး ခါးပတျခြှတျ ဇဈဖွုတျကာ အောကျကို ဆှဲ ခြှတျလိုကျတယျ ။ အရမျးညောငျးနပေီ ဖွဈတဲ့ ကြှနျနေျာ့ လီးက ခကျြခငျြး ငေါကျကနဲ အပျေါ ကို ထောငျတကျလာတယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦးက ကုတငျစောငျးမှာ တငျပလငျ ခြိတျကာ ထိုငျရငျး ကြှနျနေျာ့ ကို ကွညျ့နတေယျ ။ တငျပလငျခြိတျ ထိုငျထားတော့ အိုးကားကားကွီးမြားဘေးကို ထှကျနတေယျ။
အဖုတျကိုတော့မမွငျ ရ ။ စောကျဖုတျမှေး တှကေတော့ ဆီးခုံ အစပျမှာ ပျေါနတေယျ ။ သူမ ရှမှေ့ာ ပဲ ကြှနျနေျာ့ လီးကို ကိုငျပီး ဂှေ တခကျြနှဈခကျြ လှိမျ့ပွ လိုကျတယျ။ ” အာာာ နဲတာကွီး မဟုတျဘူး ” ကြှနျနျော လီးဒဈ ကို ဖွဲပွလိုကျတော့ သူ့ လကျကလေး နဲ့ မရဲ တရဲ လာကိုကျကွညျ့ပီး လကျညိုးလကျမ လေး နဲ့ ကြှနျနေျာ့ လီးဒဈလေး ကို အသာဖိကွညျ့တယျ ။ပဈြ ကနဲ အရညျကွညျလေး ထိပျဝ ကို ထှကျသှားတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး သဘောကသြှားတယျ ။ ကြှနျနျော သူမ ပုခုံးမှ ကိုငျကာ ကုတငျပျေါကို တှနျးလှဲလိုကျတယျ ။ တငျပလငျခြိတျထားတာ ပွသှေားပီး ခွနှေဈခြောငျး က ကုတငျ အောကျ တှဲလောငျးကကြာ ပကျလကျလနျသှားတယျ ။ ကြှနျနျော ကုတငျအောကျမှာ ဒူး ထောကျထိုကျလိုကျပီး ပေါငျနှဈခြောငျး ကို ကားလိုကျတော့ သူမရဲ့ အဖုတျကွီး ပွူးထှကျလာတယျ ။ တျောတျော အမှေးထူသော အဖုတျ ။ ဆီးခုံ အစပျမှ အဖုတျနုတျခမျးသားတှနေား အထိ အမှေးမြားက ထူထဲစှာ ပေါကျနတေယျ ။ ခနခန ရိတျလို့ လားမသိ ။ အရမျးသနျ သောစောကျမှေးမြား ။စောကျမှေး တှေ ကို လကျဖွငျ့ အသာဆှဲဖယျလိုကျတော့ အောကျမှ စောကျစိ ပွူးပွူးလေး ထှကျ လာတယျ ။
စောကျမှေးတှေ သခြော ဖယျကွညျ့လိုကျတော့ အဖုတျ က မဲ မနဘေူး ။ ကခငျြမ ဆိုတဲ့ အတိုငျး ဒျေါခိုငျခိုငျဦး က အသားဖွူတယျ စောကျဖုတျက ဖွူမနပေမေယျ့ အညိုရောကျဘကျသနျးသလို ရှိသလိုပဲ ။ စောကျခေါငျး အတှငျးသားတှကေတော့ နီရဲရဲ အနအေထား ။ ပေါငျနှဈဘကျကို အပျေါဘကျကို ထောငျလိုကျပီး ကားပေးလိုကျတော့ အောကျဘကျက စအိုဝ ညိုတိုတို လေး ပါ တှလေို့ကျရတယျ ။ စအို အဝမှာပငျ အမှေးတှေ တဈပငျစနှဈပငျစ ပေါကျနသေေးတယျ ။ ဆီးခုံအပျေါ အစပျလောကျမှတော့ ကလေး မှေးတုနျးက ခှဲမှေးထားဟနျရှိတယျ ကနျ့လနျ ပွတျ အမာရှတျ ခွောကျလကျမခနျ့ရှိတယျ ။ ကြှနျနျော ဒူးထောကျလြှကျ အနအေထားကပငျ စောကျဖုတျ နုတျခမျးသား အဖတျလေးတှကေို ဖွဲလိုကျကာ လြှာအပွားလိုကျ အဖုတျပျေါ တငျလိုကျတယျ။ ” အားးးးမောငျလေ ” ” ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” ပလကျပလကျ ..ပလကျ ” ” အားးး အငျးးးးး ကောငျးတယျ မောငျလေး အားးးးရှီးးးးး ”
ကြှနျနျော လြှာက စောကျဖုတျတငျမဟုတျ စောကျဖုတျနှငျ့ လကျတလုံးခွားသာ ရှိတဲ့ စအို ညိုတိုတို ခရပှေငျ့ အထိ ပါ အလြှား လိုကျ ဆှဲဆှဲ ပီး ယကျပဈလိုကျတယျ ။ကြှနျနျော လကျနှဈဘကျက ပေါငျ နှဈဘကျကို ရှေ့ သို့ တှနျးကနျပေးထားသလို ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ကလဲ သူမ ခွထေောကျ နှဈခြောငျးကို လကျနှဈဘကျမှ လှမျး၍ ဒူးကောကျဝတျနားကို လှမျးကိုငျကာ ဆှဲ ထားတော့ တငျပါးကွီးက အပျေါကို ခပျမွောကျမွောကျ အနအေထားဖွဈနတေယျ။ “.ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” အားးးး မောငျလေးရယျ ကောငျးနပေီ အားးးးးး ” ” ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” အားးးး ဟုတျတယျ အတှငျး ထဲကို လြှာ နဲ့ ထိုးပေး အားးးးအရမျးကောငျးတယျ ” ကြှနျနျော လကျနှဈဘကျ ကို စောကျဖုတျ ဘေးသား နုတျခမျးတှေ ကို ဆှဲဖွဲလိုကျကာ အဖုတျထဲသို့ လြှာကို ထိုးထိုးပီး ထညျ့ကာ ယကျပေးလိုကျတယျ ။ တငျပါးကွီးကွီး ပေါငျတံကွီးကွီး ကွားထဲမှာ ကြှနျနျော မကျြနှာတဈခုလုံး နဈမွုပျနသေလိုပဲ ။
စောကျပတျ အနံအသကျ သိပျမရှိ သခြောသနျ့စငျထားပုံလဲရတယျ ။ ညှီစို့စို့ အဖုတျနံက တော့ ရှိတယျ ။ ” ပွှတျ ပွှတျ ” တခကျြတခကျြ စောကျစိ ကို နုတျခမျးသား ဖွငျ့ ဖိဖိ ကိုကျသလိုမြိုးလုပျလုပျပေးလိုကျတယျ။ ” အားးးး ကောငျးတယျမောငျရယျ…. မမ ပီးတော့မယျထငျတယျ ” ” ပလကျ ပ လကျ ပွှတျ ပွှတျ ” ” အားးးးး ကောငျးတယျ မောငျ အားးးးထှကျကုနျပီ အားးးထှကျထှကျကုနျပီ ” ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တဈယောကျ ငွီး တှားသံတှကေယျြလာကာ သူမ စောကျစိကို သူမ လှမျးပှတျရငျး အဖုတျ အခေါငျး အတှငျး မှ အရညျတှေ ညှဈညှဈခတြယျ ။ ကြှနျ နျော ယကျပေးနတော ကို အသာ ဖယျလိုကျပီး အဖုတျကို သခြောကွညျ့နမေိတယျ ။ အဖုတျ အတှငျးသားမြားမှ လှုပျစလှုပျစိ ဖွငျ့ အရညျကွညျလေး တှေ စိမျ့စိမျ့ ကလြာတာ တှလေို့ကျတယျ ။ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး တဈယောကျ မလိုးရသေးခငျမှာ ပငျ တဈခြီ ပီးသှား ခွငျး ဖွဈသညျ ။ စဉျးစားမိသလောကျ အဖုတျ အယကျ မခံရတာ ကွာနပေီ ဖွဈပီး အဖုတျ အယကျ ခံလိုကျရတာ ကွောငျ့ ခကျြခငျြး ဆိုသလို စိတျတှေ မွောကျတကျကာ ပီးသှားခွငျး ဖွဈနိုငျသညျ ။
” အားးး မောငျလေး အရမျးကောငျးတာပဲ .. တကယျကောငျးတယျ ပီးသှားတယျ ” ရှကျကိုးရှကျကနျး အမူအရာဖွငျ့ ကြှနျနေျာ့ ကို ခေါငျးထောငျကွညျ့ကာ ပွောတယျ ။ ကုတငျဘေးမှ ဒျေါခိုငျ ခိုငျဦး ဂါဝနျ ကို ယူကာ ကြှနျနျော နုတျခမျးမှ စောကျရညျတှေ သုတျလိုကျပီး မတျတပျ ထရပျလိုကျတယျ။ ” မမ တဈယောကျတညျး ပီးနကေောငျးနလေို့ မဖွဈဘူးနျော ” ကြှနျနေျာ့ လီး ကို လကျဖွငျ့ ဂှလေိမျ့ပွလိုကျတယျ ။ ” အငျးပါ မမ သဘောပေါကျပါတယျနျော ” ပကျလကျ လှနျနရောမှ သူမ လကျကို ကြှနျနေျာ့ဆီ ကမျးပေးတာ နဲ့ ကြှနျနျော ဆှဲထူလိုကျတယျ ။ ကြှနျနျော က ကုတငျဘေးမှာ မတျတပျရပျ အနအေထား သူမက ကုတငျပျေါမှာ ထိုငျလြှကျအနအေထား ကြှနျနေျာ့လီးက သူမ မကျြနှာနှငျ့ တတနျးတညျး ။ ထို့နောကျ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး က ကြှနျနေျာ့ လီးတံဆီကို လကျလှမျးလိုကျတယျ။ ” ပှမျပှမျ ” ကြှနျနျောရော ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ကော လနျ့ဖနျြ့ သှားတယျ ။ အိမျရှမှေ့ ကားဟှနျးသံ ။ ကြှနျနျော ဘေးနားမှာ ခြှတျထားသော ဘောငျးဘီ ကို အမွနျကောကျဝတျ သူမကလညျး ဘေးမှ ဂါဝနျကို ခေါငျးမှ လြှို ဝတျကာ အခနျးအတှငျး မှ အိပျယာခငျးတှေ သခြောပွနျဖွနျ့ ကာ ဧညျ့ခနျး ကို ခပျသုတျသုတျထှကျလာ လိုကျတယျ ။
ပီးတော့ ကြှနျနျောလညျး ရုပျတညျတညျ ဖွငျ့ ဧညျ့ခနျးမှာ ထိုငျနလေိုကျပီး သူမက တော့ အိမျရှေ့ တံခါးကို သှားဖှငျ့ပေး တယျ ။ ဂြာကွီး ရောကျလာတာ လညျး မွနျလိုကျတာ လို့ စိတျထဲမှာ တှေးပီး နာရီကွညျ့လိုကျတော့ ကြှနျနျော တို့ အလုပျဖွဈနတော လေးဆယျ့ ငါးမိနဈ ကြျောသှားတာ သိလိုကျရတယျ ။ ဂြာကွီး ရောကျလာပီး ဒျေါခိုငျခိုငျဦး လညျး အခနျးထဲ ဝငျသှားတယျ။ ကြှနျနျော နဲ့ ဂြာကွီး အလုပျကိစ်စ တှေ ပွောဆိုပီး ပွနျလာဖွဈလိုကျတယျ ။ ကြှနျနေျာ့ ညီတျောမောငျကတော့ အဆငျမပွဘေူး ။ အခနျးကို ပွနျရောကျမှ ပဲ ကြှနျနျော ဂှလေိမျ့လိုကျရငျး အဆုံးသတျပေးလိုကျရတယျ ။ ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ကို ကြှနျနျော ပိုငျ နပေီလေ ။ တဈရကျရကျတော့ အဆငျပွမှောပါ ။ အခှငျ့အရေးသာမယျ့နေ့ ကို စောငျ့နလေိုကျတယျ ။ ဒီကွားထဲ ဂြာကွီး ကို ကြှနျ နျော မကျြနှာခြို သှေးကာ အလုပျကိစ်စ တှေ အဆငျပွအေောငျ လုပျပေးနခေဲ့တယျ ။ ခကျတာ တခုက ဂြာကွီး နဲ့ ရုံးမှာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျလိုကျတိုငျး သူ့မိနျးမ စောကျဖုတျ ကွီး ပွေးပွေးမွငျနမေိတယျ ။
ဂြာကွီးမိနျးမကို ကြှနျနျော ဂြာ ပေးထားတာကို တော့ ဂြာကွီးကတော့ မသိရှာ။တဈရကျ တနင်ျဂနှေ နေ့ နလေ့ညျခငျး ကြှနျနေျာ့အခနျးမှာ အခနျးအောငျးပီး အိပျနတေုနျး ဂြာကွီး ဆီက ဖုနျးလာတယျ ။ ဂြာကွီး အိမျကို သှားဘို့ ကို အလုပျကိစ်စက လညျး မရှိဖွဈနတော။ ဂြာကွီးက ညနေ ဂေါကျရိုကျခြိနျးထားတာ သူ့မိနျးမ ကလညျး သူ့ သူငယျခငျြး အိမျ ကိစ်စ ရှိလို့ သှားစရာရှိနလေို့ ကြှနျနေျာ့ ကိုလိုကျပို့ခိုငျးတယျ ။ သူ့မိနျးမကိုကား ခနလိုကျ မောငျးပေးပါဆိုပီး အကူအညီတောငျးလာတယျ ။ ” ညီလေး ညနေ လေးနာရီလောကျ လာခဲ့ပေးပါကှာ ကူညီပါဦး အကိုလညျး ခြိနျးထားပီးသားကွီး ဖွဈနလေို့ မငျးအမ ကို ကားလိုကျမောငျးပို့လိုကျပါဦး အားတယျ မလားညီလေး ” “.ဟုတျကဲ့ ရပါတယျ ဂြာ ကွီး ကြှနျနျော လာခဲ့လိုကျပါ့မယျ ” “.အေးအေး ကြေးဇူးညီလေးရာ ဒါပမေယျ့ တဈခုတော့ ရှိတယျနျော မငျးအမ က တဈနရော သှားရငျ အရမျးကွာတတျ လို့ ညီလေး စိတျတော့ ရှညျပေးပါ ”
“.ဟုတျကဲ့ ရပါတယျ ဂြာကွီး ကြှနျနျော အဆငျပွပေါတယျ ” ဂြာ ကွီး ဖုနျးခသြှားပီး ကြှနျနျောလညျး ခကျြခငျြး မွို့ အစှနျက ကြှနျနေျာ့ အသိ တညျးခိုခနျး ကို ဖုနျးဆကျပီး ဘှတျကငျလုပျထားလိုကျ တယျ ။ ဒီကိစ်စ က ဒျေါခိုငျခိုငျဦး အကှကျမှနျး ကြှနျနျော သိတယျ ။ ဂြာကွီး ဂေါကျရိုကျနတေဲ့ အခြိနျ အပွငျထှကျဘို့လုပျတယျ ဆို ကတညျးက ကြှနျနျော ဘာဆိုတာ သဘောကျပေါကျလိုကျတယျ ။ ညနေ သုံးနာရီ ခှဲ ကတညျးက ကြှနျနျော ဂြာကွီး အိမျကို ရောကျ သှားတယျ ။ အိမျထဲ ဝငျလိုကျတော့ ဒျေါခိုငျခိုငျဦး ကို မတှေ့ ဂြာကွီးက ဂေါကျရိုကျသှားဘို့ ပွငျဆငျနပေီး ဂေါကျဖျ အိတျတှေ ကား ပျေါ တငျနတေယျ ။ ” ကဲ ညီ
ကျွန်နော့် မန်နေဂျာ ( ဂျာကြီး ) ကိုတော်တော် တင်းနေပီဗျာ ။ ကျွန်နော့် ပရောဂျက် တစ်ခု ကို တင်ပြတယ် ။ သူသဘောကျတယ် ဒါ ကို သဘောမကျသလို ကလဲ ပြောသေးတယ် ဘာလိုတယ် ညာလိုတယ် နဲ့ ။ ထားပါ ဒီလိုပြောတာကတော့ လူကြီးတော်တော် များ များ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ကျွန်နော် သဘောပေါက်တယ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဗျာ အမ်ဒီ တင်ပြတဲ့ အခါ ဒီပရောဂျက် ကို သူပဲ ဆွဲထား သလိုလို သူကိုယ်တိုင်ပဲ အပင်ပန်းခံထားရသလို တင်ပြတယ် ။ အမ်ဒီက ကျွန်တော့ ပရောဂျက်ကို လက်ခံလိုက်တယ် ။ ပရောဂျက် တစ်ခု အောင်မြင်သွားတော့ ကျွန်နော် တို့ ရုံးအဖွဲ့ တွေ ပျော်ကြတာပေါ့ ။
ဂျာကြီးကတော့ ရုံးအဖွဲ့သားတွေ ရှေ့မှာ ကျွန်နော့် ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း တောင်မပြောဘူး ။ ကျွန်တော့မှာ မအိပ်မနေ အပင်ပန်း ခံပီး ကြိုးစားခဲ့လိုက်ရတာ ။ ကျွန်နော် တော်တော် ဒေါသ ဖြစ်မိတယ် ။ ဒေါသ ဖြစ်တိုင်းလည်း ဒေါသထွက်မိရင် ကျွန်နော့် အလွန် ဖြစ်ဦးမယ် ။ ဒီအလုပ်က လည်း ကျွန်နော် မထွက်ချင် ။ ဂျာကြီး နာမည် က ဦးဇော်ဝင်းနိုင် ၊ အသက်က လေးဆယ်ငါးလောက်ရှိပီ ။ တော်ကီကတော့ တော်တော် ကောင်းတယ် ကျွန်နော်တို့ လူငယ်တွေ လိုက်မမှီ ။ တချို့ ကပြောတယ် ဂျာကြီး စကားပြောလိုက်ရင် စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူတောင်ပြုံးရယ်သွားတယ် ။
ယောကျားအချင်းချင်း တောင် ဖင်ခံချင်သွား အောင် ပြောတတ်တယ် ဆိုပီး ပြောကြတယ်သေးတယ် ။ တကယ်လည်း တော်ကီ တော်တော် ကောင်းပါတယ် ။ ကျွန်နော် သူ့ကို ဒေါသဖြစ်ပီး သွားရှဲလိုက်လို့ သူ့တော်ကီအောက်မျောပီး ကျွန်နော်ပါ ဖင်ပိတ်ပီး ပြန်လာရမှာ ကြောက်လို့ ( ဟီးးးးး) ဒေါသတွေ မျိုချပီး ပါးစပ်ပိတ်ပီး ပဲ နေလိုက်တော့တယ် ။ ဘယ်လို တော်ကီတွေ ပစ်ပီး ဖန် ထားလဲတော့ မသိဘူး သူ့ မိန်းမ က သူရုပ်ရည်နဲ့ မလိုက်အောင် ချောတယ် ။ ကချင်မ လုံးကြီးပေါက်ကြီး ၊ အသက်က ၃၀ ဝန်းကျင် လောက်ပဲ ရှိဦးမယ် ။ သူ့မိန်းမ ဘက်က လည်းချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း ။ သူ့ မိန်းမ လည်း သူ့တော်ကီ ကြားဝင်သွားပီး ဖင်ခံပီး ယူ လိုက်ရတာ ဖြစ်မယ် ။ သူ့မိန်းမ နဲ့ ကျွန်နော် ခနခန ဆုံဖူးပါတယ် ။
တကယ်လုံးကြီးပေါက် မင်းကြီးကြိုက်ကြီး အသက်က သာ သုံးဆယ်လောက် ဆိုပေမယ့် နေထိုင်တာကတော့ တကယ် လူကြီးစတို င်လ် ။ မြန်မာဝတ်စုံ ခါးတို များ ဝတ်ထားလိုက်ရင် တော်တော်ကြည့်ကောင်းဗျ ။ တချက်တချက် ဘိုက်သားဖွေးဖွေးလေး များ ပေါ် သွားတာမျိုး ကျွန်နော် မကြည့်ပဲ မနေနိုင် ။ မြင်အောင်ပြောရရင် မင်းသမီးနန္ဒာလှိုင်ရဲ့ Grand Royal အရက်ကြော်ငြာပိုစတာထဲမှာ မြန်မာဝတ်စုံ အနက်လေး နဲ့ ရိုက်ထားတာ မြင်ဖူးကြမှာပေါ့ ။ ရုပ်ချင်မတူပေမယ့် အဲ့လို ဆိုဒ်မျိုးဗျ ဖင်အိုးကြီးကြီး နို့ တင်းတင်း နဲ့ အသားဖြူဖြူ ကချင်မ ။
စကားက သ နဲ့တ နဲ့ မကွဲဘူး ။ နုတ်ခမ်းလေးက လည်း မထူမပါး ။ မျက်ခုံးကော့ကော့ ဖြင့် တော်တော် ချစ်စရာကောင်းတယ် ။ ချစ်စရာကောင်းတယ် ဆိုတာ ထက် ကြိုက်စရာကောင်းတယ်ဆိုရမလား။ အပြင်ထွက်ရင် မြန်မာ ဆန်ဆန် ပဲ ဝတ်တတ်တာများ တယ် ။ အိမ်နေရင်း ဆိုရင် ဂါဝန်ပွပွကြီး နဲ့ ။ကျွန်နော်က အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ သူတို့ အိမ်ခနခန ရောက်ဖြစ်တော့ ကျွန်နော် နဲ့လည်း ရင်းနှီး နေတယ် ။ ဂျာကြီးနဲ့ ကျွန်နော် နဲ့ က သိပ်သာ မျက်နှာကြောမတည့်တာ အလုပ်ကိစ္စ ဆို ကျွန်နော့် ကို ပဲ သူယုံကြည်တော့ တော်တော် များများ ကိစ္စတွေ ကျွန်တော့ကို ပဲ ခိုင်းတတ်တယ်။ မျက်နှာသာတော့မပေး ။ သူတို့မှာ လေးနှစ်အရွယ် သားလေး တစ် ယောက်ရှိတယ် ။ တော်တော်မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့တဲ့ကောင် ။ အလုပ်ကိစ္စ ရှိလို့ သူ့အိမ်ကို ရောက်ရင် ကျွန်နော် ကောင်းကောင်း မထိုင်ရ ။ခေါင်းပေါ်ထိ တက်ဆော့တယ်ကောင် ။ သူ့ အိမ်သွားရင် ဘောင်းဘီဝတ်သွားရတယ် ပုဆိုးဝတ်ထားရင်လည်း ခိုင်ခိုင်သာ စည်းထား ။
သူတို့နေတဲ့ အိမ်နဲ့ ကျွန်နော် တို့ ရုံးနဲ့ နဲနဲ တော့ အလှမ်းဝေးတယ်ဗျ ။ ပိုက်ဆံရှိတော့ ရုံးက ပေးထားတဲ့ အိမ်မှာ မနေပဲ သူတို့ အိမ်မှာ သူတို့နေကြတယ် ။ ရုံးကနေ ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရင် နာရီဝက် ကျော်လောက် မောင်းရတယ် ။ ခြံနဲ့ဝန်း နဲ့ တထပ်တိုက်ပုလေး ဆောက် ထားတယ် ။ အိမ်းလေး က နေချင်စရာလေး။ တစ်နေ့ ( တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ လေးနာရီ ) ကျွန်နော့် ပရောဂျက် ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပီး ရှင်းလင်းစရာတွေ ရှိတာနဲ့ ဂျာကြီး အိမ်ကို စီးတော်ယာဉ် ဆိုင်ကယ်လေး ဖြင့်သွားခဲ့တယ် ။ ခြံရှေ့ ရောက်တော့ လူခေါ်ဘဲလ် တီးလို က်ပီး စောင့်နေတာ ခနနေတော့ ဂျာကြီးမိန်းမ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဂါဝန်ပွပွ ကြီး နဲ့ တခါးလာဖွင့်ပေးတယ် ။ “ဟော မောင်လင်းနိုင် ဘာ ကိစ္စတုန်း လာအိမ်ထဲဝင်” “ဟုတ်ကဲ့အမ ကျွန်နော် ပရောဂျက်ကိစ္စ တွေ ရှင်းမလို့ပါ မနက်ဖြန် ပရောဂျက် ကိစ္စ အစည်းအဝေး ရှိ လို့ပါ ” “အော် ..အေးးအေးး လာထိုင်ဦး အမ ကော်ဖီ သွားဖျော်လိုက်ဦးမယ် မင်း ဆရာ က ဂေါက်ဖ် သွားရိုက်တယ် သူမေ့နေတာ လားမသိဘူး အမ ဖုန်းဆက်ပေးမယ် ”
ဟုတ်ကဲ့အမ ” ကျွန်နော့် ရှေ့ကနေ ကော့ပတ် ကော့ပတ် နဲ့ နောက်ခန်းထဲကို ဝင်သွားတယ် ။ ဂါဝန် အပွကြီး ဝတ်ထားတာတောင် နောက်အိုးဆုံကြီးက ကော့ထွက်နေတာပဲ ၊ အိမ်မှာ တိတ်ဆိတ်နေတယ် ဟိုမျောက်လောင်းလေး မရှိဘူးလားမသိ ။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ စကိုင်းနက်က ကိုးရီးယားဇတ်လမ်းတွဲ ကြည့်ရင်း ကျွန်နော် ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ် ။ ဆယ်မိနစ်လောက် နေတော့ ကော်ဖီခွက်တခွက် ကိုင်ရင်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ပြန်ထွက်လာတယ်။ ” မင်း ဆရာက စောင့်ပါဦးတဲ့ သူ ဂေါက်ဖ် ရိုက်ရင်းတန်းလန်း နဲ့ မို့ တဲ့ လူကြီးတွေလည်း ပါလို့ နောက် ၂ နာရီလောက်ကြာဦးမယ်တဲ့ ” “အော် ..ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် စောင့်ရမှာပေါ့ အခုရှင်းခဲ့မှ ဖြစ်မှာ မနက်ဖြန် အမ်ဒီကို ပြန်ရှင်းရမှာမို့လို့ပါ ။ ဒါနဲ့ သားလေးမတွေ့ပါလား ” ” မင်းတူက ကျောင်းပိတ်ရက် သူ့ အဘိုးတွေဆီ ပို့ထားတယ် တပတ်ကျော်ပီ သူမရှိတော့လည်း ပျင်းစရာ အမလည်း ပျင်းနေတာ တနေ့တနေ့ ကိုးရီးယားကားပဲ ကြည့်နေရတယ်
ကော်ဖီ တောက်ဦး ငါ့မောင် ” (သူ့စကားအတိုင်းသနဲ့တမပီတမူရင်းအတိုင်း ပြောင်းရေးလိုက်တယ်ဗျာ) ကျွန်နော် နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက် တီမှာ တင်ပလင်ချိတ်ထိုင်ရင်း ကျွန်နော် နဲ့ စကားတွေ ပြောဖြစ်တယ် ။ တင်ပါလင်ချိတ်ထိုင်ထားတော့ ဂါဝန် စ ကို ခြေထောက် နှစ် ချောင်းကြား ညှပ်ထားတယ် ။ အောက်က ခြေသလုံးသား တွေက ဒူးနားမရောက်တရောက် ။ ခြေသလုံးသား က ဖွေးဥနေတာပဲ ။ သေချာကြည့်ရင် မွှေးညှင်း နူနုလေးတွေတောင်မြင်နေရတယ် ။ သေသေချာချာကြီးတော့ မကြည့်ရဲ ကျွန်နော့် ဂျာကြီး ရဲ့ မိန်းမ ကိုး..။ သူကလဲ ဘယ်လို အနေအထားမှန်းမသိ ။ ဂါဝန်က လက်ပြတ်ဂါဝန် ဆိုတော့ တချက်တချက် ဂျိုင်းအောက်က ပေါ်ပေါ်သွား ပီး ဘော်လီစ အပြာနု ရောင်လေး လှမ်းတွေ့ရသေးတယ် ။ ဆံပင်တွေကို နောက်လှန်စည်းထားပီး မျက်နှာမှာ ဘာမှ မလိမ်းထား ။ အပြင်ထွက်တိုင်း တမျိုးပီးတမျိုး ပြောင်း ဝတ်တတ်တဲ့ ဆွဲကြိုးတွေ နားတောင်းတွေ ဘာတစ်ခုမှ မဝတ်ထားဘူး ။
မျက်နှာအသား ဖြူဖြူလေး က ရှင်းပီး ချစ်စရာကောင်းတယ်ဗျာ ။ သူနဲ့သာ စကားတွေ ပြောနေတာ ကျွန်နော် စိတ်ထဲကတော့ စားနေကျ အကျင့် အတိုင်း ဒေါ်မာမာခိုင် ကို စိတ်နဲ့ ပြစ်မှား နေမိပီ။ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ အဲ့ဒီကိစ္စ မလုပ်ဖြစ်တာလဲ ကြာတော့ အောက်က သ ကောင့်သား က ထကြွချင်နေတယ်။ ကျွန်နော် ရှိုးနေတာ ကို သတိထားမိလို့လား မသိ တချက်တချက် ကျွန်နော့် မျက်လုံးတွေ ကို စိုက်စိုက်ကြည့်တယ် ။ တအိမ်လုံးမှာလဲ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး နဲ့ ကျွန်နော် နှစ်ယောက်တည်း ။စိတ်တွေ က သောင်းကျန်းနေတယ် ။ ထပြန် ပီး အပြင်မှာ ၂ နာရီလောက် အချိန်ဖြုန်းပီး မှ ပြန်လာ ရမလား ကျွန်နော် တွေးလိုက်သေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် မပြန်ဖြစ် ကျွန်နော့် အတွေ့ အကြုံ အရ သူ့ အကြည့်တွေကလည်း တမျိုးပဲ ။
” ငါ့မောင် ပျင်းနေပီလား အမ က စကားပြောဖော်မရှိလို့ စကားတွေ လျောက်ပြောနေတာ မင်းဆရာကလဲ အလုပ်ကများ အလုပ်အားရင် ဂေါက်ဖ် သွားရိုက် နဲ့ သားလေး မရှိတော့ အရမ်းပျင်းတာပဲ ” ” ရပါတယ် မပျင်းပါဘူး အမ ကျွန်နော် အမ နဲ့ စကားပြောရတာ ပျော်ပါတယ် ဂျာကြီး နဲ့သာ သိပ် အပေါက်အလန်းမတည့်တာ ဟီးးး ဟီးးး ” ” ဟုတ်ပ မင်းဂျာကြီးနဲ့လည်း အမ နဲ့ သိပ် အပေါက်လန်းတည့်တာ မဟုတ်ဘူး ကလေးတစ်ယောက်သာ ရသွားတာ ” ဒေါ် ခိုင်ခိုင်ဦး ပြောပီးမှာ စကားက အနှောက်အသွားမလွတ်ဖြစ်သွားတာ သတိထားမိသွားတယ်ထင်တယ်။ စကား အပေါက်အလန်းမ တည့်တာပြောတာနော် ငါ့မောင် ” ကျွန်နော်လည်း စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ အနေနဲ့ စကားနဲနဲ စကြည့်လိုက်တယ်။
“ကျွန်နော် လည်းစကားပြောတာ အပေါက်အလန်းမတည့်တာ ပြောတာပါ ကျန်တာတော့ အပေါက်အလန်းတည့်လို့ ကလေးတစ် ယောက်ရလာတာပေါ့နော့် ဟီးးး ” “ဟင်းးးဟင်းးး ငါ့မောင်နော် လူပျိုသာ ဆိုတယ် စကားကလဲ ” ” ဟီးးး အမ နဲ့ ကျွန်နော်လည်း အပေါက်အလန်းတည့်ပါတယ်နော် ..စကားပြောရတာပါ” ” ဟိတ်ဟိတ် .. .တော်ပီ စကားပဲ အပေါက်အလန်းတည့် ကျန်တာလာမ တည့်နဲ့ ဟင်းးး ” ” ကျန်တာလည်း အပေါက်အတန်း တည့်ရရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော် ” ကျွန်နော် ပြောချလိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင် ခိုင်ဦး မျက်လုံးပြူးသွားတယ် ။ အရင်က သူနဲ့ ကျွန်နော် ၂ ယောက်တည်း စကားသေချာ မပြောဖူး ။ သူမ အနေနဲ့ လည်း ကျွန်နော့် ကို ဒီလောက် ရဲ လိမ့်မယ် မထင်ခဲ့ဘူးထင်တယ် ။
” ဟိတ် ငါ့မောင် စကားတွေ မကျွံ နဲ့နော် မင်းဂျာကြီး သိရင် မင်း အလုပ်ပြုတ် မယ်နော် ” ” အမ မတိုင်ရင် မသိပါဘူး ” ” မတိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူက ပြောလဲ ” ” အမ မျက်လုံးတွေက ပြောနေတယ်လေ ” ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး မျက်လွှာချသွားတယ် ။ အတွေ့ အကြုံအရ ကျွန်နော့် ဘက်က ကိုးဆယ်ဆလောက် သာနေပီ ။ ကျွန်နော် ဘာဆက် လုပ်ရမလဲ သိပီလေ ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး နား ကို ဖြေးဖြေးချင်းတိုးကပ်သွားခဲ့တယ် ။နောက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးရဲ့ ပုခုံး နှစ်ဘက်ပေါ် ကို ကျွန်နော့်လက်နှစ်ဘက် ကျရောက်သွားပီ။ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ခေါင်းကို ငုံထားတယ် ဘာမှမပြော ၊ ပုံခုံးသားလေး တွေ ကို အသာပွတ် ကာ လက်မောင်းရင်းမှ ကိုင်၍ မတ်တပ်ရပ်စေလိုက်တော့ အလိုက်သင့်ပါလာတယ်။
” မကောင်းပါဘူး ..ငါ့မောင်ရယ် ..မင်းဆရာ ပြန်လာတော့မှာ ” ခါးမှ ဆွဲဖက်လိုက်ကာ နီထွေးထွေး နုတ်ခမ်းတစ်စုံအား ငုံခဲလိုက် တယ် ။ ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ” အင့်..အူးးး ဖလူးးးး” ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရုန်းဖယ်တယ် ။ ကျွန်နော့်လက်က ခါးကို တင်းကြပ်စွာဖက် ထားပီး ကျွန်တော်နဲ့ ကိုယ်လုံးချင်း ဆွဲကပ်ထားလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ဘယ်ဘက်လက်က သူ့မ နဲ့ ခေါင်းကို နောက်ကနေ ပြန်ကိုင် ထားပီး ညာဘက်လက်က ဂါဝန်ပါးပါး ပေါ်မှ တင်ပါးတွေကို ပွတ်ပေးနေရင်း နုတ်ခမ်းချင်း မလွတ်တမ်း နမ်းပစ်လိုက်တယ်။ ပါးစပ် ကို အတင်း စေ့ထားပေမယ့် တချက်တချက် နုတ်ခမ်းဟ သွားတဲ့အချိန် ကျွန်နော့် လျှာ နဲ့ သူမ လျှာ ကို လုံးထွေးရစ်ပတ်လိုက်တယ် ။ ” ပြွတ် ပြွတ် ” ” အငှးးးဖလူးးးးအူးးးး ” ကျွန်နော့်ညာဘက်လက်က တင်ပါးအနှံ လျောက်ပွတ်နေရင်း သတိထားမိလိုက်တယ် ၊ အတွင်းခံ မဝတ်ထားပါလား ။ ဒါကြောင့် ချောမွတ်နေတာကို။
အနမ်းတွေ ကို မရပ်သလို ကျွန်နော့်လက်ကလဲ တင်ပါး တလျောက် ပွတ်ဆွဲရင်း တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကြားကို နှိုက်နှိုက်ပေးမိတယ် ။ ထွားလွန်းတဲ့ တင်ပါးတွေကြောင့် ကျွန်နော့် လက်ချောင်းများက တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကြား ညှပ်ညှပ်သွားသလို ခံစားမိတယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရင်ဘတ် တွေက ကျွန်နော့် ရင်ဘတ် နှင့် ဖိကပ်နေမိတာကြောင့် သူနို့ နှစ်စုံရဲ့ အထိအတွေ့ ကို အောက်ခံ ဘော်လီမှ တဆင့် သိရှိမိတယ် ။ ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ” အားးး တော်တော့ ကွာ ငါ့မောင် မင်း ဆရာသိသွားရင် မိုးမီးလောင်မယ် ” ” မသိပါဘူး မမ ရယ် ဂျာကြီးက ၂ နာရီလောက်ကြာဦးမှာပဲ ” “အာာာာ မသိတော့ဘူးကွာ ပြဿနာ တတ်မှာ ကြောက်တယ်ကွာ ” ” ကျွန်နော် ခြံတခါး သွားပိတ်ထားလိုက်မယ် ဂျာကြီး ကား ဝင်လာရင် သိတာပေါ့ ”
ကျွန်နော် ဧည့်ခန်းမှ အလောတကြီး ထွက်ကာ ခြံဝန်းတံခါး ကို သော့သွားခတ်လိုက်တယ် ။ ပီးတာ နဲ့ အိမ်ပေါ် တက်လာတော့ ဧည့်ခန်းတွင် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရှိမနေတော့ ၊ အတွင်းခန်းဘက် ဝင်လာလိုက်တော့ အိပ်ခန်းတံခါး စေ့ထားတာ တွေ့လိုက်လို့ တံခါး ကို အသာတွန်းလိုက်တော့ ဂျက်မချထား ၊ အတွင်းခန်းထဲ ကျွန်နော် လှမ်းဝင်လိုက်တယ် ။ မှန်တင်ခုံရှေ့ မှာ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ဒေါ်ခိုင် ခိုင်ဦး ။ တံခါးကို အသာ ပြန်ပိတ်လိုက်ပီး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ထံ ဖြေးဖြေးချင်းလျောက်လာလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ကို လှည့်မကြည့် ။ ကျွန်နော် နောက်ဘက်ကနေ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကို ဖက်လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့်လက်နှစ်ဘက်လုံးက သူမ ရင်ဘတ် ပေါ် ကို ကွက်တိ တင်ထားရင်း ဂုတ်သားလေးတွေ ကိုနမ်းစုပ်လိုက်တယ် ။ ” အာ.ယားတယ်ကွာ အဲ့နေရာ မနမ်းနဲ့ ဘယ်လိုကြီးမှန်းလဲမသိဘူး တ မျိူးကြီး ” ညူတူတူ အသံဖြင့်ပြောတယ် ။ ကျွန်နော့် လက်တဘက်က နို့အုံတွေကို ကိုင်နေရာမှ အောက်ကို လျောချလိုက်ပီး ပေါင် ခွဆုံကြားကို ဝင်လိုက်တယ် ။ လက်ချောင်းများက နေရာမှန်ကို ကွက်တိ ။
” အားးးး မောင်လေးးးး ဖြေးဖြေး ” ဂါဝန်စ ပေါ်မှာ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး အဖုတ်ကြီး ကိုနှိုက်ပေးနေလိုက်တယ် ။ အဖုတ် ထဲမှ အရည်စိုတိုတိုက ဂါဝန်စမှာ စေးကပ်ကပ် ဖြစ်လာပီး ကျွန်နော့် လက်ကို ပါ စိုလာတယ် ။ ” အားးးးအင်းးးမောင်လေးး ကောင်းတယ် အားးးဖြေးဖြေး ” ကျွန်နော့် ဘောင်းဘီအောက်မှ သကောင့် သား ကလဲ ထန်နေပီ ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တင်ပါးကြီးတွေ နဲ့ ဖိကပ်ထားရင်း စောက်ဖုတ်ကို မနားတမ်း ပွတ်ဆွဲပေးနေမိတယ် ။သူမ တင်ပါးကြီးတွေက လည်း နောက်ဘက်ကို ကော့ကော့လာတယ် ။ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ကျွန်နော် သူမ ဂါဝန်စ ကို အောက်မှ ဖြေးဖြေး ချင်း အပေါ် ကို ဆွဲတင်လိုက်တယ် ။ အဖုတ်ကို နှိုက်ကြည့်လိုက်တော့ စောက်ရည်က တော်တော် ရွဲနေပီ ။ ဂါဝန်ကို အပေါ်ထိ ဆွဲမ လိုက်ပီး ခေါင်းမှ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ တလက်စတည်း ကျွန်နော့် ဘောင်းဘီ ကိုလည်း ခါးပတ်ချွတ် ဇစ်ဖြုတ်ကာ အောက်ကို ဆွဲ ချွတ်လိုက်တယ် ။
အရမ်းညောင်းနေပီ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်နော့် လီးက ချက်ချင်း ငေါက်ကနဲ အပေါ် ကို ထောင်တက်လာတယ် ။ ဒေါ်ခိုင် ခိုင်ဦးက ကုတင်စောင်းမှာ တင်ပလင် ချိတ်ကာ ထိုင်ရင်း ကျွန်နော့် ကို ကြည့်နေတယ် ။ တင်ပလင်ချိတ် ထိုင်ထားတော့ အိုးကား ကားကြီးများဘေးကို ထွက်နေတယ်။ အဖုတ်ကိုတော့မမြင်ရ ။ စောက်ဖုတ်မွှေး တွေကတော့ ဆီးခုံ အစပ်မှာ ပေါ်နေတယ် ။ သူမ ရှေ့မှာ ပဲ ကျွန်နော့် လီးကို ကိုင်ပီး ဂွေ တချက်နှစ်ချက် လှိမ့်ပြလိုက်တယ်။ ” အာာာ နဲတာကြီး မဟုတ်ဘူး ” ကျွန်နော် လီးဒစ် ကို ဖြဲပြလိုက်တော့ သူ့ လက်ကလေး နဲ့ မရဲ တရဲ လာကိုက်ကြည့်ပီး လက်ညိုးလက်မ လေး နဲ့ ကျွန်နော့် လီးဒစ်လေး ကို အသာဖိကြည့် တယ် ။ ပျစ် ကနဲ အရည်ကြည်လေး ထိပ်ဝ ကို ထွက်သွားတော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး သဘောကျသွားတယ် ။ ကျွန်နော် သူမ ပုခုံးမှ ကိုင် ကာ ကုတင်ပေါ်ကို တွန်းလှဲလိုက်တယ် ။ တင်ပလင်ချိတ်ထားတာ ပြေသွားပီး ခြေနှစ်ချောင်း က ကုတင် အောက် တွဲလောင်းကျကာ ပက်လက်လန်သွားတယ် ။ ကျွန်နော် ကုတင်အောက်မှာ ဒူးထောက်ထိုက်လိုက်ပီး ပေါင်နှစ်ချောင်း ကို ကားလိုက်တော့ သူမရဲ့ အဖုတ်ကြီး ပြူးထွက်လာတယ် ။ တော်တော် အမွှေးထူသော အဖုတ် ။
ဆီးခုံ အစပ်မှ အဖုတ်နုတ်ခမ်းသားတွေနား အထိ အမွှေးများ က ထူထဲစွာ ပေါက်နေတယ် ။ ခနခန ရိတ်လို့ လားမသိ ။ အရမ်းသန် သောစောက်မွှေးများ ။စောက်မွှေး တွေ ကို လက်ဖြင့် အသာ ဆွဲဖယ်လိုက်တော့ အောက်မှ စောက်စိ ပြူးပြူးလေး ထွက်လာတယ် ။ စောက်မွှေးတွေ သေချာ ဖယ်ကြည့်လိုက်တော့ အဖုတ် က မဲ မနေဘူး ။ ကချင်မ ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က အသားဖြူတယ် စောက်ဖုတ်က ဖြူမနေပေမယ့် အညိုရောက်ဘက်သန်း သလို ရှိသလိုပဲ ။ စောက်ခေါင်း အတွင်းသားတွေကတော့ နီရဲရဲ အနေအထား ။ ပေါင်နှစ်ဘက်ကို အပေါ်ဘက်ကို ထောင်လိုက်ပီး ကားပေးလိုက်တော့ အောက်ဘက်က စအိုဝ ညိုတိုတို လေး ပါတွေ့လိုက်ရတယ် ။ စအို အဝမှာပင် အမွှေးတွေ တစ်ပင်စနှစ်ပင်စ ပေါက်နေသေးတယ် ။ ဆီးခုံအပေါ် အစပ်လောက်မှတော့ ကလေး မွေးတုန်းက ခွဲမွေးထားဟန်ရှိတယ် ကန့်လန် ပြတ် အမာရွတ် ခြောက်လက်မခန့်ရှိတယ် ။ ကျွန်နော် ဒူးထောက်လျှက် အနေအထားကပင် စောက်ဖုတ် နုတ်ခမ်းသား အဖတ်လေးတွေကို ဖြဲ လိုက်ကာ လျှာအပြားလိုက် အဖုတ်ပေါ် တင်လိုက်တယ်။
” အားးးးမောင်လေ ” ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ” ပလက်ပလက် ..ပလက် ” ” အားးး အင်းးးးး ကောင်းတယ် မောင်လေး အားးးးရှီးးးးး ” ကျွန်နော် လျှာက စောက်ဖုတ်တင်မဟုတ် စောက်ဖုတ်နှင့် လက်တလုံး ခြားသာ ရှိတဲ့ စအို ညိုတိုတို ခရေပွင့် အထိ ပါ အလျှားလိုက် ဆွဲဆွဲ ပီး ယက်ပစ်လိုက်တယ် ။ကျွန်နော် လက်နှစ်ဘက်က ပေါင် နှစ် ဘက်ကို ရှေ့ သို့ တွန်းကန်ပေးထားသလို ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးကလဲ သူမ ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို လက်နှစ်ဘက်မှ လှမ်း၍ ဒူးကောက် ဝတ်နားကို လှမ်းကိုင်ကာ ဆွဲ ထားတော့ တင်ပါးကြီးက အပေါ်ကို ခပ်မြောက်မြောက် အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ “.ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ” အားးးး မောင်လေးရယ် ကောင်းနေပီ အားးးးးး ” ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ” အားးးး ဟုတ်တယ် အတွင်း ထဲကို လျှာ နဲ့ ထိုးပေး အားးးးအရမ်းကောင်းတယ် ” ကျွန်နော် လက်နှစ်ဘက် ကို စောက်ဖုတ် ဘေးသား နုတ်ခမ်းတွေ ကို ဆွဲဖြဲလိုက်ကာ အဖုတ်ထဲသို့ လျှာကို ထိုးထိုးပီး ထည့်ကာ ယက်ပေးလိုက်တယ် ။ တင်ပါးကြီးကြီး ပေါင်တံကြီးကြီး ကြားထဲမှာ ကျွန်နော် မျက်နှာတစ်ခုလုံး နစ်မြုပ်နေသလိုပဲ ။
စောက်ပတ် အနံအသက် သိပ်မရှိ သေချာသန့်စင်ထားပုံလဲရတယ် ။ ညှီစို့စို့ အဖုတ်နံက တော့ ရှိတယ် ။ ” ပြွတ် ပြွတ် ” တချက်တချက် စောက်စိ ကို နုတ်ခမ်းသားဖြင့် ဖိဖိ ကိုက်သလိုမျိုးလုပ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ” အားးးး ကောင်းတယ်မောင် ရယ်…. မမ ပီးတော့မယ်ထင်တယ် ” ” ပလက် ပလက် ပြွတ် ပြွတ် ” ” အားးးးး ကောင်းတယ် မောင် အားးးးထွက်ကုန်ပီ အားးးထွက် ထွက်ကုန်ပီ ” ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တစ်ယောက် ငြီးတွားသံတွေကျယ်လာကာ သူမ စောက်စိကို သူမ လှမ်းပွတ်ရင်း အဖုတ် အခေါင်း အတွင်း မှ အရည်တွေ ညှစ်ညှစ်ချတယ် ။ ကျွန်နော် ယက်ပေးနေတာ ကို အသာ ဖယ်လိုက်ပီး အဖုတ်ကို သေချာကြည့်နေမိတယ် ။ အဖုတ် အတွင်းသားများမှ လှုပ်စလှုပ်စိ ဖြင့် အရည်ကြည်လေး တွေ စိမ့်စိမ့် ကျလာတာ တွေ့လိုက်တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တစ် ယောက် မလိုးရသေးခင်မှာ ပင် တစ်ချီ ပီးသွားခြင်း ဖြစ်သည် ။ စဉ်းစားမိသလောက် အဖုတ် အယက် မခံရတာ ကြာနေပီ ဖြစ်ပီး အဖုတ် အယက် ခံလိုက်ရတာ ကြောင့် ချက်ချင်း ဆိုသလို စိတ်တွေ မြောက်တက်ကာ ပီးသွားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည် ။
” အားးး မောင် လေး အရမ်းကောင်းတာပဲ .. တကယ်ကောင်းတယ် ပီးသွားတယ် ” ရှက်ကိုးရှက်ကန်း အမူအရာဖြင့် ကျွန်နော့် ကို ခေါင်းထောင် ကြည့်ကာ ပြောတယ် ။ ကုတင်ဘေးမှ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဂါဝန် ကို ယူကာ ကျွန်နော် နုတ်ခမ်းမှ စောက်ရည်တွေ သုတ်လိုက်ပီး မတ်တပ် ထရပ်လိုက်တယ်။ ” မမ တစ်ယောက်တည်း ပီးနေကောင်းနေလို့ မဖြစ်ဘူးနော် ” ကျွန်နော့် လီး ကို လက်ဖြင့် ဂွေလိမ့်ပြလိုက် တယ် ။ ” အင်းပါ မမ သဘောပေါက်ပါတယ်နော် ” ပက်လက် လှန်နေရာမှ သူမ လက်ကို ကျွန်နော့်ဆီ ကမ်းပေးတာ နဲ့ ကျွန်နော် ဆွဲ ထူလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော် က ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ် အနေအထား သူမက ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်လျှက်အနေအထား ကျွန်နော့် လီးက သူမ မျက်နှာနှင့် တတန်းတည်း ။ ထို့နောက် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က ကျွန်နော့် လီးတံဆီကို လက်လှမ်းလိုက်တယ်။ ” ပွမ်ပွမ် ” ကျွန် နော်ရော ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကော လန့်ဖျန့် သွားတယ် ။
အိမ်ရှေ့မှ ကားဟွန်းသံ ။ ကျွန်နော် ဘေးနားမှာ ချွတ်ထားသော ဘောင်းဘီ ကို အမြန်ကောက်ဝတ် သူမကလည်း ဘေးမှ ဂါဝန်ကို ခေါင်းမှ လျှို ဝတ်ကာ အခန်းအတွင်း မှ အိပ်ယာခင်းတွေ သေချာပြန်ဖြန့် ကာ ဧည့်ခန်း ကို ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်လာလိုက်တယ် ။ပီးတော့ ကျွန်နော်လည်း ရုပ်တည်တည် ဖြင့် ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေလိုက်ပီး သူမက တော့ အိမ်ရှေ့ တံခါးကို သွားဖွင့်ပေးတယ် ။ ဂျာကြီး ရောက်လာတာ လည်း မြန်လိုက်တာ လို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးပီး နာရီကြည့်လိုက် တော့ ကျွန်နော် တို့ အလုပ်ဖြစ်နေတာ လေးဆယ့် ငါးမိနစ် ကျော်သွားတာ သိလိုက်ရတယ် ။ ဂျာကြီး ရောက်လာပီး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး လည်း အခန်းထဲ ဝင်သွားတယ်။ ကျွန်နော် နဲ့ ဂျာကြီး အလုပ်ကိစ္စ တွေ ပြောဆိုပီး ပြန်လာဖြစ်လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ညီတော်မောင် ကတော့ အဆင်မပြေဘူး ။ အခန်းကို ပြန်ရောက်မှ ပဲ ကျွန်နော် ဂွေလိမ့်လိုက်ရင်း အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ရတယ် ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကို ကျွန်နော် ပိုင်နေပီလေ ။ တစ်ရက်ရက်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ ။ အခွင့်အရေးသာမယ့်နေ့ ကို စောင့်နေလိုက်တယ် ။
ဒီကြားထဲ ဂျာကြီး ကို ကျွန်နော် မျက်နှာချို သွေးကာ အလုပ်ကိစ္စ တွေ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးနေခဲ့တယ် ။ ခက်တာ တခုက ဂျာကြီး နဲ့ ရုံးမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တိုင်း သူ့မိန်းမ စောက်ဖုတ် ကြီး ပြေးပြေးမြင်နေမိတယ် ။ ဂျာကြီးမိန်းမကို ကျွန်နော် ဂျာ ပေး ထားတာကိုတော့ ဂျာကြီးကတော့ မသိရှာ။တစ်ရက် တနင်္ဂနွေ နေ့ နေ့လည်ခင်း ကျွန်နော့်အခန်းမှာ အခန်းအောင်းပီး အိပ်နေတုန်း ဂျာကြီး ဆီက ဖုန်းလာတယ် ။ ဂျာကြီး အိမ်ကို သွားဘို့ ကို အလုပ်ကိစ္စက လည်း မရှိဖြစ်နေတာ။ ဂျာကြီးက ညနေ ဂေါက်ရိုက်ချိန်း ထားတာ သူ့မိန်းမ ကလည်း သူ့ သူငယ်ချင်း အိမ် ကိစ္စ ရှိလို့ သွားစရာရှိနေလို့ ကျွန်နော့် ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတယ် ။ သူ့မိန်းမကိုကား ခန လိုက်မောင်းပေးပါဆိုပီး အကူအညီတောင်းလာတယ် ။ ” ညီလေး ညနေ လေးနာရီလောက် လာခဲ့ပေးပါကွာ ကူညီပါဦး အကိုလည်း ချိန်းထားပီးသားကြီး ဖြစ်နေလို့ မင်းအမ ကို ကားလိုက်မောင်းပို့လိုက်ပါဦး အားတယ် မလားညီလေး ” “.ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် ဂျာကြီး ကျွန်နော် လာခဲ့လိုက်ပါ့မယ် ”
“.အေးအေး ကျေးဇူးညီလေးရာ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော် မင်းအမ က တစ် နေရာ သွားရင် အရမ်းကြာတတ် လို့ ညီလေး စိတ်တော့ ရှည်ပေးပါ ” “.ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် ဂျာကြီး ကျွန်နော် အဆင်ပြေပါတယ် ” ဂျာကြီး ဖုန်းချသွားပီး ကျွန်နော်လည်း ချက်ချင်း မြို့ အစွန်က ကျွန်နော့် အသိ တည်းခိုခန်း ကို ဖုန်းဆက်ပီး ဘွတ်ကင်လုပ်ထားလိုက် တယ် ။ ဒီကိစ္စ က ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး အကွက်မှန်း ကျွန်နော် သိတယ် ။ ဂျာကြီး ဂေါက်ရိုက်နေတဲ့ အချိန် အပြင်ထွက်ဘို့လုပ်တယ် ဆိုကတည်းက ကျွန်နော် ဘာဆိုတာ သဘောက်ပေါက်လိုက်တယ် ။ ညနေ သုံးနာရီ ခွဲ ကတည်းက ကျွန်နော် ဂျာကြီး အိမ်ကို ရောက်သွားတယ် ။ အိမ်ထဲ ဝင်လိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကို မတွေ့ ဂျာကြီးက ဂေါက်ရိုက်သွားဘို့ ပြင်ဆင်နေပီး ဂေါက်ဖ် အိတ်တွေ ကားပေါ် တင်နေတယ် ။ ” ကဲ ညီလေး ရေ မင်းအမ ကို ခန စောင့်လိုက်ဦး မပီးသေးဘူး ကိုယ်တော့ သွားနှင့်တော့မယ် နောက်ကျနေပီ” ဆိုပီး ကားမောင်း ထွက်သွားတယ် ။ ကျွန်နော် ဧည့်ခန်းမှာ ပဲ ထိုင်စောင့်လိုက်တယ် ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ထွက်လာတယ် ။
ကျွန်နော့် မျက်လုံးတွေ သူမ အလှပေါ် ကျရောက်သွားတယ် ။ မြန်မာ ဝတ်စုံ အပြာဝမ်းဆက် ကို ကြပ်ညပ်နေအောင် ဝတ်ထားတဲ့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ” အားးး မမ အရမ်းလှတာပဲဗျာ ” ကျွန်နော့် နုတ်က အမှန်တကယ် ပင်ရေရွတ်မိသွားတယ် ။ တကယ်ပဲလဲလှပါတယ် ။ ဆံပင်တွေကို နောက်ဘက်မှာ ဆံထုံးထုံးထားပီး ခါးတိုမြန်မာဝတ်စုံဖြင့်ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ။ အောက်က ထမိန်စကပ် ခပ်ကြပ်ကြပ်ကြောင့် တင်ပါးတွေက တင်းထွက်နေအောင် ကားနေတယ် ။ ကျွန်နော်သူမဆီ ထသွားပီး ခါးလေး ကို အသာဖက်လိုက်တယ် ။ ” သွားးးခြံတံခါး သွားပိတ်ဦး ” ” ဟင် မမ အပြင်သွားမယ်ဆို ” “.မသွားဘူး မင်းဂျာကြီး ကို ညာလိုက်တာ ငါ့မောင်ကို တွေ့ချင်လို့ ခြံတံခါးကော အိမ်တံခါးကော ပိတ်ခဲ့ ” တော်တော် အကြံပိုင်တဲ့ မိန်းမ ပဲ ။ ကျွန်နော် ချီးကျူးလိုက်မိတယ် ။ အမှန်တော့ ဘယ်မှ သွားစရာမရှိ ။ ကျွန်နော့် ကို အိမ်ရောက်လာအောင် ကြံစည်ခြင်းပင် ။
ဒီနေ့က ဂျာကြီးက ဂေါက်ဖ်ပွဲ ပီးရင် ညစာစားပွဲ ပါ ဆက်ဦးမည်တဲ့ ။ ဒါဆို ကျွန်နေ်ာ တို့ အတွက် အချိန် လေးငါးနာရီလောက် ရမည်။ ကျွန်နော် တံခါးတွေ ပိတ်ပီး အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်လာလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဧည့်ခန်းမှာ မရှိတော့ ။ အခန်းထဲကို ကျွန်နော် တခါတည်း လိုက်သွားလိုက်တယ် အခန်းတံခါးက မပိတ်ထား ။ အခန်းထဲ ဝင်ဝင်လိုက်ခြင်းမှာပဲ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က ကျွန်နော် ကို လာဖက်တယ်။ “.လွမ်းနေတယ် မောင်လေး ” ကျွန်နော် အလိုက်သင့်ပြန်ဖက်လိုက်ရင်း နုတ်ခမ်းချင်း အနမ်းတွေ ဖလှယ်လိုက်တယ် ။တစ်ခါ ဖောက်ပြန်ဖူးသော မိန်းမ တစ်ယောက် အနေနဲ့ နောက်တခါအတွက် မဝံ့မရဲ မဖြစ်တာ ဆန်းကြယ်သော ကိစ္စမဟုတ်။ ယောကျားတစ်ယောက် အပေါ် မှာ ဝင်ငွေအရ အမှီအခိုကင်းတဲ့ မိန်းမ တော်တော် များများ ဖောက်ပြန်ကြတာဟာ သူမ တို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒ များကြောင့် ဆိုတဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခု ရှိတာ ကျွန်နော် ဖတ်ဖူးတယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး လည်း သူမရဲ့ လိုအင် မပြည့်ဝမှုတွေကြောင့် ဆိုတာ မလွဲမသွေဖြစ်နေနိုင်တယ် ။နမ်းနေရင်းမှပဲ ကျွန်နော့် ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးပုံ ချွတ်ချလိုက်တယ် ။
ဒီနေ့ ကျွန်နော် တမင် ဘောင်းဘီ ဝတ်မလာတာ ။ ပုဆိုးဖြင့်သာလာခဲ့တယ်။ အောက်ခံဘောင်းဘီတော့ ဝတ်ခဲ့ရတယ် တော်ကြာ အပြင်သွားရင်း ထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင် အရှက်ကွဲမှာ ဆိုးလို့ နှုတ်ခမ်းတွေ နမ်းနေရင်း နဲ့ပဲ ကျွန်နော့် အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်မှနေ၍ ကျွန်နော့် လီး ကို လာပွတ်ပေးနေတယ် ။ သူမ ပုံခုံးတွေ ကို ကိုင်လိုက်ပီး အောက်ကို ဖိချလိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တစ်ယောက် ကျွန်နော့် ရှေ့မှာ ဒူးထောက်လျှက်သား အနေအထား ဖြစ်သွားတယ် ။ ဒူးထောက် ထိုင်လိုက်လို့ သာတော်သေးတာ ။ ငုတ်တုတ်ထိုင်ချလိုက်လို့ကတော့ ထမိန်စကပ်တောင် ကွဲ ပြဲသွားနိုင်တယ် ။ လုံးဝန်းတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက ဖုထစ်နေတယ် ။ သူမ ဘာလုပ်ပေးရမယ် ဆိုတာ သိရှိနေတယ်။ ကျွန်နော့် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီမျော့ကြိုး ထဲ ကို လက်အသာ နှိုက်ပီး အောက်ကို ချွတ်ချလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က ကျွန်နော့် လီး ကို လက်တဘက်က ကိုင်ရင်း သူအကျင့်အတိုင်း နောက်လက်တဘက်မှ လက်မ လက်ညိုးလေး ဖြင့် လီးဒစ် ကို လာဖိတယ် ။
ပြီးတော့ ကျွန်နော့် ကိုမော့ကြည့်ပီး နီထွေးထွေး နုတ်ခမ်နီ ဆိုးထားတဲ့ နုတ်ခမ်းကို လျှာဖြင့် သပ်လိုက်ရင်း မျက်စိတဘက် မှိတ်ပြလိုက်သေးတယ် ။ ထို့နောက် ကျွန်နော့် လီးဒစ်ကို ဖြဲကာ နုတ်ခမ်း အစုံဖြင့် ငုံစုပ်တော့တယ် ။ လီးတံ တစ်လျောက် နွေးကနဲ အရသာ ခံစားလိုက်ရတယ်။ ” အားးးး မရယ် ..ကောင်းလိုက်တာ ” ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ကျွန်နော် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရဲ့ ခေါင်းကို ကိုင်ကာ ပါးစပ်ပေါက်ထဲကို လီးထိုးထည့်ကာ လိုးပြစ်လိုက်တယ်။ ဘေးက မှန်တင်ခုံစာပွဲ မှ ကိုယ်လုံးပေါ် မှန်ထဲတွင် မြန်မာဝတ်စုံ အပြာဝမ်းဆက်လေးဖြင့် ဒူးထောက်ကာ ကျွန်နော်က မတ်တပ်ရပ် အနေအထားဖြင့် ပါးစပ်ကို အားရပါးရ လိုးနေတာ ပေါ်နေတယ် ။ကျွန်နော့် ဂွေးဥတွေကို ကိုင်ပွတ်လိုက် လီးတံ ကို ကိုင်လိုက်ဖြင့် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တစ်ယောက် အလုပ်ရှုပ်နေတယ် ။ ” ဗြွတ် ဘွတ် ဘွတ် ” ” အု အု အု ..အ..ဘွတ် ဘွတ် ” လီးတံ တလျောက် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တံတွေး တွေ ရွဲနစ်လာပီး သူမ ပါးစပ်မှ တဆင့် လည်ပင်း များထိပါ စီးကျနေတယ် ။ သူမ နုတ်ခမ်း နီတွေလည် ပျက်စ ပြုလာပီ ။
ကျွန်နော် အားပြု ပီး ထိုးသွင်းနေချိန် သူကလည်း နုတ်ခမ်း ကို ဖိဖိ ပီး လီးတံ ကို ငုံခဲ စုပ်နေတယ် ။ဆယ်မိနစ်လောက် လုပ်ပီးသွားတော့ သူလည်း မောလာတယ် ထင်တယ် လီးတံကို ပါစပ်က နေချွတ်လိုက်ပီး ကျွန်နော် ကို မော့ကြည့်တယ် ။ လက်ကတော့ ကျွန်နော့် လီး ကို ဂွင်းထုပေးနေတယ် .။ နှုတ်ခမ်း တလျောက် နဲ့ လည်ပင်းတွေ မှာ တံတွေး တွေရွဲနစ်လို့ ။ ကျွန်နော့် လီးတံမှာ လဲ ရွဲနစ်နေပီ ။ ကျွန်နော် စိတ်ကူး ရတာ နဲ့ သူမ ပါးနှစ်ဘက်ကို လက်နဲ့ ဖိဖျစ်လိုက်တော့ ပါးစပ်က ဟလာတယ် ။ ကျွန်နော် ပျစ်က နဲ့ သူ့ပါးစပ်ထဲ တံတွေး ထွေးချလိုက်တယ် ..ပီးတော့ ပါးစပ်ထဲကို လက်လေးချောင်း ထိုးသွင်းပီး မွှေပစ်လိုက်တယ်။ ” အားးးအားးးအားးး အု အု အု ” ကျွန်နော့် စိတ်ထဲ သူမ ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆက်ဆံချင်စိတ် တွေ ဖြစ်လာတယ် ။ ဟုတ်တယ် ဒီလို တင်ကြီးကြီး ရင်ကားကား မြန်မာဆန်ဆန် အိမ်ထောင်သည် မင်ကြီး ကြိုက် ပုံစံ မျိုးကို ကျွန်နော် အကြိုက်ဆုံးပဲလေ ၊။ မင်းကြီးတင် မကဘူး ကျွန်နော် လည်း ကြိုက်တယ်ဗျာ ။
သူမ နောက်မှာ စည်းထားတဲ့ ဆံထုံး ကို ကျွန်နော့် လက်တဘက်နဲ့ ကိုင်က ဆွဲမလိုက်တော့ အလိုက်သင့်ပါလာတယ် ။ ပုံစံ ကြည့်ရတာ အဲ့လို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကြိုက်မယ်ပုံ ။ ကျွန်နော့် အပေါ် အကျီ ကို ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က ချွတ်ပေးတယ် ။ ကျွန်နော် က သာ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်နေတာ သူမ ကတော့ ဘာမှ မချွတ်ရသေး ။ ဘာမှ မချွတ်ရသေးတာကို က ကျွန်နော့် စိတ်ကို ပိုမို ထကြွလာစေတယ် ။ ကျွန်နော်က မိန်းကလေး ဆို ခေတ်ပေါ် ဆက်ဆီကျကျ ဝတျစားထားတဲ့ မိန်းကလေး မျိုးကို လိုးရတာထက် မြန်မာဆန်ဆန် အလှ နဲ့ မိန်းကလေး မျိုးကို ပိုစိတ်ကြွတယ် ။ကျွန်နော် ကုတင်ပေါ် မှာ ထိုင်လိုက်ပီး ” အဝတ်တွေ တစ်ခုချင်းစီ ချွတ်ပြကွာ ကြည့်ချင်တယ် ” နုတ်ခမ်းလေး ကွေးရုံ ပြုံးပြပီး “အပေါ် အရင် ချွတ်ပြရမလား အောက် အရင် ချွတ်ပြရမလား ” ” အောက်ချွတ် ” ကျွန်နော် နားကပ်လာပီး ကျွန်နော်က ကို ကျောပေးကာ ခါးနားမှာ ရှိတဲ့ ထမိန်စကပ် ဇစ်လေး ကို ဆွဲချလိုက်တယ် ။ ပီးတာနဲ့ စကပ်ဘေးသား နှစ်ဘက်ကို ကိုင်ကာ အောက်ကို ဖြေးဖြေးချင်းလျောချတယ် ။ တင်းရင်းကြီးမားလှတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကြောင့် ထမိန်စကပ်က ဇစ်ဆွဲချထားပေမယ့် ကြပ်ထွက်နေတယ် ။ ကျွန်နော့် လက်တကမ်းမှာ တင် ထမိန်ချွတ်ပြနေတာ။
ဘယ်လောက်စိတ်ကြွလိုက်မယ်လဲ ဆိုတာသာတွေးကြည့် ။ တင်ပါးကြီးတွေကို လှုပ်ခါလှုပ်ကာ ဖြင့် အောက်သို့ ချွတ်ချလိုက်တယ် ။ အားပါးးပါးးး အပြာရောင် ထမိန်စကပ် အောက် မှ အပြာရောင် ပင်တီလေး က တင်ပါးကြီး နှစ်ခြမ်းကို မနိုင်တနိုင် ထမ်းပိုးထားတယ် ။ ကျွန်နော် မနေနိုင်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တင်ပါးကြီး ကို တချက်လှမ်းရိုက်လိုက်တယ်။ ” ဖြန်းးးး ” ” အ ” ပီးတော့ လက်နှစ်ဘက်နဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို စုပ်နယ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ” ဟိတ် နေဦးလေ ဖြေးဖြေးပေါ့ တစ်ခုချင်း ချွတ်ပြမယ် အံသြစရာ လည်း ပြဦးမယ် ” ဆိုပီး ကျွန်နော် နားမှ နဲနဲ ခွာကာ ကျောပေးလျှက် အနေအထားမှပဲ သူမ အပေါ် အကျီကြယ်သီးတွေ ဖြုတ်ပီး ချွတ်ချလိုက်တယ် ။ ထို့နောက် ဘော်လီချိတ် အား နောက်ပြန် ဖြုတ်လိုက်ပီး ဘေးသို့ ဇာဘော်လီ အပြာရောင်လေး ကို ပစ်ချလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ ကျွန်နော့် ဘက်ကို ဖြေးဖြေးချင်းလှည့်လာပီး နို့အုံကြီးတွေကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ယှက်ပီး ကိုင်ကာ အုပ်ထားတယ် ။
လက်ချောင်းလေးတွေ ကို ဖြေးဖြေးချင်း ချဲလိုက်တော့ အောက် မှ ခပ်မဲမဲ နို့သီးခေါင်း လေး ပေါ်လာတယ် ။ အားးး ဟိုနေ့က သူမ နို့ တွေ ကို မမြင်လိုက်ရ အခုတော့ မြင်လိုက်ရပီ ။ စောက်ရမ်းမိုက်တယ် ။ နို့အုံကြီးတွေကလဲ ကားထွက်နေတာပဲ။ ” စောက်ရမ်း မိုက်တယ် မမ ရာ ” ” ဟိဟိ ” အသံလေး ထွက်အောင် ရီလိုက်ရင်း နို့ အုံကြီးတွေကို လက်နဲ့ လှုပ်ပြတယ် ။ ” အံသြ စရာ မယ်နော် သေချာကြည့် ” ဆိုပီ အောက်ခံပင်တီလေး ကို အသာလိပ်ပီး ချွတ်လိုက်တော့ အားးပါးးးပါးးးးဟိုနေ့ကစောက်ရမ်းထူပိန်းနေတဲ့စောက်မွှေးတွေ တပင်မှ မရှိ အကုန်ပြောင်စင်နေအောင် ရိတ်ထားတယ်။မောင့် အတွက် ရိတ်ထားတာ တဲ့ဗျာ .. ကျွန်နော် မနေနိုင်တော့ တင်ပါးကြီး ကို လှမ်းဖက်ကာ ဆွဲ ယူလိုက်တယ်။ ပီးတော့ နို့အုံတွေကို တဖက်စီ အငမ်းမရ စုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ နို့အုံတွေကို လက်ဖြင့်ညှစ်လိုက် နို့သီးခေါင်းတွေ ကို စုပ်လိုက် လုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ ” အားးးးး ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် ” ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ” အားးးး ဒီလို ခံစားချင်နေတာ ကြာပီကွာ .. မင်းဆရာက မလုပ်ပေးတာကြာပီ ” နို့တွေကို စုပ်နေရာ မှ ကျွန်နော်လက်တဘက်က ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တင်ပါးကြီးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ကာ တင်ပါး အကွဲ ကြောင်းထဲကို လက်ခလယ် ထိုးထည့်လိုက်တယ်။
” အားးးး ကောင်းလိုက်တာ မောင် အားးးးး” ကျွန်နော့် လက်ဖဝါးထဲ ကို တံတွေး ပျစ်ကနဲ ထွေးထည့်လိုက်ပီး တင်ပါး အကွဲ ကြောင်းထဲကို နှိုက်လိုက်တယ် ။လက်ခလယ် က ဖင်စအို ၀ ကို အသာထည့်ကြည့်လိုက်တယ် ။လက်တဆစ်လောက် ဝင်အသွားမှာ သူမ စအိုအား ကျုံ့လိုက်ပွလိုက် လှုပ်နေတာ သိလိုက်တယ်။ ” အားးး ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေး ရယ် အားးးး ” ပေါင်ကြီးတွေ တဖြည်းဖြည်း ကားလာပီးလက်တွေကလည်း ကျွန်နော့် ကျောကုန်းကို ပွတ်သပ်နေတယ် ။ ကျွန်နော့် လက်ခလယ်က လည်း စအို ၀ ထဲ ကို သွင်းတာ တဖြည်းဖြည်း နှင့် အဆုံးထိ ဝင်ထွက် လုပ်နေပီ ။ ကုတင်ပေါ် မှာထိုင်နေတဲ့ ကျွန်နော့် အပေါ်မှာ ခွထိုင်ထားတော့ ကျွန်နော့်လီးတံ ကြီးကလည်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ပေါင်ခွကြားထဲ ပိမိနေတယ် ။ ဖင်အိုးကြီးကြီး ကို ကျွန်နော့် လက်နှစ်ဘက် နှင့် မနဲ ဖက်တွယ် ထားရတယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးက လဲ သူ့ အဖုတ် နဲ့ ကျွန်နော့် လီးတံ ကို အပေါ်က ခွကာ ပွတ်ပွတ် ဆွဲပေးနေတာ ရိတ်ထားကာစ အမွှေးတွေက ကြမ်းရှရှကြောင့် ကြက်သီးပါထလာတယ်။
” မောင်လေး ..မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ တက်လုပ်ပေးတော့ ” ” မောင်လည်း မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ မ ရဲ့ ဖင်တုန်းကြီးကို တက်ခွပီး လိုးချင်ပီ ဖင်ကုန်းပေးတော့နော် ” ” စိတ်ကြိုက် ပါ မောင် မမ လည်း အထဲ က တအား ယားနေပီကွယ် ” ကျွန်နော့် ပေါ်မှ ဆင်းကာ ကုတင်ပေါ် တွင် ဖင်ကုန်းလိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဖင်တုန်းကြီးက တကယ် စကိုင်းအိုး ဂစ်တာရှိတ် ကြီး အယ်နေတာပဲဗျာ ။ ဘယ်လက်က တင်ပါး အစပ် နားကို ကိုင်ကာ ညာလက်ဖြင့် တင်ပါးကြီးကို ခပ်စပ်စပ်လေး ပုတ်လိုက်တော့ တင်ပါးကြီးက အိခနဲအိခနဲဗျာ ။စမန် ထ နေပီ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်နော့် လီးတံကို အဖုတ် ၀ မှာ သေချာ တေ့လိုက်ပီး ထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ ” ဘွတ် ” ” အားးးးးး မောင်…. ဝင် သွား ပြီ အားးးးးး ” “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ်” “ဖုတ် ဖုတ် ဖုတ် ” ” အားးးး ရှီးးးး ကောင်းတယ်မောင် ” ” ဖတ် ဖတ် ဖတ် ” ” ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ” ” ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ”
” အ အအားး” ခါးနှစ်ဘက်ကို ကိုင်ကာ အားရပါးရလိုးနေမိတယ် ၊ တင်ပါးကြီးတွေ နဲ့ ကျွန်နော့် ပေါင်ရင်းတွေ ဆုံလိုက်တိုင်း တဖြောင်းဖြောင်း ဖြင့် အသံတွေ မြည်ထွက်နေတယ်။စောက်ဖုတ်ကို လိုးနေရင်း ကျွန်နော့် လက်မ ကို ဖင်ဝ အတွင်းထဲ ပါ ထိုးသွင်းပေးထားလိုက်တယ်။ ” အားးး ကောင်းလိုက်တာ အားးး လိုး လိုး မောင်လေး လိုးပါ ” ” အင်းးး ရော့ ရော့ ဘွတ် ဘွတ်ဘွတ် လိုးတယ်ကွာ ..ကောင်းရဲ့လား ” ” အင်းးးး အ..အ.. အရမ်းကောင်းတယ် မောင် အားးးလိုးပါ မမ ကို လိုးပါ ” ကျွန်နော့် လီး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး အဖုတ်ထဲ ကို ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေတာ ကို ငုံကြည့်ကာလိုးနေရင်း တင်ပါးကြီးတွေက တအိအိ ဖြင့် စိတ်မထိန်းနိုင် တော့သဖြင့် လက်ဝါးဖြင့် တချက် ပင့်ကာ ရိုက်ချလိုက်တယ်။ ” ဖြောင်းးးးး ” ” အားးးး ကောင်းတယ် မောင် .အားးး နာနာ လေး ရိုက်ပေး ” ” ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း ” ဆက်တိုက် ရိုက်ပီး လိုးပစ်လိုက်တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး လည်း စိတ်တွေ အရမ်း ထန်နေပုံရတယ် ။သူမ ဖင်အိုးကြီး ကို ငေးပီး မှန်းခဲ့သမျှ အခု လက်တွေ့ လိုးနေရပီလေ ။
အသားဖြူဖြူ ဖင်အိုးတောင့်တောင့် ကချင်မ အယ်စတုံကြီး ကို လိုးတဲ့ အရသာ တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျာ ။အချက် လေးဆယ် လောက်စောင့်လိုးပီး ကျွန်နော့်လီး ကို အဖုတ်ထဲမှ ချွတ်လိုက်တယ် ။ လီးတံတလျောက် စောက်ဖုတ်ရည်တွေ စိုရွဲပီး ပြောင်လက်နေတယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဖင်တုန်းကြီး က အယ်ထွက်နေသဖြင့် လေးဘက်ကုန်းထားသော်လည်း အောက်မှ စောက်ဖုတ်ကို သေချာမမြင်ရ ။ စအိုဝ ညိုတိုတို လေး ကို သာ မြင်နေရတယ် ။ သူမ ဖင် နှစ်ခြမ်းကြားကို တံတွေး ထွေးချလိုက်တော့ တံတွေးတွေက ဖင်ဝ မှ တဆင့် စောက်ဖုတ်ဆီသို စီးကျ ကုန်တယ် ။ ဖင်ဝကိုလက်မ ဖြင့် တံတွေများ စွတ် ကာ ပွတ်လိုက်ပီး လီးဒစ် ကို စအို ၀ ကို တေ့လိုက်တယ် ။ လီးဒစ်ဖြင့် စအိုဝ ကို ပွတ်ရင်း ” ဖင်လိုးမယ်နော် ” ” ဖြစ်ပါ့မလား မောင်လေး တခါမှ မခံဖူးသေးဘူး ” ” ဟုတ်လား ဒါဆို အသစ်ကလေးပေါ့ အဲ့လို မှ ပိုချချင်တာ ” “.ဖြေးဖြေးနော် မောင် ” ” မဖြေးဘူး အကြမ်းလိုးမယ် ခံပေး ” ” ဖြောင်း ” တင်ပါးကို တချက် ခပ်ပြင်းပြင် ရိုက်ချလိုက်တယ် ။ ” အားးး မောင်လေးး ” ” ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ” တင်ပါးကို လေးငါးချက် ဆက်တိုက်ဆင့်ရိုက်ပေးလိုက်တယ် ။ ” အင့်..ဘွတ် ” လီးဒစ်က ဖင်ဝ အတွင်း ဘွတ်ကနဲ့ ဝင်သွားတယ်။
တော်တော်ကြပ်သား။ ဒစ်ဝင်သွားတဲ့ လီးတံပေါ်ကို တံတွေး ထွေးချလိုက်ပီး လီးတံ အဆုံးထိ ထိုးသွင်းလိုက်တယ် ။ ဖင်သားလေးက လီးတံ နှင့် အတူ အတွင်း သို့ အိဝင်သွားတယ် ။ ” အားးးးး နာတယ် အားးးးးမောင်လေး အားးးးကျွတ် ကျွတ် ” အော်သံကြောင့် ကျွန်နော့် မှာ ပိုစိတ်ထန်လာပီး လီးကို ထုတ်သွင်း မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးလိုက်တော့ ဖင်ဝ အတွင်းမှ လေအံသံတွေပါ ထွက်လာတယ်။ ” ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ” ” ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ” ” အားးး အားးးး ကျွတ် ကျွတ် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ နော် အားးး ” ကျွန်နော့် ခါးအား ကို စိုက်သုံးပီး တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကို ကိုင်ကာ ခပ်မြန်မြန် ထုတ်သွင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ တဖြည်းဖြည်း လီးတံတလျောက် အရည်တွေဖြင့် ချောမွေ့လာတယ် ။တင်ပါးတွေ ကို ရိုက်လိုက် စောင့်စောင့် သွင်းလိုက် ဖြင့် စည်းချက် ညီညီ စောင့်ထိုးပေးနေမိတယ်။ “.အားးး မောင် ဟုတ်တယ် ကောင်းလာပီ ” သူမ လက်တဘက်က အဖုတ်ကို လှမ်းပွတ်ရင်း ငြီးငြူသံ တွေ ထွက်လာတယ်။အခု ဆိုရင် ကျွန်နော့် အပေါ် ကြောထားတဲ့ ဂျာကြီး ကို မြင်ယောင်မိရင်း သူမိန်းမ ကို ဖင်ပါ လိုးပေးလိုက်ရပီ ။
နောက် ဆို ဂျာကြီး ဘယ်လို ကြောကြော လက်ခံနိုင်ပီဗျာ ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဆံပင်တွေ ကို လှမ်းဆွဲ လိုက်ရင် ဖင်ဝ ကိုအားပါပါဖြင့်စောင့်စောင့်လိုးပေးနေတယ်။ ” အားးးး အားးးးး ” ” ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ” ” ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် ” “အားးးးကောင်းတယ် မောင် အားးးစောင့်လိုးပေး” “အင်းးးး ရော့ရော့ အားးး မခိုင် ဖင်ခံလို့ ကောင်းလား ” “အားးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ” ” ကောင်းနေပီမောင်လေး အားးး လိုးပေး” “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ” “ဖြောင်း ဖြောင်းဖြောင်း ” “ဖတ် ဖတ် ဖတ်” ဆက်တိုက် လိုးရင်း လိုးရင်း ကျွန်နော့် လီးတံ က ပူလာတယ် အထဲက လဲ ကျဉ်တက်လာတယ် ။ “အားးး မမ ကျွန်တော် ပီး ချင်နေပီ ” ကျွန်နော့် လီးတံ ကို ဖင်ထဲမှ ချွတ်လိုက်ပီး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးကို ဆံပင်မှ ဆွဲကာထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး မျက်နှာပေါ် မှာ လီးတံတေ့ရင်း ဂွင်းကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ထုပစ်လိုက်တယ် ။
” အားးး မမ လျှာထုတ်ထားးးး ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်မယ် ” ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ပါးစပ်လေးဟ လာပီး လျှာလေး ထုတ်လာတယ်လျှာပေါ် ကို လီးထိပ်တင်ပီး ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ထုလိုက်တာ ၂ မိနစ်လောက်ပဲ ထုလိုက်ရတယ် ကျွန်နော့်လီးတံ ထိပ် မှာ ဖြူပျစ်ပျစ် လရေ တွေ အခဲလိုက် ထွက်ကျလာတယ်။ လရေတွေက ပါးစပ်ထဲတဝက် ပါးပေါ် မေးစေ့ပေါ် နုတ်ခမ်းပေါ် အနှံ ပျံ့ကျဲ ကုန်တယ် ။ ” အားးးး ကောင်းလိုက်တာ မ ရယ် ” ” လူဆိုး ဒီမှာ အကုန်ပေပွကုန်ပီ ” ကျွန်နော် ဘေးမှ ကျနေတဲ့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ပင်တီ အပြာရောင်လေး ကို ကောက်ကာ မေ့စေ့ နဲ့ ပါးတွေပေါ် ပေနေတဲ့ ကျွန်နော်လရေတွေကို သုတ်ပေးလိုက်တယ် ။ “.မကြိုက်ဘူးလားးး ” “သွားပါ ကြိုက်ပါဘူး ဖန်တံတံ နဲ့ ” “ရော့ ပြောင်အောင် ယက်ပေးဦး ” ကျွန်နော့် ရဲ့ နဲနဲ ပျော့ သွားတဲ့ လီးတံ ကြီး ကို သူမျက်နှာရှေ့ ထိုးပေးလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် လီးတံကို ကိုင်ရင်း လီးတံ တလျောက် လျှာဖျားလေး ဖြင့် ယက်ကာ အရည်တွေကို ပြောင်အောင် လုပ်ပေးတော့တယ် ။ ကျွန်နော့် လက်မှ နာရီ ကို ကြည့်လိုက်တော့ နာရီက ငါးနာရီ မတ်တင်း ပဲရှိသေးတယ် ။
နောက်ထပ် အချိန် သုံးနာရီလောက် ရသေးတာပဲ။ ကျွန်နော် ဂျာကြီး အိပ်ယာ ပေါ် မှာ အေးဆေးစွာ အနားယူ ပက်လက်လှန်လိုက်တယ်။ ” ရေသွားဆေးဦးမယ် ခန ” ဆိုပီး ကုတင်ပေါ်မှာ ဆင်းက ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဖင်ကြီး နိမ့်တုံမြင့်တုံဖြင့် လျောက်သွားတယ် ။ အသားဖြူဖြူ တင်ပါးတွေမှာ ကျွန်နော် ရိုက်ထားလို့ နီစပ်စပ် ဖြစ်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ် ။ ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရေချိုးခန်းမှ ပြန်ထွက်လာတယ်။ကိုယ်လုံးတီး နဲ့ပဲ ကျွန်တော့် ထံ လျောက်လာပီးး ” အမောဖြေထားဦး အအေး သောက်မလား ” ” အင်းးး ” အိမ်ရှေ့ခန်းကို ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး အဝတ်ဗလာဖြင့် ထွက်သွားပီး ရှပ်ဘူး တစ်ဘူး ကိုင်ကာ ပြန်ဝင်လာတယ် ။ ရှပ်ဘူးအေးအေး လေး သောက်လိုက်ရင် ကုတင်ပေါ် လှဲလိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကလည်း ဘေးမှာ လာဝင်လှဲတယ် ။
ကျွန်နော့် လက်မောင်းပေါ် မှာ ခေါင်းအုံးရင်း သူမ ခြေထောက်က ကျွန်နော့် ကို လာခွထားတယ် ။ “ဖင်ဝ နဲနဲပြဲသွားလားမသိဘူး ရေဆေးတာ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း နဲ့ ” ” ဘယ်လိုလဲ ဖင်ခံလို့ ကောင်းလား ” “.သိဘူး နာနာ ကြီး ” ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တင်ပါးတွေ ကို လှမ်းပွတ်လိုက်ရင်း ” နောက်တခါ ဖြေးဖြေးလေး လိုးပေးမယ် မကြမ်းတော့ဘူးနော် ” ” အင်းးး ရပါတယ် ကြမ်းကြမ်းလေး လဲ ကြိုက်တယ် ” ” အင်းးး မောင်တို့ နောက်တခါလည်း တွေ့ချင်သေးတယ်ကွာ ” “အင်း..စီစဉ်မှာပေါ့လို့….မောင်နဲ့လိုးရတာအရမ်းကောင်းတယ်” ” အခုလည်း ခနနေ ထပ်လိုးမယ်နော် ” “မောင့်သဘောပါ ” ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးလည်း ရမ္မက်တော်တော်ထန်တယ်။နောက်တချီထပ်လိုးကြတော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးမှ အပေါ်ကတက်ခွစောင့်လိုက်ပက်လက်လိုးလိုက် ဖင်ကုန်းလိုက်နဲ့အားပါပါ ဆက်လိုးကြတယ်။ည၇ခွဲကျော်ကျော်လောက်မှာ ကျွန်နော်လည်း အိမ်ကနေပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ် ။ နောက်ပိုင်း ၂ ပတ် တခါ လောက် အပြင် မှာ အကြောင်း တစ်ခုခု ပြ ပီး လိုးဖြစ်ကြတယ် ။
သုံးလေးလ လောက် အတွင်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးနဲ့ ဆယ့်ငါးကြိမ်ထက်မနည်း လိုးဖြစ်ကြတယ် ။ ဂျာကြီး ကတော့ သေချာ မသိရှာ ။ နောက် လေးလ လောက်မှာ ကျွန်နော် ရာထူးတိုး နဲ့ နေပြည်တော် ရုံးချုပ် ကို ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ကျတယ် ။ နေပြည်တော် ရောက်ပီး နောက်ပိုင်း တခါပဲ တွေ့ ဖြစ်လိုက်တယ် ဂျာကြီး အစည်းအဝေး လာတက်တာ ကို လိုက်လာတာ ။ လိုးတော့မလိုးဖြစ်တော့ဘူး ။ သူနဲ့ မခွဲ ခင် ပြောသွားသေးတယ် တစ်ရက်လောက် ဆုံဖြစ်အောင် ဆုံချင်သေးတယ် လွမ်းနေတယ်တဲ့ ကျွန်နော့် နားကို ခပ်တိုးတိုးလာပြောသွားတယ် ။ ကျွန်နော် လိုးဖူးခဲ့သမျှ ထဲ အမှတ်အရဆုံးတစ်ယောက်က ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးပါ ။ ဒီနေ့ အချိန် ထိ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကို မှန်းပီး တခါတခါ ဂွင်းထုဖြစ်တုန်းပဲ ။
အခု ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးက ကလေးသုံးယောက်တောင်ရသွားပီ ။ သားနှစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက် ။ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ သူတို့မိသားစု ပုံတွေ ခနခန တွေ့ ဖြစ်တယ် ။ ဂျာကြီးကလည်း သိပ်တော့ ခေသူ မဟုတ်ပဲ ။ ကလေး သုံးယောက်လုံးက ဂျာကြီး မျက်နှာပေါက်နဲ့ဗျ ။ ကျွန်နော် လည်း တချိန်ချိန် တနေရာရာမှာ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး နဲ့ လိုးချင်သေးတယ်ဗျာ ။ ပြန်ပီး တွေ့ဖြစ်လိုးဖြစ်အောင်ဝိုင်းဆုတောင်းပေးကျပါဦးလို့. ပြီးပါပြီ မူရင်ရေးသားသူအားcreditပေးပါသည်ခိုးစားတဲ့အသီးက ပိုချိုတယ်
ကျွန်နော့် မန်နေဂျာ ( ဂျာကြီး ) ကိုတော်တော် တင်းနေပီဗျာ ။ ကျွန်နော့် ပရောဂျက် တစ်ခု ကို တင်ပြတယ် ။ သူသဘောကျတယ် ဒါ ကို သဘောမကျသလို ကလဲ ပြောသေးတယ် ဘာလိုတယ် ညာလိုတယ် နဲ့ ။ ထားပါ ဒီလိုပြောတာကတော့ လူကြီးတော်တော် များ များ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ကျွန်နော် သဘောပေါက်တယ်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဗျာ အမ်ဒီ တင်ပြတဲ့ အခါ ဒီပရောဂျက် ကို သူပဲ ဆွဲထားသလိုလို သူကိုယ်တိုင်ပဲ အပင်ပန်းခံထားရသလို တင်ပြတယ် ။ အမ်ဒီက ကျွန်တော့ ပရောဂျက်ကို လက်ခံလိုက်တယ် ။ ပရောဂျက် တစ်ခု အောင်မြင်သွားတော့ ကျွန်နော် တို့ ရုံးအဖွဲ့ တွေ ပျော်ကြတာပေါ့ ။ ဂျာကြီးကတော့ ရုံးအဖွဲ့သားတွေ ရှေ့မှာ ကျွန်နော့် ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း တောင်မပြောဘူး ။ ကျွန်တော့မှာ မအိပ်မနေ အပင်ပန်းခံပီး ကြိုးစားခဲ့လိုက်ရတာ ။ ကျွန်နော် တော်တော် ဒေါသ ဖြစ်မိတယ် ။ ဒေါသ ဖြစ်တိုင်းလည်း ဒေါသထွက်မိရင် ကျွန်နော့် အလွန် ဖြစ်ဦးမယ် ။
ဒီအလုပ်က လည်း ကျွန်နော် မထွက်ချင် ။ ဂျာကြီး နာမည် က ဦးဇော်ဝင်းနိုင် ၊ အသက်က လေးဆယ်ငါးလောက်ရှိပီ ။ တော်ကီကတော့ တော်တော် ကောင်းတယ် ကျွန်နော်တို့ လူငယ်တွေ လိုက်မမှီ ။ တချို့ ကပြောတယ် ဂျာကြီး စကားပြောလိုက်ရင် စိတ်ဆိုးနေတဲ့သူတောင်ပြုံးရယ်သွားတယ် ။ ယောကျားအချင်းချင်း တောင် ဖင်ခံချင်သွား အောင် ပြောတတ်တယ် ဆိုပီး ပြောကြတယ်သေးတယ် ။ တကယ်လည်း တော်ကီ တော်တော် ကောင်းပါတယ် ။ ကျွန်နော် သူ့ကို ဒေါသဖြစ်ပီး သွားရှဲလိုက်လို့ သူ့တော်ကီအောက်မျောပီး ကျွန်နော်ပါ ဖင်ပိတ်ပီး ပြန်လာရမှာ ကြောက်လို့ ( ဟီးးးးး) ဒေါသတွေ မျိုချပီး ပါးစပ်ပိတ်ပီး ပဲ နေလိုက်တော့တယ် ။ ဘယ်လို တော်ကီတွေ ပစ်ပီး ဖန်ထားလဲတော့ မသိဘူး သူ့ မိန်းမ က သူရုပ်ရည်နဲ့ မလိုက်အောင် ချောတယ် ။ ကချင်မ လုံးကြီးပေါက်ကြီး ၊ အသက်က ၃၀ ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ် ။ သူ့မိန်းမ ဘက်က လည်းချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း ။ သူ့ မိန်းမ လည်း သူ့တော်ကီ ကြားဝင်သွားပီး ဖင်ခံပီး ယူလိုက်ရတာ ဖြစ်မယ် ။
သူ့မိန်းမ နဲ့ ကျွန်နော် ခနခန ဆုံဖူးပါတယ် ။ တကယ်လုံးကြီးပေါက် မင်းကြီးကြိုက်ကြီး အသက်က သာ သုံးဆယ်လောက် ဆိုပေမယ့် နေထိုင်တာကတော့ တကယ် လူကြီးစတိုင်လ် ။ မြန်မာဝတ်စုံ ခါးတို များ ဝတ်ထားလိုက်ရင် တော်တော်ကြည့်ကောင်းဗျ ။ တချက်တချက် ဘိုက်သားဖွေးဖွေးလေး များ ပေါ် သွားတာမျိုး ကျွန်နော် မကြည့်ပဲ မနေနိုင် ။ မြင်အောင်ပြောရရင် မင်းသမီးနန္ဒာလှိုင်ရဲ့ Grand Royal အရက်ကြော်ငြာပိုစတာထဲမှာ မြန်မာဝတ်စုံ အနက်လေး နဲ့ ရိုက်ထားတာ မြင်ဖူးကြမှာပေါ့ ။ ရုပ်ချင်မတူပေမယ့် အဲ့လို ဆိုဒ်မျိုးဗျ ဖင်အိုးကြီးကြီး နို့တင်းတင်း နဲ့ အသားဖြူဖြူ ကချင်မ ။ စကားကသ နဲ့ တ နဲ့ မကွဲဘူး ။ နုတ်ခမ်းလေးက လည်း မထူမပါး ။ မျက်ခုံးကော့ကော့ ဖြင့် တော်တော် ချစ်စရာကောင်းတယ် ။ ချစ်စရာကောင်းတယ် ဆိုတာ ထက် ကြိုက်စရာကောင်းတယ်ဆိုရမလား။ အပြင်ထွက်ရင် မြန်မာ ဆန်ဆန် ပဲ ဝတ်တတ်တာများတယ် ။ အိမ်နေရင်း ဆိုရင် ဂါဝန်ပွပွကြီး နဲ့ ။ကျွန်နော်က အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ သူတို့ အိမ်ခနခန ရောက်ဖြစ်တော့ ကျွန်နော် နဲ့လည်း ရင်းနှီးနေတယ် ။ ဂျာကြီးနဲ့ ကျွန်နော် နဲ့ က သိပ်သာ မျက်နှာကြောမတည့်တာ အလုပ်ကိစ္စ ဆို ကျွန်နော့် ကို ပဲ သူယုံကြည်တော့ တော်တော် များများ ကိစ္စတွေ ကျွန်တော့ကို ပဲ ခိုင်းတတ်တယ်။ မျက်နှာသာတော့မပေး ။ သူတို့မှာ လေးနှစ်အရွယ် သားလေး တစ်ယောက်ရှိတယ် ။
တော်တော်မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့တဲ့ကောင် ။ အလုပ်ကိစ္စ ရှိလို့ သူ့အိမ်ကို ရောက်ရင် ကျွန်နော် ကောင်းကောင်းမထိုင်ရ ။ခေါင်းပေါ်ထိ တက်ဆော့တယ်ကောင် ။ သူ့ အိမ်သွားရင် ဘောင်းဘီဝတ်သွားရတယ် ပုဆိုးဝတ်ထားရင်လည်း ခိုင်ခိုင်သာ စည်းထား ။ သူတို့နေတဲ့ အိမ်နဲ့ ကျွန်နော် တို့ ရုံးနဲ့ နဲနဲ တော့ အလှမ်းဝေးတယ်ဗျ ။ ပိုက်ဆံရှိတော့ ရုံးက ပေးထားတဲ့ အိမ်မှာ မနေပဲ သူတို့ အိမ်မှာ သူတို့နေကြတယ် ။ ရုံးကနေ ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရင် နာရီဝက် ကျော်လောက် မောင်းရတယ် ။ ခြံနဲ့ဝန်း နဲ့ တထပ်တိုက်ပုလေး ဆောက်ထားတယ် ။ အိမ်းလေး က နေချင်စရာလေး။ တစ်နေ့ ( တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ လေးနာရီ ) ကျွန်နော့် ပရောဂျက် ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်ပီး ရှင်းလင်းစရာတွေ ရှိတာနဲ့ ဂျာကြီး အိမ်ကို စီးတော်ယာဉ် ဆိုင်ကယ်လေး ဖြင့်သွားခဲ့တယ် ။
ခြံရှေ့ ရောက်တော့ လူခေါ်ဘဲလ် တီးလိုက်ပီး စောင့်နေတာ ခနနေတော့ ဂျာကြီးမိန်းမ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ဂါဝန်ပွပွ ကြီး နဲ့ တခါးလာဖွင့်ပေးတယ် ။ “ဟော မောင်လင်းနိုင် ဘာကိစ္စတုန်း လာအိမ်ထဲဝင်” “ဟုတ်ကဲ့အမ ကျွန်နော် ပရောဂျက်ကိစ္စ တွေ ရှင်းမလို့ပါ မနက်ဖြန် ပရောဂျက် ကိစ္စ အစည်းအဝေး ရှိလို့ပါ ” “အော် ..အေးးအေးး လာထိုင်ဦး အမ ကော်ဖီ သွားဖျော်လိုက်ဦးမယ် မင်း ဆရာ က ဂေါက်ဖ် သွားရိုက်တယ် သူမေ့နေတာလားမသိဘူး အမ ဖုန်းဆက်ပေးမယ် ” ဟုတ်ကဲ့အမ ”
ကျွန်နော့် ရှေ့ကနေ ကော့ပတ် ကော့ပတ် နဲ့ နောက်ခန်းထဲကို ဝင်သွားတယ် ။ ဂါဝန် အပွကြီး ဝတ်ထားတာတောင် နောက်အိုးဆုံကြီး က ကော့ထွက်နေတာပဲ ၊ အိမ်မှာ တိတ်ဆိတ်နေတယ် ဟိုမျောက်လောင်းလေး မရှိဘူးလားမသိ ။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ စကိုင်း နက်က ကိုးရီးယားဇတ်လမ်းတွဲ ကြည့်ရင်း ကျွန်နော် ထိုင်စောင့်နေလိုက်တယ် ။ ဆယ်မိနစ်လောက် နေတော့ ကော်ဖီခွက်တခွက် ကိုင်ရင်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ပြန်ထွက်လာတယ်။ ” မင်း ဆရာက စောင့်ပါဦးတဲ့ သူ ဂေါက်ဖ် ရိုက်ရင်းတန်းလန်း နဲ့ မို့တဲ့ လူကြီးတွေ လည်း ပါလို့ နောက် ၂ နာရီလောက်ကြာဦးမယ်တဲ့ ” “အော် ..ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် စောင့်ရမှာပေါ့ အခုရှင်းခဲ့မှ ဖြစ်မှာ မနက်ဖြန် အမ် ဒီကို ပြန်ရှင်းရမှာမို့လို့ပါ ။
ဒါနဲ့ သားလေးမတွေ့ပါလား ” ” မင်းတူက ကျောင်းပိတ်ရက် သူ့ အဘိုးတွေဆီ ပို့ထားတယ် တပတ် ကျော်ပီ သူမရှိတော့လည်း ပျင်းစရာ အမလည်း ပျင်းနေတာ တနေ့တနေ့ ကိုးရီးယားကားပဲ ကြည့်နေရတယ် ကော်ဖီတောက်ဦး ငါ့ မောင် ” (သူ့စကားအတိုင်း သနဲ့တမပီတမူရင်းအတိုင်း ပြောင်းရေးလိုက်တယ်ဗျာ) ကျွန်နော် နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်တီမှာ တင် ပလင်ချိတ်ထိုင်ရင်း ကျွန်နော် နဲ့ စကားတွေ ပြောဖြစ်တယ် ။ တင်ပါလင်ချိတ်ထိုင်ထားတော့ ဂါဝန် စ ကို ခြေထောက် နှစ်ချောင်း ကြား ညှပ်ထားတယ် ။ အောက်က ခြေသလုံးသား တွေက ဒူးနားမရောက်တရောက် ။ ခြေသလုံးသား က ဖွေးဥနေတာပဲ ။ သေချာ ကြည့်ရင် မွှေးညှင်း နူနုလေးတွေတောင်မြင်နေရတယ် ။ သေသေချာချာကြီးတော့ မကြည့်ရဲ ကျွန်နော့် ဂျာကြီး ရဲ့ မိန်းမ ကိုး..။
သူ ကလဲ ဘယ်လို အနေအထားမှန်းမသိ ။ ဂါဝန်က လက်ပြတ်ဂါဝန် ဆိုတော့ တချက်တချက် ဂျိုင်းအောက်က ပေါ်ပေါ်သွားပီး ဘော်လီစ အပြာနု ရောင်လေး လှမ်းတွေ့ရသေးတယ် ။ ဆံပင်တွေကို နောက်လှန်စည်းထားပီး မျက်နှာမှာ ဘာမှ မလိမ်းထား ။ အပြင်ထွက်တိုင်း တမျိုးပီးတမျိုး ပြောင်း ဝတ်တတ်တဲ့ ဆွဲကြိုးတွေ နားတောင်းတွေ ဘာတစ်ခုမှ မဝတ်ထားဘူး ။ မျက်နှာ အသားဖြူဖြူလေး က ရှင်းပီး ချစ်စရာကောင်းတယ်ဗျာ ။ သူနဲ့သာ စကားတွေ ပြောနေတာ ကျွန်နော် စိတ်ထဲကတော့ စားနေကျ အကျင့် အတိုင်း ဒေါ်မာမာခိုင် ကို စိတ်နဲ့ ပြစ်မှား နေမိပီ။ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ အဲ့ဒီကိစ္စ မလုပ်ဖြစ်တာလဲ ကြာတော့ အောက်က သကောင့်သား က ထကြွချင်နေတယ်။ ကျွန်နော် ရှိုးနေတာ ကို သတိထားမိလို့လား မသိ တချက်တချက် ကျွန်နော့် မျက်လုံးတွေ ကို စိုက်စိုက်ကြည့်တယ် ။ တအိမ်လုံးမှာလဲ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး နဲ့ ကျွန်နော် နှစ်ယောက်တည်း ။
စိတ်တွေ က သောင်းကျန်းနေတယ် ။ ထပြန်ပီး အပြင်မှာ ၂ နာရီလောက် အချိန်ဖြုန်းပီး မှ ပြန်လာ ရမလား ကျွန်နော် တွေးလိုက်သေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် မပြန်ဖြစ် ကျွန် နော့် အတွေ့ အကြုံ အရ သူ့ အကြည့်တွေကလည်း တမျိုးပဲ ။ ” ငါ့မောင် ပျင်းနေပီလား အမ က စကားပြောဖော်မရှိလို့ စကားတွေ လျောက်ပြောနေတာ မင်းဆရာကလဲ အလုပ်ကများ အလုပ်အားရင် ဂေါက်ဖ် သွားရိုက် နဲ့ သားလေး မရှိတော့ အရမ်းပျင်းတာပဲ ” ” ရပါတယ် မပျင်းပါဘူး အမ ကျွန်နော် အမ နဲ့ စကားပြောရတာ ပျော်ပါတယ် ဂျာကြီး နဲ့သာ သိပ် အပေါက်အလန်းမတည့်တာ ဟီးးးဟီးးး ” ” ဟုတ်ပ မင်းဂျာကြီးနဲ့လည်း အမ နဲ့ သိပ် အပေါက်လန်းတည့်တာ မဟုတ်ဘူး ကလေးတစ်ယောက်သာ ရသွားတာ ” ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ပြောပီးမှာ စကားက အနှောက်အသွားမလွတ်ဖြစ်သွားတာ သတိထားမိသွားတယ်ထင်တယ်။ စကား အပေါက်အ လန်းမတည့်တာပြောတာနော် ငါ့မောင် ” ကျွန်နော်လည်း စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ အနေနဲ့ စကားနဲနဲ စကြည့်လိုက်တယ်။
“ကျွန်နော် လည်းစကားပြောတာ အပေါက်အလန်းမတည့်တာ ပြောတာပါ ကျန်တာတော့ အပေါက်အလန်းတည့်လို့ ကလေးတစ်ယောက်ရ လာတာပေါ့နော့် ဟီးးး ” “ဟင်းးးဟင်းးး ငါ့မောင်နော် လူပျိုသာ ဆိုတယ် စကားကလဲ ” ” ဟီးးး အမ နဲ့ ကျွန်နော်လည်း အပေါက်အ လန်းတည့်ပါတယ်နော် ..စကားပြောရတာပါ” ” ဟိတ်ဟိတ် .. .တော်ပီ စကားပဲ အပေါက်အလန်းတည့် ကျန်တာလာမတည့်နဲ့ ဟ င်းးး ” ” ကျန်တာလည်း အပေါက်အတန်း တည့်ရရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော် ” ကျွန်နော် ပြောချလိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး မျက်လုံးပြူးသွားတယ် ။ အရင်က သူနဲ့ ကျွန်နော် ၂ ယောက်တည်း စကားသေချာ မပြောဖူး ။ သူမ အနေနဲ့ လည်း ကျွန်နော့် ကို ဒီ လောက် ရဲ လိမ့်မယ် မထင်ခဲ့ဘူးထင်တယ် ။ ” ဟိတ် ငါ့မောင် စကားတွေ မကျွံ နဲ့နော် မင်းဂျာကြီး သိရင် မင်း အလုပ်ပြုတ်မယ်နော် ” ” အမ မတိုင်ရင် မသိပါဘူး ” ” မတိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူက ပြောလဲ ” ” အမ မျက်လုံးတွေက ပြောနေတယ်လေ ” ဒေါ်ခိုင်ခိုင် ဦး မျက်လွှာချသွားတယ် ။ အတွေ့ အကြုံအရ ကျွန်နော့် ဘက်က ကိုးဆယ်ဆလောက် သာနေပီ ။
ကျွန်နော် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ သိ ပီလေ ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး နား ကို ဖြေးဖြေးချင်းတိုးကပ်သွားခဲ့တယ် ။နောက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးရဲ့ ပုခုံး နှစ်ဘက်ပေါ် ကို ကျွန်နော့် လက်နှစ်ဘက် ကျရောက်သွားပီ။ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ခေါင်းကို ငုံထားတယ် ဘာမှမပြော ၊ ပုံခုံးသားလေး တွေ ကို အသာပွတ် ကာ လက်မောင်းရင်းမှ ကိုင်၍ မတ်တပ်ရပ်စေလိုက်တော့ အလိုက်သင့်ပါလာတယ်။ ” မကောင်းပါဘူး ..ငါ့မောင်ရယ် ..မင်းဆရာ ပြန်လာတော့မှာ ” ခါးမှ ဆွဲဖက်လိုက်ကာ နီထွေးထွေး နုတ်ခမ်းတစ်စုံအား ငုံခဲလိုက်တယ် ။ ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ” အင့်..အူးးး ဖ လူးးးး” ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရုန်းဖယ်တယ် ။ ကျွန်နော့်လက်က ခါးကို တင်းကြပ်စွာဖက်ထားပီး ကျွန်တော်နဲ့ ကိုယ်လုံးချင်း ဆွဲကပ်ထား လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ဘယ်ဘက်လက်က သူ့မ နဲ့ ခေါင်းကို နောက်ကနေ ပြန်ကိုင်ထားပီး ညာဘက်လက်က ဂါဝန်ပါးပါး ပေါ်မှ တင်ပါးတွေကို ပွတ်ပေးနေရင်း နုတ်ခမ်းချင်း မလွတ်တမ်း နမ်းပစ်လိုက်တယ်။
ပါးစပ် ကို အတင်း စေ့ထားပေမယ့် တချက်တချက် နုတ်ခမ်းဟ သွားတဲ့အချိန် ကျွန်နော့် လျှာ နဲ့ သူမ လျှာ ကို လုံးထွေးရစ်ပတ်လိုက်တယ် ။ ” ပြွတ် ပြွတ် ” ” အငှးးးဖလူးးးးအူးးးး ” ကျွန်နော့်ညာဘက်လက်က တင်ပါးအနှံ လျောက်ပွတ်နေရင်း သတိထားမိလိုက်တယ် ၊ အတွင်းခံ မဝတ်ထားပါလား ။ ဒါကြောင့် ချောမွတ်နေတာကို။ အနမ်းတွေ ကို မရပ်သလို ကျွန်နော့်လက်ကလဲ တင်ပါး တလျောက် ပွတ်ဆွဲရင်း တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကြားကို နှိုက် နှိုက်ပေးမိတယ် ။ ထွားလွန်းတဲ့ တင်ပါးတွေကြောင့် ကျွန်နော့် လက်ချောင်းများက တင်ပါးနှစ်ခြမ်းကြား ညှပ်ညှပ်သွားသလို ခံစားမိ တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရင်ဘတ် တွေက ကျွန်နော့် ရင်ဘတ် နှင့် ဖိကပ်နေမိတာကြောင့် သူနို့နှစ်စုံရဲ့ အထိအတွေ့ ကို အောက်ခံ ဘော်လီမှ တဆင့် သိရှိမိတယ် ။ ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ” အားးး တော်တော့ ကွာ ငါ့မောင် မင်းဆရာသိသွားရင် မိုးမီးလောင်မယ် ” ” မသိပါဘူး မမ ရယ် ဂျာကြီးက ၂ နာရီလောက်ကြာဦးမှာပဲ ” “အာာာာ မသိတော့ဘူးကွာ ပြဿနာ တတ်မှာ ကြောက်တယ်ကွာ ” ” ကျွန်နော် ခြံတခါး သွားပိတ်ထားလိုက်မယ် ဂျာကြီး ကား ဝင်လာရင် သိတာပေါ့ ” ကျွန်နော် ဧည့်ခန်းမှ အလောတကြီး ထွက်ကာ ခြံ ဝန်းတံခါး ကို သော့သွားခတ်လိုက်တယ် ။
ပီးတာ နဲ့ အိမ်ပေါ် တက်လာတော့ ဧည့်ခန်းတွင် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ရှိမနေတော့ ၊ အတွင်းခန်း ဘက် ဝင်လာလိုက်တော့ အိပ်ခန်းတံခါး စေ့ထားတာ တွေ့လိုက်လို့ တံခါး ကို အသာတွန်းလိုက်တော့ ဂျက်မချထား ၊ အတွင်းခန်းထဲ ကျွန်နော် လှမ်းဝင်လိုက်တယ် ။ မှန်တင်ခုံရှေ့ မှာ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ။ တံခါးကို အသာ ပြန်ပိတ်လိုက်ပီး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ထံ ဖြေးဖြေးချင်းလျောက်လာလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ကို လှည့်မကြည့် ။ ကျွန်နော် နောက်ဘက်ကနေ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကို ဖက် လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့်လက်နှစ်ဘက်လုံးက သူမ ရင်ဘတ် ပေါ် ကို ကွက်တိ တင်ထားရင်း ဂုတ်သားလေးတွေ ကိုနမ်းစုပ်လိုက် တယ် ။ ” အာ.ယားတယ်ကွာ အဲ့နေရာ မနမ်းနဲ့ ဘယ်လိုကြီးမှန်းလဲမသိဘူး တမျိူးကြီး ” ညူတူတူ အသံဖြင့်ပြောတယ် ။ ကျွန်နော့် လက်တဘက်က နို့အုံတွေကို ကိုင်နေရာမှ အောက်ကို လျောချလိုက်ပီး ပေါင်ခွဆုံကြားကို ဝင်လိုက်တယ် ။ လက်ချောင်းများက နေရာမှန်ကို ကွက်တိ ။ ” အားးးး မောင်လေးးးး ဖြေးဖြေး ” ဂါဝန်စ ပေါ်မှာ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး အဖုတ်ကြီး ကိုနှိုက်ပေးနေလိုက်တယ် ။
အဖုတ် ထဲမှ အရည်စိုတိုတိုက ဂါဝန်စမှာ စေးကပ်ကပ် ဖြစ်လာပီး ကျွန်နော့် လက်ကို ပါ စိုလာတယ် ။ ” အားးးးအင်းးးမောင်လေးး ကောင်းတယ် အားးးဖြေးဖြေး ” ကျွန်နော့် ဘောင်းဘီအောက်မှ သကောင့်သား ကလဲ ထန်နေပီ ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တင်ပါးကြီးတွေ နဲ့ ဖိကပ်ထားရင်း စောက်ဖုတ်ကို မနားတမ်း ပွတ်ဆွဲပေးနေမိတယ် ။သူမ တင်ပါးကြီးတွေက လည်း နောက်ဘက်ကို ကော့ကော့လာ တယ် ။ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ကျွန်နော် သူမ ဂါဝန်စ ကို အောက်မှ ဖြေးဖြေး ချင်း အပေါ် ကို ဆွဲတင်လိုက်တယ် ။ အဖုတ်ကို နှိုက်ကြည့် လိုက်တော့ စောက်ရည်က တော်တော် ရွဲနေပီ ။ ဂါဝန်ကို အပေါ်ထိ ဆွဲမ လိုက်ပီး ခေါင်းမှ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ တလက်စတည်း ကျွန်နော့် ဘောင်းဘီ ကိုလည်း ခါးပတ်ချွတ် ဇစ်ဖြုတ်ကာ အောက်ကို ဆွဲ ချွတ်လိုက်တယ် ။ အရမ်းညောင်းနေပီ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်နော့် လီးက ချက်ချင်း ငေါက်ကနဲ အပေါ် ကို ထောင်တက်လာတယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦးက ကုတင်စောင်းမှာ တင်ပလင် ချိတ်ကာ ထိုင်ရင်း ကျွန်နော့် ကို ကြည့်နေတယ် ။ တင်ပလင်ချိတ် ထိုင်ထားတော့ အိုးကားကားကြီးများဘေးကို ထွက်နေတယ်။
အဖုတ်ကိုတော့မမြင် ရ ။ စောက်ဖုတ်မွှေး တွေကတော့ ဆီးခုံ အစပ်မှာ ပေါ်နေတယ် ။ သူမ ရှေ့မှာ ပဲ ကျွန်နော့် လီးကို ကိုင်ပီး ဂွေ တချက်နှစ်ချက် လှိမ့်ပြ လိုက်တယ်။ ” အာာာ နဲတာကြီး မဟုတ်ဘူး ” ကျွန်နော် လီးဒစ် ကို ဖြဲပြလိုက်တော့ သူ့ လက်ကလေး နဲ့ မရဲ တရဲ လာကိုက်ကြည့်ပီး လက်ညိုးလက်မ လေး နဲ့ ကျွန်နော့် လီးဒစ်လေး ကို အသာဖိကြည့်တယ် ။ပျစ် ကနဲ အရည်ကြည်လေး ထိပ်ဝ ကို ထွက်သွားတော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး သဘောကျသွားတယ် ။ ကျွန်နော် သူမ ပုခုံးမှ ကိုင်ကာ ကုတင်ပေါ်ကို တွန်းလှဲလိုက်တယ် ။ တင်ပလင်ချိတ်ထားတာ ပြေသွားပီး ခြေနှစ်ချောင်း က ကုတင် အောက် တွဲလောင်းကျကာ ပက်လက်လန်သွားတယ် ။ ကျွန်နော် ကုတင်အောက်မှာ ဒူး ထောက်ထိုက်လိုက်ပီး ပေါင်နှစ်ချောင်း ကို ကားလိုက်တော့ သူမရဲ့ အဖုတ်ကြီး ပြူးထွက်လာတယ် ။ တော်တော် အမွှေးထူသော အဖုတ် ။ ဆီးခုံ အစပ်မှ အဖုတ်နုတ်ခမ်းသားတွေနား အထိ အမွှေးများက ထူထဲစွာ ပေါက်နေတယ် ။ ခနခန ရိတ်လို့ လားမသိ ။ အရမ်းသန် သောစောက်မွှေးများ ။စောက်မွှေး တွေ ကို လက်ဖြင့် အသာဆွဲဖယ်လိုက်တော့ အောက်မှ စောက်စိ ပြူးပြူးလေး ထွက် လာတယ် ။
စောက်မွှေးတွေ သေချာ ဖယ်ကြည့်လိုက်တော့ အဖုတ် က မဲ မနေဘူး ။ ကချင်မ ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က အသားဖြူတယ် စောက်ဖုတ်က ဖြူမနေပေမယ့် အညိုရောက်ဘက်သန်းသလို ရှိသလိုပဲ ။ စောက်ခေါင်း အတွင်းသားတွေကတော့ နီရဲရဲ အနေအထား ။ ပေါင်နှစ်ဘက်ကို အပေါ်ဘက်ကို ထောင်လိုက်ပီး ကားပေးလိုက်တော့ အောက်ဘက်က စအိုဝ ညိုတိုတို လေး ပါ တွေ့လိုက်ရတယ် ။ စအို အဝမှာပင် အမွှေးတွေ တစ်ပင်စနှစ်ပင်စ ပေါက်နေသေးတယ် ။ ဆီးခုံအပေါ် အစပ်လောက်မှတော့ ကလေး မွေးတုန်းက ခွဲမွေးထားဟန်ရှိတယ် ကန့်လန် ပြတ် အမာရွတ် ခြောက်လက်မခန့်ရှိတယ် ။ ကျွန်နော် ဒူးထောက်လျှက် အနေအထားကပင် စောက်ဖုတ် နုတ်ခမ်းသား အဖတ်လေးတွေကို ဖြဲလိုက်ကာ လျှာအပြားလိုက် အဖုတ်ပေါ် တင်လိုက်တယ်။ ” အားးးးမောင်လေ ” ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ” ပလက်ပလက် ..ပလက် ” ” အားးး အင်းးးးး ကောင်းတယ် မောင်လေး အားးးးရှီးးးးး ”
ကျွန်နော် လျှာက စောက်ဖုတ်တင်မဟုတ် စောက်ဖုတ်နှင့် လက်တလုံးခြားသာ ရှိတဲ့ စအို ညိုတိုတို ခရေပွင့် အထိ ပါ အလျှား လိုက် ဆွဲဆွဲ ပီး ယက်ပစ်လိုက်တယ် ။ကျွန်နော် လက်နှစ်ဘက်က ပေါင် နှစ်ဘက်ကို ရှေ့ သို့ တွန်းကန်ပေးထားသလို ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကလဲ သူမ ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို လက်နှစ်ဘက်မှ လှမ်း၍ ဒူးကောက်ဝတ်နားကို လှမ်းကိုင်ကာ ဆွဲ ထားတော့ တင်ပါးကြီးက အပေါ်ကို ခပ်မြောက်မြောက် အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ “.ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ” အားးးး မောင်လေးရယ် ကောင်းနေပီ အားးးးးး ” ” ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ” ” အားးးး ဟုတ်တယ် အတွင်း ထဲကို လျှာ နဲ့ ထိုးပေး အားးးးအရမ်းကောင်းတယ် ” ကျွန်နော် လက်နှစ်ဘက် ကို စောက်ဖုတ် ဘေးသား နုတ်ခမ်းတွေ ကို ဆွဲဖြဲလိုက်ကာ အဖုတ်ထဲသို့ လျှာကို ထိုးထိုးပီး ထည့်ကာ ယက်ပေးလိုက်တယ် ။ တင်ပါးကြီးကြီး ပေါင်တံကြီးကြီး ကြားထဲမှာ ကျွန်နော် မျက်နှာတစ်ခုလုံး နစ်မြုပ်နေသလိုပဲ ။
စောက်ပတ် အနံအသက် သိပ်မရှိ သေချာသန့်စင်ထားပုံလဲရတယ် ။ ညှီစို့စို့ အဖုတ်နံက တော့ ရှိတယ် ။ ” ပြွတ် ပြွတ် ” တချက်တချက် စောက်စိ ကို နုတ်ခမ်းသား ဖြင့် ဖိဖိ ကိုက်သလိုမျိုးလုပ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ” အားးးး ကောင်းတယ်မောင်ရယ်…. မမ ပီးတော့မယ်ထင်တယ် ” ” ပလက် ပ လက် ပြွတ် ပြွတ် ” ” အားးးးး ကောင်းတယ် မောင် အားးးးထွက်ကုန်ပီ အားးးထွက်ထွက်ကုန်ပီ ” ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တစ်ယောက် ငြီး တွားသံတွေကျယ်လာကာ သူမ စောက်စိကို သူမ လှမ်းပွတ်ရင်း အဖုတ် အခေါင်း အတွင်း မှ အရည်တွေ ညှစ်ညှစ်ချတယ် ။ ကျွန် နော် ယက်ပေးနေတာ ကို အသာ ဖယ်လိုက်ပီး အဖုတ်ကို သေချာကြည့်နေမိတယ် ။ အဖုတ် အတွင်းသားများမှ လှုပ်စလှုပ်စိ ဖြင့် အရည်ကြည်လေး တွေ စိမ့်စိမ့် ကျလာတာ တွေ့လိုက်တယ် ။ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး တစ်ယောက် မလိုးရသေးခင်မှာ ပင် တစ်ချီ ပီးသွား ခြင်း ဖြစ်သည် ။ စဉ်းစားမိသလောက် အဖုတ် အယက် မခံရတာ ကြာနေပီ ဖြစ်ပီး အဖုတ် အယက် ခံလိုက်ရတာ ကြောင့် ချက်ချင်း ဆိုသလို စိတ်တွေ မြောက်တက်ကာ ပီးသွားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည် ။
” အားးး မောင်လေး အရမ်းကောင်းတာပဲ .. တကယ်ကောင်းတယ် ပီးသွားတယ် ” ရှက်ကိုးရှက်ကန်း အမူအရာဖြင့် ကျွန်နော့် ကို ခေါင်းထောင်ကြည့်ကာ ပြောတယ် ။ ကုတင်ဘေးမှ ဒေါ်ခိုင် ခိုင်ဦး ဂါဝန် ကို ယူကာ ကျွန်နော် နုတ်ခမ်းမှ စောက်ရည်တွေ သုတ်လိုက်ပီး မတ်တပ် ထရပ်လိုက်တယ်။ ” မမ တစ်ယောက်တည်း ပီးနေကောင်းနေလို့ မဖြစ်ဘူးနော် ” ကျွန်နော့် လီး ကို လက်ဖြင့် ဂွေလိမ့်ပြလိုက်တယ် ။ ” အင်းပါ မမ သဘောပေါက်ပါတယ်နော် ” ပက်လက် လှန်နေရာမှ သူမ လက်ကို ကျွန်နော့်ဆီ ကမ်းပေးတာ နဲ့ ကျွန်နော် ဆွဲထူလိုက်တယ် ။ ကျွန်နော် က ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ် အနေအထား သူမက ကုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်လျှက်အနေအထား ကျွန်နော့်လီးက သူမ မျက်နှာနှင့် တတန်းတည်း ။ ထို့နောက် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး က ကျွန်နော့် လီးတံဆီကို လက်လှမ်းလိုက်တယ်။ ” ပွမ်ပွမ် ” ကျွန်နော်ရော ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကော လန့်ဖျန့် သွားတယ် ။ အိမ်ရှေ့မှ ကားဟွန်းသံ ။ ကျွန်နော် ဘေးနားမှာ ချွတ်ထားသော ဘောင်းဘီ ကို အမြန်ကောက်ဝတ် သူမကလည်း ဘေးမှ ဂါဝန်ကို ခေါင်းမှ လျှို ဝတ်ကာ အခန်းအတွင်း မှ အိပ်ယာခင်းတွေ သေချာပြန်ဖြန့် ကာ ဧည့်ခန်း ကို ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်လာ လိုက်တယ် ။
ပီးတော့ ကျွန်နော်လည်း ရုပ်တည်တည် ဖြင့် ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေလိုက်ပီး သူမက တော့ အိမ်ရှေ့ တံခါးကို သွားဖွင့်ပေး တယ် ။ ဂျာကြီး ရောက်လာတာ လည်း မြန်လိုက်တာ လို့ စိတ်ထဲမှာ တွေးပီး နာရီကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်နော် တို့ အလုပ်ဖြစ်နေတာ လေးဆယ့် ငါးမိနစ် ကျော်သွားတာ သိလိုက်ရတယ် ။ ဂျာကြီး ရောက်လာပီး ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး လည်း အခန်းထဲ ဝင်သွားတယ်။ ကျွန်နော် နဲ့ ဂျာကြီး အလုပ်ကိစ္စ တွေ ပြောဆိုပီး ပြန်လာဖြစ်လိုက်တယ် ။ ကျွန်နော့် ညီတော်မောင်ကတော့ အဆင်မပြေဘူး ။ အခန်းကို ပြန်ရောက်မှ ပဲ ကျွန်နော် ဂွေလိမ့်လိုက်ရင်း အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ရတယ် ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကို ကျွန်နော် ပိုင် နေပီလေ ။ တစ်ရက်ရက်တော့ အဆင်ပြေမှာပါ ။ အခွင့်အရေးသာမယ့်နေ့ ကို စောင့်နေလိုက်တယ် ။ ဒီကြားထဲ ဂျာကြီး ကို ကျွန် နော် မျက်နှာချို သွေးကာ အလုပ်ကိစ္စ တွေ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးနေခဲ့တယ် ။ ခက်တာ တခုက ဂျာကြီး နဲ့ ရုံးမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တိုင်း သူ့မိန်းမ စောက်ဖုတ် ကြီး ပြေးပြေးမြင်နေမိတယ် ။
ဂျာကြီးမိန်းမကို ကျွန်နော် ဂျာ ပေးထားတာကို တော့ ဂျာကြီးကတော့ မသိရှာ။တစ်ရက် တနင်္ဂနွေ နေ့ နေ့လည်ခင်း ကျွန်နော့်အခန်းမှာ အခန်းအောင်းပီး အိပ်နေတုန်း ဂျာကြီး ဆီက ဖုန်းလာတယ် ။ ဂျာကြီး အိမ်ကို သွားဘို့ ကို အလုပ်ကိစ္စက လည်း မရှိဖြစ်နေတာ။ ဂျာကြီးက ညနေ ဂေါက်ရိုက်ချိန်းထားတာ သူ့မိန်းမ ကလည်း သူ့ သူငယ်ချင်း အိမ် ကိစ္စ ရှိလို့ သွားစရာရှိနေလို့ ကျွန်နော့် ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတယ် ။ သူ့မိန်းမကိုကား ခနလိုက် မောင်းပေးပါဆိုပီး အကူအညီတောင်းလာတယ် ။ ” ညီလေး ညနေ လေးနာရီလောက် လာခဲ့ပေးပါကွာ ကူညီပါဦး အကိုလည်း ချိန်းထားပီးသားကြီး ဖြစ်နေလို့ မင်းအမ ကို ကားလိုက်မောင်းပို့လိုက်ပါဦး အားတယ် မလားညီလေး ” “.ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် ဂျာ ကြီး ကျွန်နော် လာခဲ့လိုက်ပါ့မယ် ” “.အေးအေး ကျေးဇူးညီလေးရာ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော် မင်းအမ က တစ်နေရာ သွားရင် အရမ်းကြာတတ် လို့ ညီလေး စိတ်တော့ ရှည်ပေးပါ ”
“.ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ် ဂျာကြီး ကျွန်နော် အဆင်ပြေပါတယ် ” ဂျာ ကြီး ဖုန်းချသွားပီး ကျွန်နော်လည်း ချက်ချင်း မြို့ အစွန်က ကျွန်နော့် အသိ တည်းခိုခန်း ကို ဖုန်းဆက်ပီး ဘွတ်ကင်လုပ်ထားလိုက် တယ် ။ ဒီကိစ္စ က ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး အကွက်မှန်း ကျွန်နော် သိတယ် ။ ဂျာကြီး ဂေါက်ရိုက်နေတဲ့ အချိန် အပြင်ထွက်ဘို့လုပ်တယ် ဆို ကတည်းက ကျွန်နော် ဘာဆိုတာ သဘောက်ပေါက်လိုက်တယ် ။ ညနေ သုံးနာရီ ခွဲ ကတည်းက ကျွန်နော် ဂျာကြီး အိမ်ကို ရောက် သွားတယ် ။ အိမ်ထဲ ဝင်လိုက်တော့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဦး ကို မတွေ့ ဂျာကြီးက ဂေါက်ရိုက်သွားဘို့ ပြင်ဆင်နေပီး ဂေါက်ဖ် အိတ်တွေ ကား ပေါ် တင်နေတယ် ။ ” ကဲ ညီ
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ခိုးစားတဲ့အသီးက ပိုခြိုတယျ